Dr. Tint Swe's Writings: October 2019
၁။ အရပ်လေးမျက်နှာမှ လေးကောင်သော နွားလားဥသဘတို့သည် လာလတ်၍ မင်းရင်ပြင်၌ ဝှေ့မည်ဟု တွန်မြည် ကြုံးဝါးလျက် မဝှေ့ပဲသာလျှင် ဖဲလေကုန်သည်ဟု မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ အရပ်လေးမျက်နှာမှ မိုးတို့သည် ရွာအံသကဲ့သို့ ထစ်ကြိုးလျက် မရွာပဲသာလျှင် ပျောက်ပျက် ကုန်လတ္တံ့။ ထိုအခါ ကောက်ပဲသီးနှံတို့ ပျက်စီး၍ လူတို့၌ အစာရေစာ ရှားပါးငတ်မွတ်ခြင်း ဖြစ်လတ္တံ့။
၂။ နုနယ်သေးငယ်စွာသော အပင်တို့သည် ပွင့်ကြ၊ သီးကြသည်ကို မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ ဆုတ်ယုတ်သောကာလ လူတို့ အသက်တန်းတိုသော ကာလ၌ ယောက်ျား မိန်းမတို့သည် ထက်သန် ပြင်းသော ရာဂ ရှိကုန်သည် ဖြစ်၍ ငယ်ရွယ်စဉ် အခါ၌ပင် အိမ်ထောင်ပြုခြင်း၊ သားမွေးခြင်း တို့ကို ပြုကုန်လတ္တံ့။
၃။ နွားမကြီးတို့သည် မိမိတို့ မွေးစဖြစ်သော နွားမငယ်တို့၏ နို့ကို စို့သည်ဟု မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ ကြီးသောသူတို့အား အရိုအသေပြုခြင်း ပျောက်ကွယ်သောကာလ၌ အမိအဖ၊ ယောက္ခမ စသူတို့သည် ကိုးကွယ်ရာ မရှိကုန်သည် ဖြစ်သဖြင့် မိမိတို့၏ သားသမီး သားမက် ချွေးမ စသူတို့ထံ၌ ကပ်ရပ်၍ ငြိုငြင် ညှိုးငယ်စွာ အသက်မွေးရကုန်လတ္တံ့။
၄။ လှည်းတို့၌ ဝန်ကို ဆောင်နိုင်သော နွားကြီးတို့ကို မကမူ၍ နွားငယ်တို့ကိုသာ ကစေကုန်၏။ နွားငယ်တို့လည်း ဝန်ကို မနိုင်၍ လှည်းတို့ကိုလည်း ဆွဲခြင်းငှာ မတတ်နိုင်သည်ကို မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ အသက်ကြီးဝါကြီး ပညာရှိကုန်သော သူတို့အား အမတ်၊ တရားသူကြီး စသော ရာထူးစည်းစိမ်တို့၌ မခန့်ထားမူ၍ အသက်၊ ဝါ၊ ပညာ ငယ်ကုန်သော လူငယ်တို့အားသာ ခန့်ထားကြလတ္တံ့။ ထိုအခါ အခွင့်အရေးမသိ၊ မတော် မမှန်ဖြစ်၍ အမှု မပြီး၊ အကျိုးမပြီး ရှိသောအခါ လူငယ်တို့သည် မိမိတို့၏ ရာထူး စည်းစိမ်ကို စွန့်ကြလတ္တံ့။ လူကြီးတို့သည်လည်း ငါတို့မှာ ပြင်ပကသာ ဖြစ်၏ဟု လျစ်လျူပြု၍ နေကြလကုန်လတ္တံ့။ သို့ဖြစ်၍ တရားမစောင့် အမှုမပြီးကြသည်နှင့် မင်းနှင့်တကွ တိုင်းပြည်ပါ ဆုတ်ယုတ် ပျက်ဆီးကြလတ္တံ့။
၅။ ခံတွင်း နှစ်ခုရှိသော မြင်းသည် ကျွေးလာသော မုယောစပါး စသည်တို့ကို ခံတွင်းနှစ်ခုဖြင့်ပင် စားသည်ဟု မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ တရားမစောင့်သော တရားသူကြီးတို့သည် နှစ်ဖက်သော အမှုသည်တို့မှ ပေးသော တံစိုးလက်ဆောင်တို့ကို စား၍ အမှုတို့ကို မမှန်မကန် ဆုံးဖြတ်ကြကုန်လတ္တံ့။
၆။ အဖိုးတသိန်းထိုက်သော ရွှေခွက်ကို မြေခွေးဖိုအား ကျင်ငယ်စွန့်ရန် ပေး၏။ မြေခွေးလည်း ထိုရွှေခွက်၌ ကျင်ငယ် စွန့်သည်ဟု မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ အမျိုးမြတ်သော သူတို့သည် အချီးအမြှောက် မခံရ၊ ဆင်းရဲကြ၍ အမျိုးယုတ်သော သူတို့ အစိုးတရ ကြွယ်ဝ ချမ်းသာကြလတ္တံ့။ ထိုအခါ အမျိုးမြတ်တို့ အသက်မွေးခြင်းငှာ မတတ်နိုင်ကုန်သည် ဖြစ်၍ မိမိတို့ သမီးတို့ကို အမျိုးယုတ်တို့အားပေး၍ အသက်မွေး ကြကုန်လတ္တံ့။
၇။ တယောက်သော ယောက်ျားသည် အင်းပျဉ်၌ ထိုင်လျက် လွန်ကို ကျစ်၍ ခြေရင်း၌ ထား၏။ ထို အင်းပျဉ်အောက်၌ ရှိသော ဆာလောင်သော မြေခွေးမသည် ထိုယောက်ျား မသိစဉ်လျှင် ထိုလွန်ကို စား၏ဟု မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ မိန်းမတို့သည် အစားအသောက်၊ အဝတ်၊ အနေအထိုင် စသည်တို့၌ လော်လည်ခြင်း ရှိ၍ မိမိတို့ လင်ယောက်ျားသည် ဆင်းရဲငြိုငြင်စွာ ရှာဖွေ စုဆောင်းအပ်သော ဥစ္စာ ပစ္စည်းတို့ကို အဝတ်အစား၊ အစားအသောက် တို့၌ လည်းကောင်း၊ သောက်စား ကစားခြင်းတို့၌ လည်းကောင်း၊ အပျော်အပါးတို့၌ လည်းကောင်း၊ သဘောက် လင်ငယ်ထားခြင်း တို့၌ လည်းကောင်း အရမ်းမဲ့လျှင် ဖြုန်းတီးလေလတ္တံ့။ ခွေးမသည် မသိစဉ်းစားသကဲ့သို့ အိမ်သူ မိန်းမတို့သည် ဤသို့ တိတ်တဆိတ် ဖြုန်းတီး ခိုးစားကြလတ္တံ့။
၈။ ရေမရှိသော အိုးတို့ဖြင့် ခြံရံအပ်သော ရေပြည့်အိုးကြီး တလုံးကို မြင်ရ၏။ လူတို့သည် အရပ် ရှစ်မျက်နှာမှ ရေကို ယူလာကြ၍ ထိုရေပြည့်အိုးကြီး အတွင်းသို့သာလျှင် လောင်းထည့် ကြ၏။ လောင်းထည့်သော ရေတို့သည် ပြည့်လျှံ၍ ကျကုန်၏။ ဤသို့လျှင် အဖန်တလဲလဲ ရေပြည့်အိုးသို့သာ လောင်းလျှက် ရေမရှိသော အခြံအရံအိုးတို့ အတွင်းသို့ကား မည်သူမျှ မလောင်း မထည့်ပဲနေသည်ကို မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ မင်းနှင့်တကွ လူတို့ တရားပျက်ကွက်၊ ဩဇာညံ့ဖျင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းသို့ ရောက်ကြကုန်လတ္တံ့။ ထိုအခါ မင်းအစိုးရတို့သည် ဆင်းရဲသားတို့အား မင်း၏အကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုသာ လုပ်ကိုင်စေအံ။ ဆောင်ရွက်စေအံ။ ထမ်းရွက်စေအံ။ သို့ဖြစ်ရကား မင်းတို့၌သာ ပြည့်စုံ အကျိုးခံစားကြရ၍ ဆင်းရဲသားတို့မှာ ရေမရှိသော အိုးတို့ပမာ တစုံတရာမရှိ ငတ်မွတ် ခေါင်းပါးခြင်းသို့ ရောက်ကုန်လတ္တံ့။
၉။ နက်ရှိုင်းကျယ်ဝန်းသော ရေကန်ကြီးတခုတွင် သတ္တဝါတို့ ဆင်း၍ ရေသောက်ကြ၏။ ကန်၏အလယ် ရေနက်ရာ၌ ရေသည် နောက်၍ ကန်နားဝန်းကျင် ရေတိမ်ရာ သတ္တဝါတို့ နင်းရာ၌ ရေသည် ကြည်လင်၏ဟု မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ တရားမစောင့်သော မင်းတို့သည် မတရား အုပ်စိုးခြင်း၊ တံစိုးစားခြင်း၊ လော်လည်ခြင်း၊ သနားညှာတာ ကရုဏာ မဲ့ခြင်း၊ ကြမ်းကြုတ် ရက်စက်ခြင်းတို့ ရှိလျှက် လူတို့အပေါ်၌ အထူးထူး အပြားပြားသော အချင်းအရာဖြင့် အခွန်အတုတ် တို့ကို ခွဲခန့် ကောက်ယူလတ္တံ့။ ထိုအခါ လူတို့မှာ တစုံတရာ မပေးဆောင်နိုင် ပင်ပန်းဆင်းရဲလျက် မြို့ကြီးရပ်ကြီးတို့၌ မနေနိုင်ပဲ ရပ်စွန် ပြည်နားသို့ သွားရောက်နေကြရသည် ဖြစ်လတ္တံ့။ ကန်အလယ်တွင်နောက်၍ ကန်ဘေးတွင် ကြည်သကဲ့သို့ မြို့လယ်ရွာလယ်၌ တိတ်ဆိတ်၍ ရပ်စွန်ပြည်နား၌ လူစည်ကားလတ္တံ့။
၁၀။ တလုံးတည်းသော အိုးဖြင့် တချိန်တည်းချက်သော ထမင်းသည် အချို့ပျော့၏၊ အချို့ မနပ်၊ အချို့နပ်၏။ ဤသို့ မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ မိုးကွက်ကြား ရွာလတ္တံ့။ ထိုအခါ အချို့နေရာ၌ မိုးရွာလွန်း၍ ကောက်ပဲသီးနှံ ပျက်အံ။ အချို့နေရာ၌ မရွာ၍ ပျက်အံ။ အချို့နေရာ တွင်ကား မိုးမှန်၍ ကောင်းအံ။ ဤသို့လျှင် ထမင်းအိုးတွင် မြင်သော ထမင်းကဲ့သို့ ကောက်ပဲသီးနှံ သုံးထွေ ပြားလတ္တံ့။
၁၁။ အဖိုးတသိန်းထက်သော စန္ဒကူးနှစ်ကို ယက်တက်ပုပ်ရည်ဖြင့် ရောင်းစားသည်ကို မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ ငါဘုရား၏ သာသနာတော် ဆုတ်ယုတ်သော ကာလတွင် လော်လည်၍ လာဘ်လာဘကို မက်မောကုန်သော ရဟန်းအလဇ္ဇီ လူအလဇ္ဇီတို့သည် ဆွမ်း၊ ဆေး၊ ကျောင်း၊ သင်္ကန်း ဥစ္စာပစ္စည်း စသည် တို့ကို အလိုရှိကုန်သည် ဖြစ်၍ လမ်းခရီးဆုံ၊ အိမ်ဝ၊ အိမ်ကြို အိမ်ကြားတို့၌ ငါဘုရား၏ တရားတော်ကို ဟောကြားလတ္တံ့။ နိဗ္ဗာန် အလို့ငှာ ဟောတော် မူအပ်သော အလွန် မွန်မြတ်သော တရားတော်ကို တပဲ၊ တမူး၊ တကျပ် စသည်တို့ အကျိုးငှာ ရောင်းစား ဟောပြော ကြသည်ဖြစ်၍ တသိန်းထိုက်သော စန္ဒာကူးနှစ်ကို ယက်တက်ပုပ်ရည်ဖြင့် ရောင်းစား သကဲ့သို့ ဖြစ်ကုန်လတ္တံ့။
၁၂။ ဘူးတောင်းတို့သည် ရေ၌ နစ်သည်ဟု မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ အမျိုးယုတ်သော သူတို့ကိုသာ ရာထူး စည်းစိမ် ပေးသည် ဖြစ်၍ အမျိုးယုတ်တို့ တန်ခိုး အာဏာ ကြီးမား ထင်ပေါ် အရာရာတွင် တွင်ကျယ်လျက် ၎င်းတို့ စကားသာလျှင် ဘူးတောင်း နစ်သကဲသို့ နစ်၍ တည်ကုန်လတ္တံ့။
၁၃။ ကျောက်ဖျာကြီး ရေတွင်ပေါ်သည်ဟု မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ တော်မှန် လိမ္မာ ပညာရှိသော သူတို့၏ စကားသည် မည်သည့် အရာ၌မဆို လေးသောကျောက်ဖျာ ရေတွင် ပေါ်သကဲ့သို့ နစ်တည် ခြင်းမရှိ၊ မခိုင်မမြဲ ရှိကြကုန် လတ္တံ့။
၁၄။ ဖားငယ်မ တို့သည် ကြီးစွာသော မြွေဟောက်ကြီးများကို စားမြိုသည်ဟု မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ လူတို့သည် ပြင်းသော ရာဂ ရှိကုန်သည် ဖြစ်၍ ကိလေသာ အလိုသို့ လိုက်လျက် ငယ်ရွယ်ကုန်သော မယားတို့၏ အလိုသို့ လုံးဝ လိုက်ကြကုန် လတ္တံ့။ အလုပ်အကိုင်မှု၊ ဥစ္စာ ပစ္စည်းမှု၊ ကျေးကျွန်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု စသော အရပ်ရပ်တို့၌ လင်ပေါ်တွင် လွှမ်းမိုးအုပ်စိုးခြင်းကို ပြုကြမည် ဖြစ်ရကား ဖားငယ်မသည် အဆိပ်လျင်သော မြွေကို စားမျိုသကဲ့သို့ ဖြစ်ကုန်လတ္တံ့။
၁၅။ မည်းနက် ရုပ်သွင်၊ အဆင်း ဆိုးဝါးသော ကျီးတို့ကို ရွှေ၏ အဆင်းနှင့် တူသော ရွှေဟင်္သာတို့က ခြံရံနေကြသည်ကို မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ အားနည်းသောမင်းတို့ လက်ထက်၌ ထိုမင်းတို့သည် ဆင်စီး မြင်းစီး စသော အတတ်တို့၌ မလိမ္မာ၍ စစ်ထိုးခြင်း၌ မရဲရင့်ဘဲ ဖြစ်ကြကုန်လတ္တံ့။ ထိုအခါ တိုင်းပြည်နိုင်ငံ ဆုံးရှုံးမည်ကိုစိုး၍ တူသောဇာတ်ရှိသော သူကောင်းသားတို့အား အစိုးရခြင်းကို မပေးမူ၍ မိမိတို့ထံ၌ ခစားကြကုန်သော အမျိုးယုတ်သော ကျေးကျွန်တို့အားသာ ပေးကုန်လတ္တံ့။ သို့ဖြစ်၍ အမျိုးကောင်းသားတို့ ကိုးကွယ်ရာမရှိပဲ အစိုးရခြင်း၌ တည်ကုန်သော အမျိုးယုတ်တို့ထံ၌ ခစားကြကုန် လတ္တံ့။
၁၆။ ဆိတ်တို့သည် ကျားသစ်ကို သတ်စားကြသဖြင့် ကျားသစ်တို့သည် ကြောက်လန့်လျက် ဆိတ်တို့ကို အဝေးမှ မြင်လျှင်ပင် တောချုံရှိရာသို့ ပြေးကြသည်ကို မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ အမျိုးယုတ်သော သူတို့ အစိုးရကုန်သည်ဖြစ်၍ အမျိုးမြတ်သူတို့ မထင်ရှား ဖြစ်လတ္တံ့။ အမျိုးယုတ် သူတို့မှာ မင်းကျွမ်းဝင်သည် ဖြစ်၍ တရားရုံးတို့၌ ဩဇာအာဏာ လွှမ်းမိုးလျက် အမျိုးမြတ်သူတို့၏ ဘိုးဘပိုင် လယ်မြေ ဥစ္စာ အရပ်ရပ်တို့ကို ငါတို့ လယ်မြေဥစ္စာ ဖြစ်သည်ဟု သိမ်းယူကြ၍ တရားတဘောင် ဖြစ်လျှင် တန်ခိုးမဲ့သူတို့အား ဖိနှိပ်ပုတ်ခတ် ခြိမ်းခြောက် နှင်ထုတ်လျက် အနိုင်ကျင့် ကြကုန်လတ္တံ့။ ထိုအခါ အမျိုးမြတ်သူတို့ ကြောက်လန့် စက်ဆုတ်ကုန်သည် ဖြစ်၍ လယ်ယာ ဥစ္စာတို့ကို ပေးအပ်ကုန်လျက် အိမ်သို့ပြန်၍ အိပ်နေကြကုန်အံ။ ထိုမှ တပါးလည်း အကျင့်သီလရှိသော ရဟန်းတို့သည် အကျင့်သီလမဲ့သော ရဟန်းတို့က ချုပ်ချယ် ဖိနှိပ်ကြလေသဖြင့် တောသို့ ပြေးဝင် ပုန်းအောင်း ကြကုန်လတ္တံ့။ ဤသို့လျှင် အမျိုးကောင်း၊ သူတော်ကောင်း တို့လည်း လွတ်ရာ ကျွတ်ရာ တောတောတောင်တောင် တို့ကို ပြေးပုန်းကြကုန်လတ္တံ့။
နောင်အခါကို ယခုအခါဟု နားလည်နိုင်ပါသည်။ ဆောရီး။ ကန်တော့။
Tuberculosis vaccine တီဘီ ခေါ် ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးသစ် နီးစပ်လာပြီ
နှစ်စဉ်ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူနာသစ်ပေါင်း တသန်းခွဲ တီဘီ ဖြစ်နေရတယ်။ ကလေးတွေမွေးကတည်းက BCG ထိုးပေးတာ ထိရောက်မှု အားမကောင်းလှပါ။ ဆောရီး။
ကာကွယ်ဆေးသစ်ကို တောင်အာဖရိက၊ ကင်ညာနဲ့ ဇမ်ဘီယာနိုင်ငံတွေမှာ လူကြီး ၃၅၀၀ ကိုစမ်းသပ်ပြီးပါပြီ။
တီဘီဟာ အဓိက အဆုတ်ကိုရောဂါရစေတယ်။ ကာကွယဆေးသစ်ကို အများသုံးနိုင်ဘို့ ၂၀၂၀ ကျမှဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အိန္ဒိယမှာ ၂၇%၊ တရုပ်မှာ ၉%၊ အင်ဒိုနီးရှားမှာ ၈%၊ ဖိလစ်ပိုင်မှာ ၆%၊ နိုင်ဂျီးရီးယားမှာ ၄%၊ ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှမှာ ၄% နဲ့ တောင်အာဖရိကမှာ ၃% တီဘီဖြစ်တယ်။ အိန္ဒိယမှာ နှစ်စဉ် လူ ၄ သိန်း တီဘီနဲ့သေဆုံးနေတယ်။ ဆောရီး။
၂၀၁၀ စာရင်းတွေအရ လူပေါင်း ၁၀ သန်း တီဘီကူးစက်ခံထားရတယ်။ လူဦးရေ ၂၅% မှာ ငုပ်နေတဲ့တီဘီရှိကြတယ်။ သူတို့ထဲက ၅% ကနေ ၁၀% တိုးဟာ တချိန်မှာ တီဘီရောဂါဖြစ်လာနိုင်တယ်။ MDR-TB ခေါ် ဆေးယဉ်တီဘီကလည်း ဆိုးတယ်။ ဆောရီး။
မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကို သတင်းထဲမှာ မတွေ့ပါ။ အခြေအနေကတော့ သိပ်မကောင်းလှ။ ပြည်ပအလုပ်သွားလုပ်ချင်သူတွေ ဆေးမအောင်တာ အဆုတ်မှာ အစက်အပျောက်နဲ့ အမာရွတ်တွေကြလို့ဖြစ်တယ်။ ဆောရီး။
TB writing links တီဘီရောဂါစာများ
1. BCG vaccine တီဘီ ကာကွယ်ဆေး http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/01/bcg-vaccine.html
2. Bone tuberculosis အရိုး တီဘီ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/10/bone-tuberculosis.html
3. Infertility and TB (1) တီဘီ ဆေးနဲ့ ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/infertility-and-tb-1.html
4. Infertility and TB (2) တီဘီ ဆေးနဲ့ ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/infertility-and-tb-2.html
5. Intestinal Tuberculosis အူ (တီဘီ) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/01/intestinal-tuberculosis.html
6. MDR TB Q and A ဆေးယဉ်တဲ့တီဘီ အမေး-အဖြေ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/mdr-tb-q-and.html
7. Pleural effusion အဆုပ်အိတ်ထဲ အရည်အောင်းခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/pleural-effusion.html
8. Primary Complex ကလေးတီဘီ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/11/primary-complex.html
9. TB (Tuberculosis) တီဘီ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2008/10/tuberculosis-tb.html
10. TB Medicines Side Effects (တီဘီ) ဆေးတွေ နဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/04/side-effects-of-tb-medicines.html
11. TB Q and A (တီဘီ) အမေး-အဖြေ (၁) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/09/tb-q-and.html
12. TB Q and A (တီဘီ) အမေးအဖြေ (၂) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2014/01/tb-questions.html
13. TB Signs & Symptoms တီဘီရောဂါလက္ခဏာများ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/tb-signs-symptoms.html
14. TB အသစ်လား အဟောင်းလား http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/05/tb.html
15. Tuberculin test (တီဘီ) အတွက် (ကြူဘာကူလင် တက်စ်) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/10/tuberculin-test.html
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းမှာ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကို မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃ ခုနှစ် ပေါင်းလပြည့်မှာ ဌာပနာသွင်းပြီး တည်ထား ကိုးကွယ်တယ်လို့ ရေးထားတယ်။ မြန်မာလိုရေးတဲ့ ဝီကီပီးဒီးယားမှာ ဘီစီ ၅၈၈ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း၂၆၀ဝ ကျော် မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃ ခုလို့ရေးထားတယ်။
အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့ ဝီကီပီးဒီးယားမှာ Siddhārtha Gautama သိဒ္ဓတ္ထဂေါတမ 563 BC နဲ့ 483 BC ကြားလို့ ရေးထားတယ်။ ဘီစီ ၅၆၃ ခုမှာ ဘုရားလောင်း သိဒ္ဓတ္ထမင်းသား ဖွားမြင်တယ်။ ဘီစီ ၄၈၃ မှာ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်။
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘိုးတော် ဒေဝဒဟဘုရင် အဉ္စနမင်းကြီးလက်ထက်မှ သက္ကရာဇ် ၈၆၄၅ ခုကို ဖြိုပြီး မဟာသက္ကရာဇ် စတင်တယ်။ ဘုရားဖွားတော်မမူမီ ၆၈နှစ် အလိုကဖြစ်တယ်။
ဘုရားရဲ့သက်တော် ၈၀ မှာ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၄၈ နှစ်ကျရောက်တယ်။ အဲဒီ ၁၄၈ နှစ်ကို ဖြိုပြီး သာသနာသက္ကရာဇ်ကို စပြီးတွက်တယ်။ သာသနာတော် အနှစ် ၅၀⁠ဝ၀ သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီး လေးလအကြာ ပထမသံဂါယနာ တင်တော့ သက္ကရာဇ် ၁၄၈ ကိုဖြိုပြီး သာသနာနှစ်သက္ကရာဇ် (၁)ခု ကြွင်းထားရာကနေ သာသနာသက္ကရာဇ် ပေါ်ပေါက်လာတယ်။
မြန်မာသက္ကရာဇ်လို့လည်းခေါ်တယ်။ သရေခေတ္တရာခေတ် သုမုန္ဒရီမင်းလက်ထက်ကစတယ်။ လက်ရှိသုံး မြန်မာပြက္ခဒိန် ဖြစ်တယ်။ ကနေ့ဟာ ၁၃၈၁ ခုနှစ်ထဲမှာ။
၄။ ဘီစီ ခရစ်သက္ကရာဇ်
ခရစ်တော် မပေါ်မီကာလ နောက်ပြန်ရေတွက်ရတယ်။ မြတ်စွာဘုရားသက်ရှိထင်ရှားရှိခဲ့တဲ့ ခုနှစ်ဟာ ဘီစီ ၅၆၃ နဲ့ ၄၈၃ ကြားဖြစ်တယ်။ တနည်းအားဖြင့် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅၀၂ နဲ့ ၂၅၈၂ ကြားမှာဖြစ်တယ်။
၅။ အေဒီ ခရစ်သက္ကရာဇ်
ခရစ်တော် ပေါ်ပြီးနှစ်မှစ၍ အစဉ်အတိုင်း ရေတွက်ရတတယ်။ လက်ရှိသုံး အင်္ဂလိပ် ခေါ် Gregorian ဂရီဂိုရီးယန်း ပြက္ခဒိန်။ ၁၅၈၂ မှာ စတင်သုံးစွဲတယ်။ အဲတာအရင် ဂျူးလီယက်ဆီဇာလက်ထက် ဘီစီ ၄၆ မှာ စသုံးတဲ့ Julian ပြက္ခဒိန်မှာ တနှစ်မှာ ၁၀ လ (Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November, and December) သာပါတယ်။
သာသနာသက္ကရာဇ် ၂၄၉၈ ခုနှစ် (၁၉၅၅) မှာ ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာသဘင် ကျင်းပခဲ့တယ်။
ကောဇာသက္ကရာဇ်ကို ၁၁၈၂ နှစ် ထည့်ပေါင်းလျှင် သာသနာနှစ်ရမယ်။ ခရစ်နှစ်ကို ၅၄၃ ပေါင်းပါက သာသနာနှစ်ရမယ်။
အခုနှစ် ၁၃၈၁ မှာ သာသနာ ၂၅၆၃ နှစ်ရှိပြီ။
သာသနာနှစ် ၂၄၉၈၊ (ခရစ်နှစ် ၁၉၅၄၊ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၁၆) ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ ကမ္ဘာအေး ကုန်းမြေ၊ မဟာပါသာဏလိုဏ်ဂူတော်ကြီး၌ ဆဋ္ဌမသင်္ဂါယနာ တင်ခဲ့ကြသည်လို့ ဖတ်ရတယ်။ သာသနာ ၂၅၀၀ ပြည့်ကိုရည်ရွယ်ကျင်းပခဲ့တာ။ ကျွန်တော်က ၆ နှစ်သား မှတ်မိတယ်။ မနှစ်ကနွေမှာ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကို ဖူးခဲ့ကြရတယ်။ ဆယ်တန်း မြန်မာစကားပြေစာအုပ်မှာ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကို ပြည့်မျက်နှာလို့ ဖတ်ရတယ်။
- October 26, 2019 No comments:
Questions on 24-10-2019
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရေးသားပြီး ဒေါက်တာအောင်ခင် (လန်ဒန်) တည်းဖြတ်တဲ့ စာအုပ်ငယ်လေးကို ဒီမိုကရေစီရရှိရေး ပြည်ပလှုပ်ရှားမှုကနေ ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ စာအုပ်ပါသတ်ပုံတွေကို တင်ပြပါတယ်။
ကွန်မင့်တခုရတယ်။ အရေအတွက်တိုင်းမှာ တစ်၊ နှစ်၊ သုံး၊ လေး စသည်ဖင့် ရေတွက်ရသည် မဟုတ်ပါလား တဲ့။
တစ်ကို အရေအတွက်လို့မှတ်တာ မတိကျပါ။ ဂဏန်းဆိုရင် တစ်လို့က ပိုပြီးမှန်တယ်။ တ နဲ့ တစ် အခါတရာကျော်မှာ နမူနာပုံတရာကျော် တင်ပြထားပြီး။ စသဖြင့်၊ စသည်သဖြင့်လို့ ရေးရတယ်။
ဖင့် = လေးလံ ဖင့်နွှဲသည်
ဖြစ်ကိုလည်း ရရစ်မပါပဲရေးနေကြတာ မှားတယ်။
မိုးပေါ်မှာ ကြယ်တလုံး တိမ်ဖုံးပါလို့ လမသာ
နတ်ဒေဝါ သူဖန်ဆင်းတယ် ဖိုးရွှေလမင်း။
ကြယ် နှင့် လ
Phyu Phyu Win ကျေးဇူး။
Mirror Letters မှန်စာ
ရွှေလရယ်သာ၊ ဖျင်းကိုခါလို့ ဖျာကိုခင်း၊ ယာကိုရှစ်လို့ ရစ်ကိုရှာ၊ သဝင်ရုံးလို့ သရုံးဝင်၊ ရောင်ရွှေရစ်ကယ် ရစ်ရွှေရောင်၊ မာမလောင်တော့ မောင်မလာ၊ ပျို့ရွှေနှဖာစူးတော့ မောင့်ရွှေနှဖူးစာ။ အမှားတွေကတော့ပါမှာပါ။ အဲတာ ၁တန်း ၂တန်း ဘယ်အတန်းကကဗျာလည်းမသိဘူး။ ငယ်တုန်းက ဆိုကောင်းလို့မှတ်မိနေတာပါ။
အတာမျိုးကို မှန်စာ သို့မဟုတ် ကြေးမုံစာခေါ်တယ်။ တချို့က နားမလည်ကြပါ။ ဒေလီမှာ ဆရာ့ဆေးခန်းမှာလာကူကြတဲ့ တိုင်းသားလူမျိုးစုထဲက ဆရာမလေးတွေကို မွေးလူနာစောင့်နေရင်း ဘီးကြိုက်ဆိုတာ ဘာလဲမေးတာ ဘီးကြိုက် ကြိုက်ဘီးလို့ ဖြေတယ်။
အင်းဗျူးလင့်စ် ခေါ် လူနာတင်ယာဉ်တွေရဲ့ ကားရှေ့မှန်ပေါ်မှာ စာလုံးပေါင်းကို မှန်စာနဲ့ရေးထားလေ့ရှိတယ်။ ရှေ့ကသွားနေတဲ့ကးရဲ့ နောက်ကြည့်မှန်ကနေ အတည့်မြင်ရတယ်။
မော်ဒန်ကာတွန်းထဲမှာ ကာတွန်းအောင်ရှိန်ရေးတာတခု ခုထိအမှတ်ရတယ်။
ရော်ပေ လောက်ရှမ်း အထန်း အဆူးတဲ့။ လူရိုင်းတယောက် ရေပေါ်မှာ လမ်းသလားနေတယ်။ အမှန်က ရေထဲငုပ်နေကြတဲ့ တခြားလူရိုင်းတွေရဲ့ ခေါင်းပေါ်ကနေလျှောက်နေတာ။
တလောကလုံးသည် အိပ်မောကျနေပြီဖြစ်သော်လဲ ကျွန်တော်သည် အိပ်၍မရပါ။ အိပ်၍မမဖြစ်ရခြင်းလောက် ဆိုးဝါးခံခက်သော ဒုက္ခထက်ကြီးလေးသောဒုက္ခအား အိပ်၍မရဖြစ်ဘူးသောသူတိုင်းတော့ စာနာစွာ စဉ်းစားနိုင်မိကြပါလိမ့်မည်။ နာရီပြန် ၂ ချက်တီးသံကို မကြာကလေးမှီက ကျွန်တော်သည် ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာ ကြားသိခဲ့ရပါ၏။ ယခုအချိန်တွင် တလောကလုံးသည် နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက် အိပ်မောကျနေပြီဖြစ်သော်လဲ ကျွန်တော်သည် အိပ်၍မရပါ။
(တစ်) လောကလုံးသည် နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက် အိပ်မောကျနေပြီဖြစ်သော်လဲ ကျွန်တော်သည် အိပ်၍မရပါ။
Photo from Aungmyint Oo ကျေးဇူး
Dye ဆိုးဆေးလား ဆိုးစေတဲ့ဆေးလား
ဆရာ မင်္ဂလာပါ။ သိချင်တဲ့ခေါင်းစဉ် အကြောင်းရာကတော့ ခုခေတ် လူငယ်တွေ ဆံပင်ဆေးဆိုးကြတဲ့ အကြောင်းပါဆရာ။ ကျွန်မအသက် ၂၉ ပါ အထက်တန်းအောင်ပြီး ၁၆နှစ်ကတည်းက ဆံပင်ဆေးဆိုးလာတာ ခုထိဆိုးတုန်းပါပဲ။ ဖြူလို့ဆိုးခြင်း မဟုတ်ပါ၊ လှချင်၍ အရောင်ဆိုးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဓိကမေးလိုသည်မှာ အရောင်ဆိုးတာ ဘယ်ကိုယ်တွင်းအဂါင်္ကို ထိခိုက်ပါသလဲရှင်။ ကျွန်မ ဘယ်အရာကို medical check လုပ်သင့်ပါသလဲရှင်။ ယနေ့ခေတ်သည် ကင်ဆာလူနာ အများပြားတွေ့ရ၍ ယခုမဖြစ်ခင် အချိန်တွင် တစုံတခုကြောင့် ပေါ့ဆပြီး အချိန်လွန်မှ ရောဂါဖြစ်ပွားမှာကို ကြောက်ရွံ့သောကြောင့် ဖြေပေးစေလိုပါသည်ရှင်။ လူငယ် အများစုကိုယ်စား နောက်ပြီး ကျွန်မအနေနဲ့လဲ တကယ်ကို စိုးရိမ်မိ၍ မေးခြင်းဖြစ်ပါသည် ဆရာရှင့်။ ဆရာ ကျန်းမာချမ်းသာခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ။
Beauty Product Dangers အလှအပသုံးပစ္စည်းတွေရဲ့ အမှန်တရား https://doctortintswe.blogspot.com/2017/02/beauty-product-dangers.html
Beauty Product Risks အလှအပသုံးရောင်းကုန်များ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/10/beauty-product-risks.html
Dye ဆိုးဆေးလား ဆိုးစေတဲ့ဆေးလား https://doctortintswe.blogspot.com/2018/01/hair-dye.html
Hair & Health ဆံပင်က သင့်ကျန်းမာရေးကို ပြောနေတယ် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hair-health.html
Hair Care During Pregnancy ဆံပင်နှင့် ကိုယ်ဝန် https://doctortintswe.blogspot.com/…/hair-care-during-pregn…
Hair dye reactions ဆံပင်ဆိုးဆေး သတိပေး https://doctortintswe.blogspot.com/…/hair-dye-reactions.html
Hair Dye ဆံပင်ဆိုးဆေး သတိပေး https://doctortintswe.blogspot.com/2016/11/hair-dye.html
Hair salon ဆံပင်အလှပြင်သူတွေအတွက် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/hair-salon.html
သမီးအကြီးက အသက် ၆၅ပါ ဗိုက်ရဲ့အောက် ပေါင်ရင်းထိပ်ဘက်ခြမ်းက နာနာနေတာ ကြာပါပြီ
သမီးအကြီးက အသက် ၆၅ပါဆိုတာ မရှင်းပါ။
ဟုတ်ကဲ့ဆရာ သမီးရဲ့ ကြီးဒေါ်ပါ သူ့ ရဲ့အသက်က ၆၅နှစ်လို့ ပြောတာပါ ဆရာ
ဒါကနမူနာတခုသာ။ ကိုယ့်မိသားစုတခုတည်းသာခေါ်ဝေါ်တာမျိုးကို ကျွန်တော်က မသိနိုင်ပါ။ အမေ-အဖေ-အမ-အကို-ဦးလေး-ဒေါ်လေးတော့ သိပါတယ်။
အဲလိုပဲ ကိုယ့်နာမည်ကို အဖျားဆွတ်ပြောလေ့ရှိသူတွေက အဲလိုရေးမေးကြတာကိုလည်း နားမလည်ပါ။ စဉ်းစားနေရတာ အချိန်ပိုကုန်စေတယ်။ အားနာလို့ နမူနာမပေးတော့ပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သားလို့ရေးရင် ရေးတဲ့သူလား၊ သူ့သားလား စဉ်းစားရတယ်။ သမီးလို့ ရေးတဲ့သူဆိုရင် ရေးတဲ့သူလား၊ သူ့သမီးလား၊ သမီးရဲ့သမီးဆိုရင် သူ့မြေးမလား။ သားရဲ့ ကောင်မလေးဆိုရင် သူ့ချွေးမလား။ သမီးကောင်လေးဆိုရင် သူ့သားမက်။ နမူနာစာတွေ အများကြီးရှိတယ်။
ဆရာဝန်ကိုလည်း အမျိုးစပ်မခေါ်အပ်ပါ။ တည်တည်တန့်တန့် အပိုအလိုမပါ ရေးသင့်ကြပါတယ်။
အသက်က ၂၂ ပါဆရာ ကျားပါ ခေါင်းမှာ အနာလေးတွေ ပေါက်နေလို့ပါ အစကနည်းနည်းကနေများလာလို့ပါ အောင့်ပါတယ် အနာက ရင်းနေပါတယ် တလနီးပါးလောက် ရှိပါပြီခင်ဗျ
1. Abscess ခူနာ ခေါ်သော ပြည်တည်နာ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/…/04/blog-post.html
2. Boils မွေးကျွတ်နာ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/boils.html
3. Cellulitis (သို့) Erysipelas အရေပြားရောင်နာ http://doctortintswe.blogspot.com/…/cellulitis-erysipelas.h…
4. Erysipelas အနာ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/10/erysipelas.html
5. Infections ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းများ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/infections.html
6. Injury First Aid ထိခိုက်ဒဏ်ရာပြုစုနည်း http://doctortintswe.blogspot.com/…/04/injury-first-aid.html
7. Skin infections (Ulcer) အနာ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/11/skin-infections-ulcer.html
8. Sterilization ပိုးသန့်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/sterilization.html
9. Ulcer အနာ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/11/ulcer.html
ချောင်းစိုး မဟုတ် ချောင်းဆိုးလို့ ရေးရတယ်
ဆရာရှင့် အသက် ၃၃ နှစ် ကိုယ်ဝန် ၃၇ ပတ် မြောက် မှာ နှာစီး ချောင်းစိုး ဖြစ်နေလို့ OG နဲ့ ပြန်ပြဖို့က ငါးရက်လောက် လိုပါသေးတယ် ဒီကြားထဲ အချွဲထ ပြီး ချောင်းစိုးသလိပ်ပျောက်အောင် ဘာလိုနေထိုင်သင့်လည်း ဆိုတာ အကြံပေးစေချင်ပါတယ် ညဘက်တွေ ချောင်းပိုစိုးလွန်းလို့ကောင်းကောင်းအိပ်မရပါ ဘိုက်ထဲက ကလေးတွက် ထိခိုက်နိုင်လားလည်း သိချင်ပါတယ် ဆရာ ဖြေပေးပါအုံးရှင်
Pregnancy and Antihistamines ကိုယ်ဝန်နှင့် အအေးမိပျောက်ဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pregnancy-and-antihistamines.html
Common Cold အအေးမိရင် https://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/common-cold.html
Dos and Don’ts for Common Colds အအေးမိရင် ရောင်ရန်-ဆောင်ရန်များ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/dos-and-donts-for-common-colds.html
Medicine during pregnancy ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/medicine-during-pregnancy.html
ချောင်းစိုး မဟုတ်၊ ချောင်းဆိုးလို့ ရေးရတယ်။ စိုးဆိုတာ
Facts to get pregnant ကိုယ်ဝန်ရအောင် ကြံဆောင်နည်း
မင်္ဂလာပါဆရာ သမီးအသက်က ၃၀ ပါ အမျိုးသားအသက်က ၃၃ နှစ်ပါ အိမ်ထောင်ကျတာ ၁၁ လရှိနေပါပြီဆရာ
သားသမီးရတာမျိုးရိုးနဲ့သက်ဆိုင်ပါသလားဆရာ မိဘကတနှစ်ကျော်မှကိုယ်ဝန်ရတာနဲ့ သားသမီးကရော တနှစ်ကျော်မှ ကိုယ်ဝန်ရတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါသလားဆရာ သမီးက ဆေးစစ်ချင်ပေမယ့် သမီးအမေက တနှစ်မကျော်သေးလို့ ပေးမစစ်ခိုင်းလို့ပါဆရာ ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီအကြံပေးပါဦးဆရာ
ရာသီလမှန် + မျိုးဥလစဉ်ထွက် + သားအိမ်နဲ့ မျိုးဥအိမ်တွေမှာ ရောဂါမရှိသူ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်။
ဒါဆို တနှစ်မကျော်သေးလို့မရသေးတာဆိုတာ မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်ဆရာ
Facts to get pregnant ကိုယ်ဝန်ရအောင် ကြံဆောင်နည်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/10/facts-to-get-pregnant.html
သမီးလေးရဲ့ ခဲဆိပ်အဖြေက စိုးရိမ်ရလား ဒေါက်တာ
ဆေးခန်းပြ မပြသာ မေးတာတိုင်းကို မဖြေပါ။ ဆေးပြားပုံသာ ပြမေးတာတိုင်းကို မဖြေပါ။ ဆေးစာသာ ဘာသာပြန်ခိုင်းတာကို မဖြေပါ။ စိုးရိမ်ရသလားသာ မေးတာတိုင်းကို မဖြေပါ။ အသက် ကျား မ အချက်အလက်နဲ့မေးရင် ကုသနည်း ကာကွယ်နည်းကို သိရင် ဖြေပါတယ်။
အသက် ၂နှစ်၉လ (မ) ဘေးအိမ်က ဘတ္ထရီ လုပ်ငန်း ပေါင်ချိန်မတက်တာ ကျန်းမာရေး ချုချာတာကြောင့် ခဲဆိပ်သံသယဝင်ပြီး စစ်လိုက်တာပါ ဒေါက်တာ
မေးခွန်းပါကလေးအဖြေ 4.771 ရှိ။ကလေး ၁၀ အောက် ပုံမှန်။ 45 mcg/dL နဲ့အထက်ဆို ဆေးကုသမှုခံယူရမယ်။
Lead poisoning ခဲဆိပ်သင့်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/03/lead-poisoning.html
Chronic Cough ချောင်းဆိုးနေတာ တလလောက်ရှိပါပြီ
ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက် ၃၂ ကလေးနှစ်ယောက်မိခင်ပါ။ တုပ်ကွေးဖျားပြီး ချောင်းဆိုးချွဲကြပ်ကျန်နေပါတယ်။ ဆရာဝန်များလည်းပြသပါတယ်။ ယခုတလကျော်ကြာနေပါပြီရှင့်။ အစားတော့မပျက်ပါဘူးရှင့်။ ညဆိုလည်း အရမ်းမဆိုးပဲအိပ်ရပါတယ်ရှင့်။ အရှင်းမပျောက်ပါသဖြင့် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမလဲရှင့်။
Bronchitis ဘရောင်ခိုက်တစ် https://doctortintswe.blogspot.com/2018/09/bronchitis.html
Chronic Cough ချောင်းဆိုးနေတာ တလလောက်ရှိပါပြီ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/05/chronic-cough.html
Cough Syrups ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/cough-syrups.html
Coughing into the elbow ချောင်းဆိုးခဲ့ပါသည် https://doctortintswe.blogspot.com/2019/06/coughing-into-elbow.html
Healthy culture ချောင်းဆိုး-လက်ဆေး ယဉ်ကျေးမှု https://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/healthy-culture_18.html
Influenza (Flu) တုပ်ကွေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/influenza-flu.html
Medicine for Pneumonias and Respiratory Tract Diseases နူမိုးနီးယားအမျိုးမျိုးနှင့် အသက်ရှူလမ်းရောဂါဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/medicine-for-pneumonias-and-respiratory.html
Pneumonia နူမိုးနီးယား https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/respiratory-tract-infections-3.html
၁။ ကျနော် ရီးစားနက် အတူတူ့့
ရီးစားနက်ဆိုတာ နက်သော မည်းသော မိန်းကလေးလား မသိ။ ရည်းစားလို့ ရေးရတယ်။
ယရည်း = ဆင်ထိန်း
ရည်း = ဆုရသည်
ရည်းလေလေ့ ရည်းလေလေ့ (လှေလှော်သားများဆိုသည့်စကား)
၂။ နဲ့ ကို နက် လို့လဲရေးနေကြတယ်ဆရာ
၃။ နဲ့ ကို နက် ဆိုပြီး ရေးကြတာကိုလည်း ထောက်ပြပေးပါအုံးဆရာ။ မလုပ်ပါနဲ့ကို မလုပ်ပါနက်၊ ဟိုလူနဲ့တွဲ သည်လူနဲ့တွဲ ကို ဟိုလူနက် သည်လူနက် လို့ ရေးကြတာ အများအပြား ဖြစ်နေကြပြီဆရာ။
ဟိုလူနက် သည်လူနက်တွဲလို့ရေးရင်တော့ အသားမည်းသူနဲ့တွဲလိုက် အသားနက်သူနဲ့တွဲလိုက်ဖြစ်မှာပေါ့။ Smile!
၁။ ဆိုးရင်စိတ်ကြီးလွန်းရင် ဘာဖြစ်တက်လဲ ဆရာ တဲ့။ ကွန်မင့် မေးခွန်း။
မေးနည်းကို အကြိမ်တထောင်လောက် တင်ထားတယ်။ စိတ်ကြီးသူ ကလေး လူကြီး အသက် ကျား မ မသိ။
တက်ဆိုတာ အတန်းတက်တာ၊ သစ်ပင်တက်တာ၊ အတက်ရောဂါ။
၂။ ဘလော့ကိုဝင်မကြည့်တက်လို့ပါဆရာ☺ (မကြည့်တတ်)
၃။ သွေးကတော့ တညနေဘဲဆင်ပြီး မဆင်းတော့ပါဘူးဆရာ။ ဘာဖြစ်တက်လဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။
၄။ ဆရာသေခြာစွာဖတ်ပါတယ် မသုံးတက်လို့ပါခင်ဗျာ (မသုံးတက်ဆိုတာ မှားတယ်။ မသုံးတတ်)
၅။ ဆရာ အတက်ပညာလို့ သုံးသလား၊ အတတ်ပညာလို့ သုံးသလားဆရာ။ (အတတ်ပညာက အမှန်။)
၆။ ဆရာ အတက်နိုင်ဆုံးကိုရေးမယ်ဆို အတက်လား၊ အတတ်လား။ မသိတာ မတက်တာဆိုရင်ရော တက်လား၊ ကက်လား၊ ခဏခဏမှားလို့။ (အတတ်နိုင်ဆုံး၊ မတတ်တာက အမှန်။)
၇။ ပညာတက်လား၊ ပညာတတ်လား၊ ပြောပြပါရှင့်။ (ပညာတတ်က အမှန်။)
၈။ ဆရာ မတ်တတ်ရပ် နဲ့ မတ်တပ်ရပ် ဘယ်ဟာကမှန်ပါသလဲ။ (မတ်တတ်ရပ်က အမှန်။)
၉။ The Money Drop Myanmar ရဲ့ အစီအစဉ်တခုမှာ TV ကနေကြည့်တာ အဖြေလေးခုပေးပြီး တခုရွေးရတာဆရာ။ ကျနော်က မတ်တတ်ရပ်လို့ ဖြေတာကို အဲဒီအစီအစဉ်က computer operator ပဲ မှားဖြေသလား မသိပါ။ သူတို့က မတ်တပ်ရပ်ကို အမှန်ဖြေပြတော့ တော်တော်အံ့သြသွားတယ်ဆရာ။ ကျနော်လဲ မမှားနိုင်ဘူးဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိတယ်ဆရာ။ ခုလိုဆရာပြောပြတော့ ပိုသေချာသွားတာပေါ့။ (မတ်တတ်ရပ်က အမှန်။)
၁၀။ ဆုံးမစာတခုမှာ စေတနာအမှားကြောင့် ဝေဒနာဖြစ်သွားတက်သည်လို့ ရေးတာဖတ်ရတယ်။ (ဝေဒနာဖြစ်သွားတတ်သည် လို့ ရေးရတယ်။)
၁၁။ သမီး မကြည့်တက်လို့ပါဆရာ ညွန်ပြပါနော်။ ဘလော့ကို ဝင်မကြည့်တက်လို့ပါဆရာ။ ဝင်ကြည့်တက်သွားပါပြီ။ (မကြည့်တတ်၊ ကူးစက်စေတတ်သော၊ ဝင်ကြည့်တတ်လို့ ရေးရတယ်။)
အတက် (ဝက်ရူးပြန်) ရောဂါ
နောက်ထုတ်စာအုပ်တွေမှာ သတ်ပုံတွေ တက်တက်စင် လွဲမှားနေတယ်
တတ် နဲ့ တက် မှားရေးမေးသူတွေ အများကြီး။ မြန်မာစာ အတန်းမတက်ကြသေး။ ခုခေတ် တက္ကသိုလ်တွေကလည်း တစ်ကသိုလ်တွေဖြစ်နေကြတယ်။
Neonatal conjunctivitis မွေးကာစကလေး မျက်စိကျိန်းရောဂါ နှင့် ဘုး မရှိ
ဆရာ သားလေးက မွေးကတည်းက မျက်ဝတ်တွေထွက်နေပါတယ် ၂လတုန်းက သွားပြတော့ ဂျင်တာမိုင်စင် ပေးလိုက်ပါတယ် ကလေးအထူးကုက သက်သာသွားပြီး ၃လနေတော့ ပြန်ဖြစ်ပါတယ် မျက်ရည်ဝဲပြီး မျက်ဝတ်ဖြစ်တာပါ မျက်စေ့ အထူးကုကို ၃လကျော်တော့ ထပ်ပြပါတယ် ဒီဆေးထပ်ပေးပါတယ် ခုသား၎လကျော်ပါပြီ ထပ်ဖြစ်နေပါတယ် မျက်လုံးနီတာ ဒဏ်ဖြစ်တာမရှိဘဲ မျက်ဝတ်ကထွက်နေတာ မျက်လုံးကပုံမှန်ပါ မျက်ရည်နည်းနည်းနဲ့အောက်မျက်ခမ်းက မျက်ဝတ်ထွက်နေလို့ပါ
မျက်စိဆရာဝန်ညွှန်တာသင့် ပို့ပေးတဲ့စာက ဘယ်ဆရာဝန်ကရေးတာလဲ မသိ။
စာက သမီးရှာဖတ်ပြီး ကလေးငယ်တွေက မျက်ရည်ကြောမပွင့်သေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆရာမကပြောဖူးလို့ အဲစာထဲကတိုင်းဖြစ်နေမလားမသိဘုးဆရာ မျက်စဉ်းခတ်ရင်ကလေးအိပ်နေတဲ့ချိန်တော့ ခတ်ပါတယ် ကလေးအောက်မျက်ခမ်းလေးဆွဲပြီး ကလေးနိုးချိန်ကြကလေးက ရမ်းပြီးခါနေတဲ့တွက်ဆေးမဝင်ဘုးထင်လို့ပါ
Neonatal conjunctivitis မွေးကာစကလေး မျက်စိကျိန်းရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/06/neonatal-conjunctivitis.html
လင့်ပို့လိုက်တယ်။ စာရေးတာ ပြောဦးမယ်။ မျက်စေ့ မဟုတ်။ မျက်စိလို့ရေးရတယ်။ မသိဘူး၊ မဝင်ဘူးလို့ ရေးရတယ်။ ဘုး မရှိ။
သတ်ပုံကျမ်းမှာ ဘု ကို ဒီနေရာတွေမှာသာ သုံးပါတယ်။ဘုကျသည်၊ ဘုဇပတ်ပင်၊ ဘုမသိဘမသိ၊ ဘုရင်မ၊ ဘုရင်မင်းမြတ်၊ မှန်ပါ့ဘုရား၊ မိဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရား၊ မောင်းဘု။
ဘာသာရေးစာတွေဆိုတဲ့နေရာမှာ ဒီဇိုင်းဆွဲတင်တဲ့စာတခုမှာ ကျိုးစားလို့ရေးထားတယ်။ များတယ်။ ကြိုးစားလို့ ရေးရတယ်။ အရုပ်ကျိုးပြတ်လို့ရေးတဲ့ပို့စ်တခု တွေ့တယ်။ အရုပ်ကြိုးပြတ် ဒါမှမဟုတ် အရုပ်ကျိုးပဲ့လို့ ရေးသင့်ပါတယ်။
မျဉ်းကြိုး (တန်းအောင် တိုင်းရန် သုံးသည့်ကြိုး)၊
ကြိုးကြာသံ - ခင်မောင်တိုး https://www.youtube.com/watch?v=Dw18rWYqbmQ
စင်း နဲ့ ဆင်း
စောစောက တတ် နဲ့ တက် မှားရေးတာကို တင်ပြထားတယ်။ အခုက အမှားတမျိုး။ ပို့စ်တခုမှာ မားကက်တင်း စင်းချင်လို့ပါလို့ ရေးထားတယ်။ မှားတယ်။ ဆင်းချင်လို့ပါလို့ ရေးရတယ်။
စင်းလျဉ်း = ဧကန်အမှန်
စင်းချော = ဇင်းချော
ကောက်ကစင်း = လမ်းစဉ်တလျောက်ညီညွတ်သည်
စည် နှင့် စီ
ဆရာခင်ဗျာ သိချင်တာလေးတခုရှိလို့ မေးခွင့်ပြုပါ။ အလောင်းစည်သူမင်းလို့ ပေါင်းတာလား၊ အလောင်းစီသူလို့ ပေါင်းတာလားခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်သိထားတာက အလောင်းစည်သူမင်းလို့ပဲ သိထားလို့ပါ။ အသိ အကိုတယောက်က အလောင်းစီသူဟုပြောလို့ပါ။ ဆရာက မြန်မာစာအရေးအသားကို အကိုးအကားလေးတွေနဲ့ အသေးစိပ်ဖြေတတ်လို့ မေးလိုက်ရပါသည်ခင်ဗျာ။ လေးစားစွာဖြင့်။
အလောင်းစည်သူမင်းက မှန်ပါတယ်။ အသေးစိတ်က မှန်တယ်။
စီရင်ကျည် = ပျက်စီးယိုယွင်းသည်
ငါးစည်ဖောင်း နဲ့ ပူစည်ဖောင်း
ငါးစီဖောင်း ပူစီဖောင်း အမှန်ကို သိချင်မိပါတယ်
အရင်ထုတ် သတ်ပုံစာအုပ်တွေမှာ ပူစီဖောင်း မပါ။ ဘူစီဖောင်း မပါ။ ဗူစီဖောင်း မပါ။
ယုဒသန်အဘိဓာန်မှာ စည်ဖောင်း ပါတယ်။ လေပူသွင်း၍ မိုဃ်းကောင်ကင်သို့တက်စေသောလို့ ပါတယ်။
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းမှာ ငါးစည်ဖောင်းကော်လို့ ပါတယ်။
ငါးစည်ဖောင်း နဲ့ ပူစည်ဖောင်း လို့ရေးတာက မှန်ပါမယ်။
Coughing and Children ကလေးတွေချောင်းဆိုးရင်
မင်္ဂလာပါ ဆရာရှင့်။ ကျွန်မသမီး အသက် ၁၂ နှစ် ချောင်းဆိုးတာတော့ကြာနေပြီ ခုက ချောင်းတွေဆိုးနေတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ နေ့ဘက်ဆိုလဲအကောင်းတိုင်းပဲ ညဘက် သန်းခေါင်ဆို ချောင်းဆိုးပြီး သီးသလို ဖြစ်ဖြစ်လာပြီး အသက်ရှူ မရတဲ့ထိ ဖြစ်ဖြစ်သွားပါတယ် စဖြစ်တဲ့ညက ၃ ကြိမ်လောက်ဖြစ်လောက်ပါတယ် နောက်ညတွေလဲ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေပြီး အကြိမ်ရေတော့ နည်းသွားပါတယ်။ ဆေးခန်းပြတော့လဲ ချောင်းဆိုး ပျောက်ဆေးပဲပေးနေပါတယ် အဲလိုဖြစ်တာက မသက်သာလို့ ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ ၁၂ နှစ်အရွယ်ကလေးတွေက ကလေးအထူးကုဆရာဝန်နဲ့ပဲပြသင့်လား လူကြီးကလေး မခွဲထားတဲ့ဆရာဝန် တွေနဲ့ပဲပြသလို့ အဆင်ပြေပါသလား ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်ရှင့်။
ဆရာဝန်ပြတာကိုတော့ ဘယ်သူကမေးမေး မဖြေပါ။
Coughing and Children ကလေးတွေချောင်းဆိုးရင် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/coughing-and-children.html
Humidifiers for Babies ကလေးတွေအတွက် ရေငွေ့ပေးစက် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/humidifiers-for-babies.html
Pneumonia in Children ကလေးများတွင်ဖြစ်သည့် နူမိုးနီးယားရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pneumonia-in-children.html
သတင်းမှန် မမှန်တော့ မသိပါ။ ပို့စ်တွေ့တာ။
(တစ်ချို့) ကား အမှားရေးသားခြင်းဖြစ်၏။
Untrue အဲတာမျိုးတွေကို မရေးပါ
ဆရာ ကြက်သွန်နီမှာ တွေ့ရတတ်တယ့် အမဲလေးတွေက အသဲကင်ဆာဖြစ်တတ်တယ်လို့Facebook မှာတွေ့လုိ့မေးကြည့်တာပါဆရာ အမှန်တကယ်ဆိုရင် နောင်ရှောင်လို့ရအောင်ပါ။
အဲတာမျိုးတွေကို မရေးပါ။ တမျိုးပြီးတမျိုး မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေကို ဇာချဲ့ ဖွဲ့နွဲ့ ရေးပြီးတင်နေကြတယ်။ ကင်ဆာအကြောင်းစာတွေကို ဆေးသုတေသနတွေကို ကိုးကားပြီး ရေးထားတယ်။
အသစ်ထွက်တဲ့ ဆေးသုတေသနတွေထဲက မြန်မာပြည်သားတွေအတွက် အကျိုးဖြစ်စေမှာဆိုရင် ဘာသာပြန်ပြီး တင်ပြပါတယ်။
ဗုဒ္ဓေါ ဗုဒ္ဓေါ ရွတ်လို့ရယ်
စိပ်မယ် စိပ်မယ် တဲ့။
ငွေတာရီကဗျာကို ပို့ပေးသူ ကျေးဇူး။
ပုံကို စာနဲ့အတူ ပို့ပါတယ်။ တနှစ် တလ တကြိမ် ဟူသောအသုံးများကို တွေ့ ရပါသည်။ ရှေးကစာအုပ်ထဲမှာပါ ဆရာ။
ကျေးဇူး။ ကထိန်ပွဲကိုရှေးကတည်းက ခင်းကျင်းကြပါတယ်။ မြန်မာစာကိုလည်း ဟိုရှေးကတည်းကရေးသားကြပါတယ်။
ကထိန်ကိုတော့ အစဉ်အလာအတိုင်းသာ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၁) ရက်နေ့ကနေ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ထိ တလတိတိ အချိန်ကာလအတွင်းသာ လှူခွင့်ရှိတယ်။ တနှစ်မှာ တလ၊ တလမှာ တရက်၊ တရက်မှာ တကျောင်းနဲ့ အလှူရှင်တဦးက တကြိမ်သာ လှူခွင့်ရှိတယ်။
မြန်မာစာကိုတော့ တကျောင်းတကာထာ တရွာတပုဒ်ဆန်း ရေးနေကြတယ်။ တမှန်သမျှတစ်လို့ရေးနေကြတယ်။
ရဟန်းတို့ရအပ်တဲ့ ကထိန်အာနိသင် (၅) မျိုးနဲ့ အလှူရှင်တို့ရအပ်တဲ့ ကထိန်အကျိုး (၅) မျိုးရှိတယ်။
Aye Min Tun ကျေးဇူး။
လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက် သူ့ကလေးကို မြန်မာစာမှန်မှန်ကန်ကန်သင်ပေးချင်တဲ့ ဖခင်တဦးက ကိုးကားစရာစာအုပ် မေးပါတယ်။ ကျွန်တော်က စာအုပ်တွေနဲ့ လက်လှမ်းဝေးပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာနေသူတွေကတော့ ပေါ်လစီသတ်ပုံ စာအုပ်တွေ ပြေးမလွတ် ရှောင်မရ သွားလေရာ ခလုတ်တိုက်လောက်အာင် ပေါများတယ်။
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ ၁ဝ၊ စာမျက်နှာက ၃၅၈ ကနေ ၃၆၆ အထိမှာ မြန်မာသဒ္ဒါအကြောင်းပါတယ်။ စကန်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားတာ အဆင်မပြေသေးပါ။ ဆောရီး။
အရေအတွက် အတိုင်းအတာကိုပြသော နာမဝိသေသနအောက်မှာ သည်လိုပါရှိပါတယ်။
ကုန်သည် တဦး၊ ပုတီး နှစ်ကုံး၊ နွား သုံးကောင်၊ မျဉ်း လေးကြောင်း၊ လက်စွပ် နှစ်ကွင်း၊ ခုံ တခု၊ ပန်း နှစ်ခိုင်၊ ဖျာ နှစ်ချပ်၊ အပ် သုံးချောင်း၊ ကြိုး တခွေ၊ စကား တခွန်း၊ မြင်း ငါးစီး၊ လှေ သုံးစင်း၊ ထင်း တစည်း၊ စာ တစောင်၊ ဘိနပ် တစုံ၊ ဘုရား တဆူ၊ သိမ် နှစ်ဆောင်၊ ကြွက်သွန် တတက်၊ စပျစ်သီး တတွဲ၊ ဆပ်ပြာ နှစ်တုံး၊ အုတ် နှစ်ထပ်၊ အင်္ကျီ နှစ်ထည်၊ ညောင် လေးပင်၊ ရဟန်း သုံးပါး၊ ပိုက်ဆံ တပြား။
ခုခေတ်မှာ သတ်ပုံအမှားတွေ သင်ပေးနေကြကြောင်း ထပ်လောင်း သက်သေထူလိုက်ပါတယ်။ ပြင်ကြစေချင်တယ်။
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဟာ ဘုရားတဆူဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဆူ မဟုတ်ပါ။ စာတလုံး ဘုရားတဆူလို့ ဆိုစကားလည်းရှိတယ်။
BC and AD ဘီစီ နှင့် အေဒီ
ကျမ သိပ်နားမလည်ပါဆရာ ဘီစီ ဆိုတာတွေဟာ ကျမ အတော်မသိတာပါ။
ဘီစီ၊ အေဒီကို အလယ်တန်းမှာ သင်ရပါမယ်။ ခရစ်မတိုင်မီနဲ့ ခရစ်နောက်လို့ ကျောင်းတိုင်းမှာ သင်ပါတယ်။
A.D. စာလုံးက လက်တင်ဘာသာစကား anno domini ကနေလာတယ်။ Lord ခေါ် Jesus Christ ဂျီးဆပ်စ်ဘုရား မွေးတဲ့ခုနှစ်။ Julian ဂျူလီယန်နဲ့ ကနေ့ကျွန်တော်တို့သုံးနေကြတဲ့ Gregorian ဂရီဂိုရီယန် ပြက္ခဒိန်မှာသုံးတဲ့ခုနှစ်ဖြစ်တယ်။
B.C. ဆိုတာ before Christ ကိုအတိုရေးတာ။
AD 1 ဆိုတာ ခရစ်မွေးပြီး ၁ နှစ်။ 1 BC ဆိုတာ ခရစ်မမွေးခင် ၁ နှစ်။
B.C./A.D. ရေးနည်းစနစ်အပြင် C.E. ခေါ် Common era နဲ့ B.C.E. ခေါ် Before common era လို့ရေးလာတာမျိုး ရှိတယ်။
မြတ်စွာဘုရားသက်တော်ထင်ရှားရှိခဲ့တာ ဘီစီ ၅၆၃/၄၈ဝ ကနေ ၄၈၃/၄ဝဝ လို့ သမိုင်းကဆိုပါတယ်။
ဘီစီ ၁ဝဝ မှာ ပျူနိုင်ငံတော်ပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ အေဒီ ၉ဝဝ အထိ ရှည်ကြာတယ်။ ဘီစီ ၃ဝဝ မှာ မွန်နိုင်ငံတော် စည်ပင်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ အေဒီ ၈၄၉ ခုနှစ်မှာ ပုဂံနိုင်ငံတည်ထောင်တယ်။ အနော်ရထာမင်းဟာ အေဒီ ၁ဝ၄၄ ကနေ ၁ဝ၇၇ အထိ နန်းစံတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတာ အေဒီ ၁၉၄၈။
Anno is the Latin word for “year” (cognate with año in Spanish) It appears as part of the abbreviation A.D. (Anno Domini = the Year of the Lord), but because of the dechristianization of western society, this is not so commonly seen anymore.
သင်္ကဿနဂိုရ်ဟာ ကနေ့အိန္ဒိယမြေပုံမှာ Sankisa လို့ခေါ်တယ်။ ယူပီပြည်နယ်ထဲမှာ၊ ဒေလီနဲ့ လပ်ခနောင်းမြို့ ကြားမှာရှိတယ်။ Sankassa နဲ့ Sankasia လို့လည်းခေါ်တယ်။ Sankissa နဲ့ Sankasya လို့လည်း ခေါ်တယ်။ အာသောကမင်းကြီးကရှာဖွေပြီး ကျောက်တိုင်စိုက်ထားခဲ့တယ်။ အခုတော့ ပျက်စီးနေပြီဖြစ်တဲ့ စေတီလည်း တည်ထားခဲ့တယ်။ စိတ်ကူးယဉ် ရာမယနဇာတ်ထဲမှာ သီတာမင်းသမီးဖခင် နေခဲ့တယ်လို့ ဆိုထားတယ်။
မြိုတော်ရဲ့အဝင်ဝနေရာဟာ မြတ်စွာဘုရား အဘိဓမ္မာတရားဟောကြားအပြီး တာဝတိံသာနတ်ပြည်ကနေ ပြန်ဆင်းအလာ ဆိုက်ရောက်တဲ့နေရာလို့ မှတ်တမ်းချို့ကဆိုပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက သီတင်းကျွတ်လပြည်နေ့မှာ ဆီမီးတွေ မီးရောင်စုံတွေ ထွန်းညှိပူဇော်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုက သီတင်းကျွန်လပြည့်တိုင်း ရောက်ရှိနေရာဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ် မီးထွန်းကြပါတယ်။
ခါတိုင်းတော့ ကျွန်တော့်သက်စေ့ထက် ဖယောင်းတိုင်တတိုင် အပိုထွန်းတယ်။ ကနေ့တော့ ဖယောင်းမီးခွက်အရေအတွက် နည်းလို့ ဆယ်ခွက်တည်းသာထွန်းညှိပူဇော်ပါတယ်။ စိတ်ကတော့ သင်္ကဿနဂိုရ်မှာ။
ရှင်တော်ဗုဒ္ဓ တာဝတိံသာ နတ်ပြည်ကနေ သင်္ကဿနဂိုရ်ပြည်ကို ဆင်းလာတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းဟာ မူရင်းပါဠိတော်မှ မပါရှိ။ ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီး အနှစ် (၁၀၀၀) လောက်မှာပြုစုတဲ့ ရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသရဲ့ အဋ္ဌသာလိနီ အဋ္ဌကထာမှာ စတင်တွေ့ရှိရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဖတ်ရပါတယ်။ လင့်ပို့ပေးတဲ့ ဆရာမောင်စွမ်းရည် ကျေးဇူး။
ကျွန်တော်လည်း သုတေသနသေးသေးလေးတခု ခပ်မြန်မြန်လေးလုပ်ပါတယ်။ သင်္ကဿနဂိုရ်ပြည်နေရာကို ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ အာသောကဘုရင်ကြီးဟာ ဘီစီ ၂၆၈ ကနေ ၂၃၂ အထိ အုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်။ ဝီကီပီးဒီးယားထဲမှာပဲ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား ဘီစီ ၅၆၃/၄၈၀ ကနေ ၄၈၃/၄ဝဝ လို့ ဆိုထားတယ်။ ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီး အနှစ် (၁၀၀၀) လောက်မှာဆိုတာက အာသောကထက် အများကြီးနောက်ကျနေတယ်။
မူရင်းပါဠိတော်နဲ့ သမိုင်းအထောက်အထားတွေ အရေးကြီးသလို ကြည်ညိုစိတ်ထား ခြင်းဟာလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာတရပ်အဖြစ်လည်း တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
Color of Democracy မပြီးသေးသော ပန်းချီကားတချပ်
သစ်ပင်တွေရဲ့သဘာဝ အရောင်အသွေးပြောင်းလဲခြင်းဟာ အပြစ်ကင်းတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာ အဲလိုပြောင်းတာမျိုးကို သဘာဝမကျဘူးလို့ပြောကြတယ်။ သက်ရှိလူတွေနဲ့ သစ်ပင်တွေ မတူလို့ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့နေရာတွေမှာ မပြောင်းတော့ပဲ တရားသေဆုပ်ထားတာမျိုးကိုတော့ သဘောမတူပါ။
တကယ့်အရှိကို ထင်ဟပ်ပြီး၊ အများစုဘက်မှာရပ်မှသာ ဒီမိုကရေစီမည်တယ်။ ၁၉၉ဝ တုန်းကနဲ့ မတူတော့တာ သိတယ်။ ၂ဝ၁ဝ နဲ့ ၂ဝ၁၅ က ခြားနားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၉ဝ နဲ့ ၂ဝ၁၅ လာတူနေတယ်။ အဲတာကတမျိုး။ သဘာဝမကျတဲ့နိုင်ငံရေး ရှိခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်တိတိက သည်လိုနေ့ နေ့ခင်းလောက်မှာ မိုးလေးဖွဲဖွဲရွာတယ်။ အပြင်မှာ အရောင်စိုပြီး စုံလှတဲ့ ပန်းချီကားကို ကြည့်ရတယ်။ အရင်က အစိမ်းတရောင်သာရှိခဲ့တဲ့ သစ်ပင်တွေဟာ အဝါ၊ လိမ်မော်ဝါ၊ ဝါညို။ မိုးကလည်းစိုစို၊ တကယ့်ကို ရေဆေးရှုခင်းကားလို။ နီညိုနဲ့ အနီဟာ၊ လိုက်ဖက်ညီပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ပင်နီနဲ့ အနီ လိုက်ဖက်ညီတယ်၊ လူတွေလည်း ညီတယ်၊ စည်တယ်၊ မြည်တယ်၊ တည်တယ်လို့ ရေးခဲ့ပါတယ်။
တိုင်းပြည်၏ ပညာရေးအဆင့်အတန်းသည် မိဘအုပ်ထိန်းသူများ၏ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနှင့် ပြောင်းပြန်အချိုးကျ၏
ကျွန်မအသက် 38နှစ်ပါ။ ဒီလထဲမှာ ညာဘက်ရင်ဘေးနားက တအားအောင့်အောင့်နေပါတယ်။ ထိုင်လဲမရအိပ်ရင်လဲ ဘေးကတခုခုကထိုးနေသလို။ အသက်ရူရင်လည်းအောင့်ပါတယ်ဆရာ။ တော်တော်လေးလဲနေခက်ပါတယ်ရှင့်။ တော်တော်ကြာသွားပြန်တော့လဲ ဘာမှမဖြစ်သလိုကောင်းနေပြန်တယ်ရှင့်။ သမီးကိုကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပေးစေလိုပါတယ်။ ဘာရောဂါဖြစ်နိူင်သလဲရှင့်။
ညာဘက်ရင်ဘေးနားကဆိုတာ မရှင်းလင်။ ရာသီ အိမ်ထောင်ရေး သွေးတိုး ဆီးချို မသိ။
Heart Disease နှလုံးရောဂါလို့ထင်စရာ ခြောက်ချက်
အသက် ၂၁ ၊ မပါ ဆရာ နှလုံးအောင့်တာ ခဏခဏဖြစ်နေလို့ပါ။ တခါအောင့်ရင် အသက်ရှုရခက်လာပြီး မိနစ် အနည်းငယ်အထိကို ကြာနေပါတယ် ဆရာ အခု မန္တလေးမှာ အထူးကုနဲ့ပြကြည့်တော့ ဆရာဝန်က နှလုံးခုန်နှုန်းက ပုံမှန်ပဲ ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီး သောက်ဆေးပေးထားပါတယ် ဆရာဝန်ပေးတဲ့ ဆေးနာမည်က Zespan (Gold ) ပါ။ သမီးက နှလုံးအောင့်တတ်တာ တော်တော်ကြာပြီ ဆရာ အခုပိုဆိုးလာတယ်ထင်ရလို့ပါ။ အရင်က နှလုံးအောင့်ရင် အချိန်မိနစ် သိပ်မကြာပေမဲ့ အခုနှလုံးအောင့်တာက မနေ့က ညနေကတည်းက အခုမနက်ထိ နေလို့အဆင်မပြေဘူးဆရာ ချောင်းလဲ မဆိုးရဲဘူး စကားလည်း ကျယ်ကျယ်မပြောရဲဘူး ဆရာ နှလုံးအောင့်ရင် ဘယ်လိုကြောင့် အောင့်တတ်တာလဲ အရမ်း အရေးကြီးတဲ့ Case တခုလားဆိုတာလေးတွေ သိချင်လို့ပါ သတ်ပုံအမှားပါခဲ့လျင် ဖြည့်စွက်ထောက်ပြပေးပါဆရာ။
နှလုံးရှိတဲ့နေရာ ရင်ပတ်မှာဖြစ်တာတခုတည်းကိုသာ မကြည့်ပါနဲ့။ ကိုယ်အလေးချိန်များသူတွေ၊ အသက် ၅ဝ ကျော်သူတွေ၊ ဆီးချိုရှိသူတွေ၊ သွေးတိုးနေသူတွေနဲ့ ကိုလက်စထောများနေသူတွေအတွက် အချက် (၆) ချက်ကို သတိပြုကြဘို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ Difficulty To Carry Out Daily Routines နေ့စဉ်လုပ်နေကျ အလုပ်ကို အရင်မလိုမလုပ်နိုင်ဖြစ်လာခြင်း
သွေးလွှတ်ကြောတွေကနေ သွေးပို့ပေးတာ အရင်လိုမလုပ်နိုင်ရင် တခုခုမှားနေသလား စစ်ဆေးရပါမယ်။
၂။ Dizziness Or Lightheadedness ခေါင်းမူးတတ်လာခြင်း
အားနည်းလို့မဟုတ်ဘဲ၊ နှလုံးကြောင့်လည်း ခေါင်းမူးနိုင်တယ်။ ရင်ပတ်အောင့်တာနဲ့ အသက်ရှူခက်တာပါ ရောနေရင် ဆရာဝန်ပြပါ။
၃။ Breaking Out In Cold Sweats ချွေးစေးပျံခြင်း
မဖျားပဲနဲ့ ချွေးထွက်ပါသလား။ ချွေးကအေးစေးနေပါသလား။ ညမှာထွက်သလား။ ရာသီဥတု၊ အစားအသောက်နဲ့ ပြေးလွှားရလို့ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ချွေးထွက်ပါသလား။
၄။ Chest Pain And More ရင်ပတ်အောင့်ခြင်း
ရင်ပတ်အလယ်နေရာနာပြီး ဘယ်ဖက်လက်မောင်းဆီအထိနာပါသလား။ တချို့မှာ ရင်ခေါင်း၊ လက်မောင်း၊ မေးရိုး၊ သွားနဲ့ နောက်ကျောပါနာတယ်။
၅။ Frequent Bouts Of Cold And Flu မကြာခဏ အအေးမိနေသလား
အအေးမိ၊ တုပ်ကွေး၊ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးဖြစ်ပါသလား။ ဗိုင်းရပ်ပိုးဝင်ခံရဖန်များနေသူမှာ နှလုံးက သွေးလှည့်တာ အားနည်းနေနိုင်တယ်။
၆။ Overwhelming Fatigue အားယုတ်နေသလား
အားမရှိဖြစ်ပြီး အသက်မရှူမဝဖြစ်နေသလား။ ဒီအချက်မှာ အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေထက်သိသာတယ်။
ဆရာ သတ်ပုံတွေမှားပုံကတော့ အိမ်က ကလေးငှါးလာတဲ့ လောကဓံရှစ်ပါးစာအုပ် ရှေ့ဆုံးစာမျက်နှာ အောက်ပါပုံအတိုင်းပဲ ဆရာ။
ကျေးဇူး။ လာဘ်သတ်ပုံ မှားနေတယ်။ အယသောလည်း မှားနေတယ်။
လောကဓံတရားရှစ်ပါး = ဆင်းရဲခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်း၊ ချီးမွမ်းခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ လာဘ်ရခြင်း၊ လာဘ်မရခြင်း၊ အခြွေအရံများခြင်း၊ အခြွေအရံနည်းခြင်း။
အဲဒီကတည်းက မြန်မာစာဟာ လာဘ်တိတ်သွားတယ်။ ကဲ့ရဲ့ခံရတယ်။ ဆင်းရဲသွားတယ်။ သူတို့တတွေမှာ အခြွေအရံ (တစ်) သမားကတော့ များလှတယ်။
တရားစာတွေ မှားရေးနေကြတယ်လို့ တင်တာကို တချို့က ဟုတ်ရဲ့လားတဲ့။ တရားစာ အမှားတွေ အများကြီး။ ထိပ်နဲ့ အောက်မှာ အထင်ကရဆရာတော်ကြီးတွေ ပုံနဲ့ ဘွဲ့နဲ့ စာရေးတာက သတ်ပုံမမှန်။ ဆုတောင်းစာတွေလည်း မှားကြတယ်။ နှစ်ဦး၊ သင်္ကြန်၊ ဝါဝင် ဝါကျွတ် ရာသီတိုင်း အမှားတွေလာတယ်။ မြန်မာစာဟာ လာဘ်တိတ်နေတယ်။ ကန်တော့။ ဆောရီး။
Photo from Daw Mi Thinn ကျေးဇူး
Tonight I Can Write ဒီနေ့ညမှာ ငါ ကဗျာရေးနိုင်ခဲ့ပြီ
မောင်သစ်တည်အမည်နဲ့ ဆရာမြသန်းတင့် ဘာသာပြန်တဲ့ ချီလီကဗျာဆရာ Pablo Neruda ပါဘလိုနေရူဒါရဲ့ ကဗျာ နောက်ဆုံးပိုင်း။
ငါ သူ့ကို မချစ်တော့တာကတော့ သေချာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကို ဘယ်လောက်ချစ်ခဲ့ရသလဲ
ငါ့အသံဟာ သူ့သောတအာရုံကို ထိတွေ့ဖို့ လေကို ရှာဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ တခြားသူ တယောက် သူဟာ တခြားသူတယောက်ရဲ့ ချစ်သူဖြစ်နေတော့မယ်
တခါတုန်းက ငါ့အနမ်းတွေလိုပေါ့ သူ့အသံ သူ့ရဲ့ တောက်ပတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ သူ့ရဲ့ အဆုံးမရှိတဲ့ မျက်လုံးတွေ ငါ သူ့ကို မချစ်တော့တာတော့ သေချာပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူ့ကို ချစ်ချင်လည်း ချစ်ဦးမှာပဲ အချစ်ဟာ သိပ်တိုတောင်းပြီး မေ့လျှော့ခြင်းဟာ သိပ်ရှည်လျားလှတယ်ဆိုတဲ့ ကဗျာမျိုး။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဒီလိုညမျိုးတွေမှာ ငါဟာ သူ့ကို ရင်ခွင်မှာပွေ့ထားပြီး ငါ့ဝိညာဉ်ဟာ သူ့ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရုံနဲ့ မကျေနပ်သေးဘူးဆိုတဲ့ ကဗျာမျိုး။
ဒီဝေဒနာဟာ သူ့ကြောင့် ခံစားရတဲ့ နောက်ဆုံး ဝေဒနာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်လာမှာပဲ ဒီနောက်ဆုံး ကဗျာလေးတွေကိုတော့ သူ့အတွက် ငါရေးလိုက်ပါတယ်။
(တစ်) ခြားသူ (တစ်) ယောက် မဟုတ်။ (တစ်) ခါတုန်းက မဟုတ်ပါ။ မြသန်းတင့် စာတွေဖတ်ပြီး ကြီးပြင်းလာသူတွေက ပါးစပ်ကတော့ ဓါးတောင်ကို ကျော်မယ်တဲ့။ စသတ်ကိုတောင် မကျော်နိုင်ကြ။
Dry skin အရေပြားခြောက်နေရင်
၁။ ဆရာရှင့် သမီးအသက်က ၂၁ပါ လည်ပင်းတနေရာပဲကွက်ပြီး အသားခြောက်နေလို့ပါ ဆံပင်ကိုအမြဲချထားပါတယ် ဆံပင်ကဂုတ်ကျော်ဆိုတော့ ရုတ်တရက်ထဖြစ်တာ စိုးရိမ်လို့ပါဆရာ ကျန်းမာရေးကောင်းပါတယ်ဆရာ အသားခြောက်တာ သုံးရက်လောက်တော့ရှိပါပြီးဆရာ
၂။ ဆောင်းတွင်းမှာ အသားအရေခြောက်လို့ မျက်နှာကို သံလွင်ဆီလိမ်းလို့ရပါသလားရှင့်။
၃။ ကျနော့် အရေပြားဟာ ခြေသလုံး၊ ပေါင်နဲ့လက်တို့ မှာ အရေပြားခြောက်ပြီး အဖတ်လေးတွေနဲ့ ပက်ကြားအက်သလို အရေပြားဟာ ချောမွေ့ စိုပြေခြင်းမရှိပါဘူး၊ မည်သို့ လုပ်ဆောင်ရမည်ကို လမ်းညွန်ပေးပါခင်ဗျား။ (ပပ်ကြားလို့ ရေးကြတယ်။)
အရေပြားခြောက်တာ အကြောင်းတရားအမျိုးမျိုးကနေဖြစ်စေတယ်။ တခုတည်းမကကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။ အတွင်းနဲ့ အပြင်ဆိုပြီး ကွာသေးတယ်။ အပြင်အကြောင်းခံတွေက ပိုများတယ်။ ရာသီဥတုအေးတာနဲ့ ရေငွေ့ဓါတ် နည်းတာတွေက ဖြစ်စေတယ်။ အတွင်းအကြောင်းခံတွေထဲမှာ အသက်ရလာလို့၊ မျိုးရိုး၊ ရောဂါတွေ (ပန်းနာ၊ အရေပြားနာ၊ လည်ပင်းကြီး ဟော်မုန်းနည်း-များရောဂါ၊ ဆီးချို)။ ဆပ်ပြာ အပြင်းစားတွေနဲ့ တွဲဖြစ်တာတွေပါတယ်။ အရေပြား စိုအောင်လုပ်တဲ့ Moisturizers ကို အသုံးမတတ်လို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ သွေးတိုးကျဆေး၊ ကိုလက်စထောကျဆေး၊ အလာဂျီဆေးနဲ့ ဝက်ခြံဆေးတွေကနေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ Eczema, Psoriasisယ Atopic dermatitis နှင်းကူစတဲ့ နာတာရှည် အရေပြားနာနဲ့ ခွဲခြားရမယ်။ အာဟာရနည်းတာလည်း ပါတယ်။
• အကြောင်းခံဆေးဝါးတွေဆိုရင် ဆေးဖြတ်တာနဲ့ သက်သာလာမယ်။
• Emollient ဆေး နေ့စဉ်သုံးပါ။ Moisturizer စနစ်တကျသုံးပါ။ အပြော့စားတွေက Cetaphil lotion, Lubriderm lotion နဲ့ AmLactin 12% lotion ဆေးတွေ။ အပြင်းစားတွေက Vaseline နဲ့ Aquaphor တွေဖြစ်တယ်။
• အဲတာတွေနဲ့ မရသေးရင် (စတီရွိုက်) ပါတဲ့လိမ်းဆေးတွေသုံးနိုင်တယ်။ Hydrocortisone 1% cream (အပြော့စား), Pramosone 2.5% cream (အပြော့စား), Triamcinolone 0.1% cream (အလတ်စား), Clobetasol 0.05% cream (အပြင်းစား) တွေဖြစ်တယ်။ စတီရွိုက်စားဆေးက တာရှည်သုံးရင် အရေပြားကို ပါးစေတယ်။
• ယားတယ်ဆိုရင် Oral antihistamines (အင်တီဟစ်တမင်း) ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ Diphenhydramine (Benadryl), hydroxyzine (Vistaril, Atarax), Loratidine (Claritin) နဲ့ Cetirizine (Zyrtec) တွေသောက်နိုင်တယ်။
• Vaseline တနေ့ ၂-၃ ကြိမ်လိမ်းပါ။
• Lukewarm showers ရေခပ်နွေးနွေးနဲ့ချိုးပါ။
• Mild soaps ဆပ်ပြာ အပြော့စားသုံးပါ။ ဥပမာ Dove soapless cleanser, Aveeno cleanser, Cetaphil cleanser တွေဖြစ်တယ်။
• အထူး Moisturizers တွေကို သုံးနိုင်တယ်။ (လက်တစ်အက်စစ်) ပါတဲ့ (Amlactin, Lac-Hydrin) နဲ့ ယူရီယာပါတဲ့ (Urix or Carmol) တွေဖြစ်တယ်။
• Mild moisturizers တွေမှာ ရေမွှေးမပါတာက ကောင်းတယ်။
• အစားအသောက်မှာ လုံလောက်မျှတအောင် စားသုံးရမယ်။
• Omega-3 နဲ့ ဗီတာမင် (အေ) ကောင်းတယ်။
Breaking News မြန်လိုက်ကြတာ
သတင်း ချက်ချင်းထက်ပိုမြန်မြန် တင်နိုင်သူတွေ များတယ်။
ဘဏ္ဍာရေးသတင်းလည်း ဘဏ်မန်နေဂျာက နောက်မှသာသိရတယ်။
နာဂစ်ကြောင့် ကွဲအက်ပျက်စီးသွားရရှာတဲ့ ကြက်ဥအလုံးရေကို လုပ်သားပြည်သူ့နေစဉ်မှာ အတိအကျဖေါ်ပြနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ နဝတ ပြန်ကြားရေးနဲ့ အတူတူဘဲ။
ကွဲအက် ကျေပျက်သွားသော သတင်းများလို့ခေါ်တယ်။
ဆရာခဗျ စောလျင်စွာ နဲ့ ဆောလျင်စွာ ဘယ်ဟာက အမှန်ပါလဲဗျ။ အခုမှ ဒီလို အရေးအသားကို မြင်ဖူးလို့ပါ။
ဆောလျင်စွာလို့ ရေးပါတယ်။ အစောတလျင်လို့ရေးတာက စ နဲ့ ဆ မပီသသူတွေကရေးတာ။ မမှန်ပါ။
စောစောအိပ်လို့ စောစောထို့ စောစောလမ်းလျှောက်ကြပါစို့
ပိုးသတ်ဆေးကြောင့် မြန်မာမှာရောဂါတွေ အဖြစ်များလို့ ဖတ်ရတယ်။ ပိုးသတ်ဆေးဆိုတာ စိုက်ပျိုးရေးမှာသုံးတဲ့ ဆေးတွေကိုခေါ်တာ။ တချို့က လူတွေနေမကောင်းလို့သောက်တဲ့ ပဋိဇီဝဆေး ခေါ် ဗက်တီးယားအတွက်ဆေးကိုလည်း အဲလိုရေးလေ့ရှိကြတယ်။ အဲတာက မမှန်ပါ။
မြန်မာမှာဆိုတာ မေးစရာအမြဲရှိတယ်။ မြန်မာပြည်လား၊ မြန်မာလူမျိုးလား။ သတင်းဖတ်မှ တိုင်းပြည်လို့သဲကွဲတယ်။
ခုခေတ်မှာ မြန်မာဝေါဟာရကို ထည်လဲသုံးကြတယ်။ တခါတည်းဖတ်တာနဲ့ နားမလည်။ အမေရိကရောက်နေသူတွေက မြန်မာပြန်တုန်းကလို့ အတော်ပြောကြတယ်။ ကျွန်တော်က ဘာသာပြန်တာကို ပြောတယ်ထင်နေတာ။
တိုင်းပြည်လည်း မြန်မာ၊ လူမျိုးလည်း မြန်မာ၊ စကားနဲ့စာလည်း မြန်မာ။ ရောကောသောကောဖြစ်နေတာ မြန်မာ။
အရင်ကတော့ သဲသဲကွဲကွဲ ရေးကြ ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ အစိုးရထုတ် အဘိဓာန်တွေမှာပါ မြန်မာကို နာမ်နဲ့ နာမဝိသေသန ရောထွေး ရေးထားတယ်။ မမှန်ပါ။
VOA ဝဘ်ဆိုက်သတင်းကို နမူနာအဖြစ်သုံးရလို့ ဆောရီး၊ ကန်တော့။ အဲလိုဟာတွေ နေ့တိုင်း အများကြီးဖတ်နေရတယ်။
မြန်မာပြောသော မြန်မာသည် မြန်မာသွား၍ မြန်မာစား၏။
အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေ မလိုအပ်ပဲ ထည့်ရေးကြတယ်။ P တဲ့။ Pး တဲ့။ B တဲ့။ အဲလိုလာရင် ရောဂါလား စဉ်းစားရတာက တဒုက္ခ။
- အမေက HIV
- အဖေက C
- ညီငယ်က TB
- ညီမက AIDS
- မြန်မာပြည်ကြီး အလွန်တိုးတက်။
P ပီ ကူးစက်ရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/02/p.html
မိုးမိုး (အင်းလျား) ရေးတဲ့ဝတ္တု။
ခုခေတ်မှာတော့ စမ်း (တစ်) ဝါး တဲ့။ နမူနာအမှားနဲ့ တွဲတင်သင့် မတင်သင့် အတော်စဉ်းစားပါတယ်။ ဆောရီး။ ရှိသေးတယ်။
မြန်မာစာ ပျောက်သောလမ်းမှာ စမ်းတဝါး။
- October 25, 2019 No comments:
တက္ကသိုလ်မှ ကာတွန်းသင်ခန်းစာ တပုဒ်
၁၉၂၈ ခုနှစ်က ကျွန်တော်သည် ယူနီဗာစီတီ ကောလိပ်ကျောင်းသားဘဝ၌ရှိစဉ် ကောလိပ်မဂ္ဂဇင်းအတွက် ကျွန်တော်အကျိုးဆောင်လုပ်ရ၏ ကောလိပ်မဂ္ဂဇင်းတွင် ကျွန်တော့်ဆရာဖြစ်သူ ကောလိပ်ကျောင်းထွက် ကာတွန်းဆရာကြီး ဦးဘကလေး ခေါ် ရွှေတလေးကြီးကို ဆွဲခိုင်း၏။ ဦးဘကလေးကလည်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် ပတ်သက်သော ကာတွန်းတခုကို ဆွဲပေး၏။ ရွှေတလေး၏ကာတွန်းကို ကျွန်တော်ကလည်း သဘောကျသဖြင့် ၁၉၂၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလထုတ် ယူနီဗာစီတီကောလိပ် မဂ္ဂဇင်းတွင် ထည့်လိုက်သည်။
ကာတွန်းဆရာကြီးတွေက မြန်မာစာသတ်ပုံကို အမှန်အတိုင်းသာ ရေးသား ရေးဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။
- October 23, 2019 No comments:
Breast Cancer ရင်သားကင်ဆာ
Breast Cancer ရင်သားကင်ဆာအသိပညာပေး ကမ္ဘာတဝှမ်း ပန်းခရမ်းရောင်မီးပေါင်း တသောင်းကျော်ထွန်းလင်း
၁၅ စက္ကန့်တိုင်း ကမ္ဘာပေါ်က နိုင်ငံတခုခုမှာ အမျိုးသမီးတယောက် ရင်သားကင်ဆာ တွေ့ရှိနေတယ်။ ဆောရီး။
The Eiffel Tower, Paris, France ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပဲရစ်မြို့တော်၊ အီဖယ်လ်မျှော်စဉ်
La Moneda Palace, Santiago, Chili ချီလီနိုင်ငံ၊ စန်တီယာဂိုမြို့တော် နန်းတော်
မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ ဘယ်မှာနေနေ ရင်သားကင်ဆာဘေးက ဝေးကြပါစေသတည်း။
လင့် ၂ ခုပို့တာ ရတယ်။ ကျေးဇူး။
၁။ တခု၊ တကောင်၊ တယောက် https://www.facebook.com/lucky.charm.9237244/posts/837851666585438
၂။ တကျောင်းတဂါထာ၊ တရွာတပုဒ်ဆန်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းကလေးတွေ အကြောင်းကို အောက်ကလင့်မှာ ဆက်ဖတ်ပါ။ https://www.bbc.com/burmese/in-depth-49702883
ဟုတ်။ ကျေးဇူး။ မှန်တဲ့မီဒီယာတွေက မှန်ကြပါတယ်။
BBC မှာ မှန်တာများတယ်။ စာရိုက်တဲ့သူ နည်းနည်းက မှားတယ်။
VOA အမှန် များတယ်။
RFA အမှား များတယ်။
DVB တချို့တဝက် မှန်တယ်။
အစိုးရထုတ် အကုန် ပေါ်လစီနောက်သာလိုက်တယ်။ ရွဲ့နေတဲ့ နိုင်ငံတော်အိုးကြီးကို စလောင်းရွဲ့နဲ့ ဖုံးပေးနေရတယ်။
အခုကြေးမုံကလည်း ပေါ်လစီသမားလုံးလုံး။ သတင်းစာကို တည်ထောင်သူ အောင်ဗလ ခေါ် ဦးသောင်းကတော့ ကွယ်လွန်တဲ့အထိ မြန်မာစာသတ်ပုံမှန်နဲ့သာ ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
ဦးနေဝင်းခန့်တဲ့ မြန်မာစာအဖွဲ့မူအတိုင်းသာ ဆက်သုံးနေတဲ့ အိုးကြီးရွဲ့တာ ပြင်လမ်း မမြင်သေးပါ။ ဆောရီး။ ကန်တော့။
- October 22, 2019 No comments:
ဒေ သို့မဟုတ် အရပ်ဆရာလား မသိ
ဆရာ ကျွန်တော်ဖျားတာ ၄ရက်ရှိပါပီး ရွာက ဆေးဆရာက Ciprofloxacin 500mg Para 500mg Dexa Ibuprofen 400mg ဒီဆေးတွေဝယ်ပီးသောက်ပါလို့ပြောလို့ဆေးဆိုင်မာဝယ်ပီးသောက်ပါဒေ အဖျားတော့ကျပါဒေဆရာ ပြန်ဖျားလိုက် ကောင်းလိုက်ဖြစ်နေပါတယ် ဘယ်လိုဆေးများ ၀ယ်သောက်သင့်သလဲဆရာ ဖြေပေးပါ
ကျွန်တော်ဆိုသူ အသက် မသိ။ ပြတာ ဆရာဝန်လား ဆေးမှူးလား အရပ်ဆရာလား မသိ။ ဆေးဆိုင်မှာလို့ ရေးရ။
မာ နှင့် မှာ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/01/blog-post_19.html
မာ နှင့် မှာ သို့မဟုတ် မာသောအရိုး မာသောအိမ် မာသောရန်ကုန် https://doctortintswe.blogspot.com/2019/01/blog-post_82.html
မြန်မာစာမှာ ပီး မရှိပါ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/01/blog-post_560.html
မြန်မာမာဆိုတာ ဘယ်မှာရှိပါသလဲ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/07/blog-post_97.html
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကူးစက်ရောဂါသစ်များ ဖြစ်ပွါးနေ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/04/blog-post_53.html
သားအိမ်မာလို့ မရေးရ သားအိမ်မှာလို့ ရေးရ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/05/blog-post_26.html
ပါတယ်လို့ ရေးရ။ ကျပါတယ်လို့ ရေးရ။
မြန်မာစာသင်ပေးတာ ကျောင်းဆရာ ဆရာမလား အရပ်ဆရာလား မသိ။
ခုခေတ်တော့ ကျုပ်တို့ (တစ်) တွေဟာ
- October 20, 2019 No comments:
ထိလို့မရပု မညီပု မရှိပါပု
၁။ အသက်က ၂၃ပါဆရာ ဆရာရှင့် သမီးလက်သည်းမှာ လက်သည်း ပိုးစားနေတာ ထိလို့မရပု နာနေတာ ပိုးရှိတဲ့သူနဲ့ လက်သည်းညှပ်တူတူသုံးရင် ကူးနိုင်ပါသလားဆရာ ဘာဆေးလူးရမလဲရှင့် ခုမှစဖြစ်ကာစမို့ပါဆရာ
၂။ ကျွန်တော်ရဲ့့ က တခုနဲ့တခုမညီပု ဆရာ။ ဘယ်ဘက်ကတခု ညာဘက်ကတခုထက် နည်းနည်းတွဲကျနေတယ် အူကျတာလည်း ကျွန်တော်စမ်းပြီးပါပြီ မရှိပါပု အဲ့တာလေးသိချင်လို့ပါ။
ပုကို အရပ်ပုတာမှာ သုံးပါတယ်။ မညီဘူး၊ မရှိဘူးလို့ရေးရတယ်။ တစ်ငါးလုံးကိုပါ ပြင်လိုက်တယ်။ ဆောရီး။
ပုရစ် = အညွန့်အဖူး
ပုရည် = ဆန်စပါးထည့်သောစလွယ်
ပုလုကွေးလေး = သေးငယ်သော
ပုလဲတမူး = နှစ်သက်မြတ်လေးသည်
Questions on 15-10-2019
ည နှင့် နေ့
သင့်နိုးရာကို ပြန်ပြင် ပြန်တင်မည်
သူတို့ နိုးတဲ့အချိန်မှာ လက်ဖက်စားသူ အိပ်ပါမည်
အသက်မွေးရန် တစုံတခုသော အတတ်ပညာနှင့်ဖြစ်စေ အလုပ်အကိုင်ဖြင့်ဖြစ်စေ လုပ်ကိုင်၍ အသက်မွေးသူဟူသော အနက်အဓိပ္ပါယ်သက်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆေးအတတ်ကို တတ်သဖြင့် ဆေးကုစားသူကို ဆေးသမား၊ မျက်လှည့်ပြစားသူကို မျက်လှည့်သမား၊ လှည်းတိုက်စားသူကို လှည်းသမား စသည်ဖြင့် များစွာသော နာမ်ပုဒ်တို့နှင့် ဆက်ဆံနိုင်သည်။ (ဤနေရာတွင် ဆေးဝါးမ န္တရားစသည်ဖြင့် ရောဂါဘယတို့ကို ကင်းပျောက် ချမ်းသာရန် ကုသနိုင်သူ ဆေးသမားကိုယူ။)
ကန်တော်မင်းကျောင်းဆရာတော်ရေးသားခဲ့တဲ့ လောကသာရပျို့ထဲမှာရေးထားတာ တစ်စုံတစ်ခုသော မဟုတ်ပါ။ အနက်အဓိပ္ပါယ်မှာလည်း အနက်အဓိပ္ပာယ်လို့ မရေးပါ။ နိုင်ငံရေးသမားများ၊ စာသမားများကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Diaper ကလေးအတွက် ဒိုင်ယာပါ
ဆရာ မင်္ဂလာပါ ရှင့် ကျွန်မရဲ့ သားလေးက သုံးလရှိပါပြီ မွေးစ ကတည်းက diaper သုံးပါတယ် သူများတွေက ခြေထောက်ခွင်တတ်တယ်ဆိုပြီး ပြောကြပါတယ်ရှင့် Diaper ကို မှန်ကန်အောင်၊ ကလေးခြေထောက် မထိခိုက်အောင် ဘယ်လို သုံးရပါမလဲရှင့် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရှင့်
သူများနိုင်ငံတွေမှာ ကလေးတိုင်းကို ဒိုင်ယာပါသုံးပါတယ်။ Club foot ခြေခွင်တယ်ဆိုတာ မမွေးခင် ဗိုက်ထဲကတည်းက ပါလာတာ။
How to ChangeaDiaper | Pampers https://www.youtube.com/watch?v=PutHMl2UwaE
Diaper rash ဒိုင်ယာပါ လောင်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/diaper-rash.html
Zinc oxide cream ဇင့်အောက်ဆိုက်ခရင်မ် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/10/zinc-oxide-cream.html
မင်္ဂလာပါ ဆရာ Nestle က ထုတ်တဲ့ Milo ကို အသက် ၇ နှစ်မှ ၁၂ ထိသောက်သုံးရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ် ကျွန်တော့ သမီးက အသက် ၂ နှစ် ၂ လပါ သမီး Milo အရမ်း ကြိုက်ပါတယ် ကျန်းမာရေးအရ ဒီ အသက်အရွယ်မှာ တိုက်သင့်ပါသလား
Milo မိုင်လိုထဲမှာ ချိုတာပါလို့ ကလေးတွေကြိုက်ကြတယ်။ သတိထားစရာတချို့တော့ ရှိတယ်။ သကြားဓါတ်ရဲ့သဘောက ဘယ်ကနေရရ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးမယ်။ အချိုကြိုက်လွန်းရင် တခြားအရသာတွေကို မကြိုက်တာဖြစ်တတ်တယ်။ သွားပေါက်ပြီးရင် သွားအပေါ်ယံလွှာကို ထိခိုင်နိုင်လို့ အချိုစားပြီးတိုင်း ပါးစပ် ဆေးသင့်တယ်။ မိုင်လိုထဲမှာ Vitamins A, B1, B2 & C တွေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိခင်နို့နဲ့ ဖေါ်မြူလာနို့မှုန့်လောက် မပြည့်စုံပါ။ မိုင်လိုကို နွားနို့ကနေလုပ်တယ်။ နွားနို့မတည့်သူတွေ မသင့်။ ကလေးဘယ်အရွယ်မှသာတိုက်လို့တော့ သုတေသနမရှိ။
ကန်တော့သူတွေလာတိုင်း ဆုတောင်းတဲ့တာဝန်ကို ဒေါ်မြမြအေးကသာယူပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဆုမပေးတာတော့ မဟုတ်ပါ။ စာရေးရာမှာလည်း သာဓုလို့ထည့်ရေးလေ့မရှိပါ။ ကောင်းလေစွလို့ မပြောတာတော့ မဟုတ်ပါ။
မဆုံးစကောင်း ပန်နက်တောင်း၏။ (သုဝဏ္ဏသျှမ်ပျို့)
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ပုံထဲကထက် ၃ နှစ်တိတိပိုပြီး အိုစာလာကြပြီ။
ကွန်မင့်တခု ရတယ်။ လက်ဖက်စား ကွမ်းအုပ်လေးနှင့်ဆို အလွန်ပဏာရမည် ထင်ပါသည်။ ကျနော်သည်လည်း ပြည်တွင်းတွင်မရှိ၍ ပို့မပေးနိင် တဲ့။
ကျေးဇူး။ ယွန်းအုပ်လို့ ခေါ်တယ်။ လက်ဖက်နဲ့ ကွမ်းအတွက် ယွန်းထည် နှစ်ခု အိမ်မှာရှိတယ်။ သားတယောက် မြန်မာပြည်ပြန်တုန်းက ပါလာတာ။ အမှတ်တရသာ ထားပါတယ်။
ယွန်း = တိမ်းစောင်း၊ သွား
ယွန်း (ရှမ်း) အက္ခရာ
အပန်းငယ် ဖြေကာ၊ ဗလာလေတူ ယွန်း၊ သံသာငှက်ကယ်က ညွှန်း (အောင်မြေသာဇံ တောင်လား ပတ်ပျိုး)
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ဝန်းကျင်မှာ မြန်မာ့ရိုးရာအစဉ်အလာအရ မိဘနဲ့ဆရာဆရာမတွေကို ကန်တော့ကြတယ်။ အသက်ဝါကြီးသူတွေကို ကန်တော့ကြတယ်။ အကန်တော့ခံသူတွေလည်း ငယ်စဉ်ရွယ်စဉ်က သူတို့မိဘဆရာတွေကို ကန်တော့ခဲ့ကြမယ်။ စဉ်ဆက်မပြတ်စေတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်တယ်။ ကောင်းတယ်။
ယဉ်ကျေးမှုကို နိုင်ငံရေးလုပ်ကြတာမှားတယ်။ လက်အုပ်ချီခံထိုက်သူလူတန်းစား ဖြစ်လာတယ်။ ဘုရားထဲကျောင်းထဲ ဖိနပ်စီးခွင့်ရသူလူတန်းစား ဖြစ်လာတယ်။ ဘုန်ကြီး ပြန်မပြောမော့မကြည့်ရဲတဲ့ အစဉ်အလာကနေ တချို့က ဆဲရေး တိုင်းထွာလာကြတယ်။ အဲတာမှာ ဘုန်းကြီးကညံ့တာလည်းရှိတယ်။
• ဆရာ-ဆရာမတို့သည် အာစရိယဖြစ်ကြကုန်၏။
• ဘုန်းကြီးရဟန်းတို့သည် သံဃာဖြစ်ကြကုန်၏။
• ဒါယကာ ဒါယိကာမတို့သည် ပုထုဇဉ်ဖြစ်ကြကုန်၏။
• အကန်တော့ခံများလည်း ပုထုဇဉ်ဖြစ်ကြကုန်၏။
• ကန်တော့ခံထိုက်သူတွေ စင်ကြယ်လေလေ ကန်တော့သူတွေ ကုသိုလ်ကြီးလေလေ။
မင်္ဂလာပါ ဆရာ အသက် ၁၈ နှစ် ယောကျာ်းလေး ခဏခဏ ခေါင်းက်ိုက်နေလုိ့ပါ တခါတခါ ခေါင်းကိုက်ရင် ၁နာရီနီးပါးလောက်ကြာပါတယ် ခေါင်းအနောက်ဖက် နောက်စေ့အောက်နားမာလဲ အကျိတ်တခု ရှိနေပါတယ် မနေ့ကထက်ပိုကြီးလာသလိုထင်ရပါတယ် ခေါင်းကိုက်တာတော့ ၁ပတ်ကျော်p ဆရာ ဆေးဝယ်သောက်ပေမယ့် ခုထိမပျောက်သေးလို့ပါ
Tension headache ကျွန်မဖြစ်နေတာ ခေါင်းအရမ်းကိုက်ခြင်းပါ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/tension-headache.html
မှားနေတဲ့သတ်ပုံစာတွေလည်း ပို့လိုက်တယ်။ တခါတခါ နဲ့ အကျိတ်တခုလို့ရေးတာ မှန်တယ်။ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း။
P ပီ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/02/p.html
အရှေ့အနောက် တောင်မြောက်ဘယ်မှာ မသိပါငြား https://doctortintswe.blogspot.com/2017/07/blog-post_93.html
ဆရာ ကျွန်တော်ဇနီးအသက်က 32ပါ ချောင်းဆိုးတာ ၁လလောက်ရှိပါပြီ ချောင်းခဏခဏဆိုးတာတော့မဟုတ်ပါဘူး နီးဆက်ရာဆရာဝန်နဲ့ပြဖြစ်ပါတယ် ညဘက်အိပ်ရင် ရင်ခေါင်းကနေတရွှီရွှီကြားရတယ် ဆရာဝန်ကလည်း စမ်းရင် ကြားရတယ်ပြောတယ် ပြီးတော့ဓတ်မှန်ရိုက်ခိုင်းတယ်ဆရာ ပြီးတော့ ဆေးတိုက်တာ ၉ ရက်လောက်ရှိပြီ အသံက မပျောက်ဘူး ချောင်းလည်းမပျောက်ဘူး ချောင်းဆိုးရင်လည်းချွဲသံပါတယ် ဒါပေမဲ့ချွဲမထွက်ဘူးဆရာ ရင်ဘက်လည်း မနာဘူးမအောင့်ဘူး အစားလည်းစားတယ်စားချင်စိတ်လည်းဖြစ်တယ် အစားအသောက်လည်းပျက်ဘူး ဆရာဝန်ပေးတဲ့ဆေးသောက်ရင် အားနည်းတယ် တခါတလေနားထဲကလေထွက်တယ် အစားစားလိုက်ရင် ပြန်ပြောက်သွားပါတယ် ဆရာဝန်ကတော့ TB တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတော့ပြောတယ် စစ်တော့စစ်ခိုင်းထားပါတယ်ဆရာ ဓါတ်မှန်တော့ရိုက်ပြီးပါပြီဆရာ ဘာရောဂါဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာသိချင်လို့ပါဆရာ
ဆေးစစ်ချက်အဖြေစာမှာ တီဘီအဟောင်းလို့ပါတယ်။ မေးခွန်းအရ ပန်းနာ ခေါ် ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ အသက်ရှူလမ်း ကျဉ်းတာလို့ထင်ရ။ ပန်းနာစာ ပို့လိုက်မယ်။
1. Asthma (1) ပန်းနာ (၁) https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/asthma-1.html
2. Asthma (2) ပန်းနာ အဆက် https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/asthma-2.html
ပြောက် ကို ပျောက်၊ ပြတ် ကို ပျက် လို့ ပြင်လိုက်တယ်။
Placenta Previa အချင်း ရှေ့ရောက်ဖြစ်ခြင်း
ဆရာရှင့် ကျမ အသက် ၃၄ နှစ်ပါ ကျမကိုယ်ဝန်က အခု ၁၉ ပတ်ရှိပါပြီ ဒီနေ့ ကိုယ်ဝန်ပြခဲ့တာပါ Ultrasound ရိုက်ရပါတယ် အချင်းက အောက်ရောက်နေတယ်တဲ့ ဆရာ အဲ့ဒါ စိုးရိမ်ရလား ဆရာရှင့်
Placenta Previa အချင်း ရှေ့ရောက်ဖြစ်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2018/09/placenta-previa.html
Skin Pressure Sore ဖိအားသက်အနာ
မင်္ဂလာပါဆရာရှင့်။ ကျွန်မကအသက် ၂၀၊ အိမ်ထောင်သည်၊ ကိုယ်ဝန် ၃၃ပတ်ထဲမှာပါ။ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်ရင် မောတတ်လို့အများအားဖြင့် လဲလျောင်းနေတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်သည် ဘယ်ဘက်စောင်းအိပ်ပေးတာ ကောင်းတယ် ဆိုလို့ ကျွန်မဘယ်ဘက်ကိုပဲ စောင်းအိပ်ပေးပါတယ်။ အခုကျွန်မဘယ်ဘက်တင်ပါးမှာ Bedsores ဖြစ်သလိုမျိုး မြင်ရခံစားရပါတယ်ဆရာ။ သက်သာပျောက်ကင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးတွေ ညွှန်ကြားပေးစေလိုပါတယ်ဆရာ။
Skin Pressure Sore ဖိအားသက်အနာ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/09/skin-pressure-sore.html
Sleeping positions during pregnancy ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဘယ်လိုအိပ်သင့်သလဲ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/09/sleeping-positions-during-pregnancy.html
ပွေးပေါက်နေလို့ လိမ်းဆေး သောက်ဆေး စုံနေပြီ ပျောက်ခါနီးဖြစ်လိုက် ပြန်ပေါ်လာလိုက်နဲ့ သောက်ဆေး ကောင်းကောင်းလေး လမ်းညွှန်ပေးပါအုံး
ကလေး လူကြီး အသက် ကျား မ မသိ။
Ringworm ပွေး https://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/ringworm.html
ဒေါက်တာရှင့် မင်္ဂလာပါ ရှင့် ကျွန်တော်၏အစ်မက အသက်က ၄၂နှစ်ပါ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်ရှင် သွေးလေးဘက်နာလို့ အဖြေထွက်ပါတယ်ရှင့် ဆေးနည်းကုနည်းများအလင်းပြပေးပါဆရာ ကုလို့ရတဲ့ရောဂါ ဟုတ်မဟုတ်လည်း စိတ်ပူစွာ သိလိုပါတယ်ဆရာ မေးမြန်းရခြင်းအတွက်လည်း အားကိုးပါတယ်ဆရာ အားလည်းနာပါတယ်ဆရာ
ဆေးစစ်ချက်စာ ပုံမဟုတ် သိပါသလား။ အထင်နဲ့ပြောကြတာတွေကို သေချာပြန်မေးတော့ မှားနေတာမျိုး ခဏခဏကြုံရတယ်။
ကလေး လူကြီး အသက် ကျား မ မသိ
မင်္ဂလာပါဆရာ ကျွန်တော် ဆင်တုတ်ကွေး ဖြစ်ပြီး ခြေလက်တွေကိုက်ကျန်ခဲ့လို့ ဘာဆေးတွေစွဲသောက်သင့်လည်း
Chikungunya ချီကန်ဂွန်ညာ ခေါ် ဆင်ဖြူတော်တုပ်ကွေး https://doctortintswe.blogspot.com/2019/09/chikungunya.html
ဆရာ ဒီဆေးက တနေ့ဘယ်နှစ်ကြိမ်သောက်ရမလဲးဆရာ ကျေးဇူးပြုပီးညွန်ပြပေးပါဆရာ ဆင်တုပ်ကွေဖြစ်နေလို့ပါ ခြေစစ်လက်စစ်တွေ အရမ်းကိုက်ခဲနာနေလို့ပါဆရာ
လဲး မှားမလို။ ပီး မှာ ရရစ်လို။
အသက် ၃၁နှစ် ကိုယ်ဝန် ၃လနှင့် ၂ပတ်ပါရှင့့် မှမြန်မာပြည်သို့ ပြန်ချင်လို့ပါ ကိုယ်ဝန် ၃လ ၂ပတ်ဆို လေယာဉ်စီးလို့ရ၊ မရ သိချင်လို့ပါရှင်။
Pregnancy and Air Travel ကိုယ်ဝန်နဲ့ လေယာဉ်ခရီး https://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/pregnancy-and-air-travel.html
ဆရာ ကျွန်မအသက် ၃၀၊ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ သားတယောက်ဖွားပြီး ၃နှစ်ခံတားဆေးလက်မောင်းထဲထည့်ချိန်မှစ၍ခေါင်းခဏခဏမူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၃နှစ်ခံဆေးထုပ်ပြီး Ok ဆေးကတ်စားနေပါတယ်။ ခေါင်းမူးမသက်သာပါဘူးဆရာ။သွေးပေါင်မကျဘဲမူးနေတာ။ အိပ်ချိန်ဆိုမျက်စိတွေပြာပြီးမူးပါတယ်ဆရာ။ အိပ်ပျော်ပြီးတရေးနိုးထတဲ့အချိန်တွေမှာ ရုတ်တရက်မထနိုင်အောင်မူးပါတယ်။ တရေးနိုးထချိန်မှာခေါင်းမူးနေတာ ၂ပတ်လောက်ရှိသွားပြီဆရာ။ အမြဲတမ်းအချဉ်စားချင်နေပါတယ်ဆရာ။ ဘာဆေးစားသင့်တယ်လမ်းညွန်ပေးစေလိုပါတယ်ဆရာ။
Dizziness အမူးရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/dizziness.html
Acute Periphreral Vertigo အမူးရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/08/acute-periphreral-vertigo.html
BPPV အရက်မသောက်ဘဲ မူးတဲ့ရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/bppv.html
PPPD ခေါင်းမူးရောဂါတမျိုး http://doctortintswe.blogspot.com/2017/05/pppd.html
Vertigo အမူးရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/vertigo.html
PPPD ခေါင်းမူးရောဂါတမျိုး https://doctortintswe.blogspot.com/2017/05/pppd.html
ရရစ် ၅ ခု ထည့်လိုက်တယ်။
တရားစာ ကွန်မင့်တခုလာတယ်။ မိမိတို့အလိုရှိအပ် တောင့်တ အပ်သော အပူဓတ်အလောင်ဓတ် တဲ့။ ဓါတ်လို့ရေးရတယ်။ ခုခေတ်မှာ ဓာလို့ရေးတာသာ မှန်တယ်ထင်နေကြတာ မဟုတ်ပါ။ လက်ရေးတွေ အဆင်မပြေတာကများတယ်။ ဓါ လို့ ရေးတာက တ နဲ့ မှားစရာမရှိဘူး။
အမေ့အတွက် မေးချင်လို့ပါ ဆရာ အသက် ၆၇ နှစ်ပါ အိမ်ထောင် မရှိတော့ပါဘူး ရောဂါက ၆လပိုင်းထဲတုန်းက မျက်နှာကြီး တခုလုံးဖောင်းအစ်နေပြီး တကိုယ်လုံးအသားတွေ နေရာအနှံ့ယားနေလို့ ဆိုပြီး ဆေးခန်းသွားပြလိုက်တော့ ဆီးချိုသွေးချို နဲ့ သွေးတိုး ရှိတယ် ဆိုတာကို သိရပါတယ် ဆရာ အမေက အခု နောက်ပိုင်း သွေးကျဆေးနဲ့ ဆီးချိုကျဆေး တွေကို နေ့တိုင်း သောက်ရတော့ မူးနေတာ တပတ်လောက်ရှိပါပြီ ဆရာ အရင်ကတည်းက ကျောက်ကပ်လည်း သိပ်မကောင်းတာ ရှိထားပါတယ် ဆရာ ပြီးဆေးသောက်ဖို့ ညွှန်ကြားပေးပါ ဆရာ အခုရက်ပိုင်းထဲ ခေါင်းမူးလာတာ ပိုပိုပြင်းထန်တယ်အိမ်ကြီးလည်း ဇောက်ထိုးကြီးဖြစ်နေတ်ာလို့ သက်သာရင် ပြန်ပြောပြတယ်ရာ အစာစားရင် ရေသောက်ရင် လည်မျိုကြီးထဲမှာ တခုခုပိတ်နေသလိုမျိုးကြီးလည်း ဖြစ်ဖြစ်နေတတ်လို့ပါ ဆရာ ဘယ်လိုမျိုး ဆက်လုပ်သင့်ပါသလဲဆိုတာကို လမ်းညွှန်ပြပေးပါ ဆရာ
ဆရာ မင်္ဂလာပါရှင့် အသက်က ၂၀ ကလေးက တနှစ်နဲ့ငါးလပါ သုံးလခံဆေးထိုးထားတာ ရာသီတွေလာနေလို့ ဆရာဝန်ပြတာ ဆရာဝန်ကသွေးထိန်းဆေးပေးပါတယ် သွေးထိန်းဆေးသောက်ရင်းနဲ့ မသက်သာလို့ ထပ်ပြတော့ exluton တားဆေးကဒ်သောက်ခိုင်းပါတယ် ဆေးသောက်တာနှစ်လုံးမြောက်မှာ ရာသီဆင်းတာမရပ်သေးလို့ တခြားဆရာဝန်နဲ့ ပြောင်းပြတာ သူပေးတဲ့ဆေးနဲ့အဆင်ပြေပြီး သွေးမဆင်းတော့ပါဘူး။ အဲ့ဒါ exluton ဆက်သောက်ဖို့လိုသေးလားရှင့် သုံးလခံဆေးက နောက်လ ၁၃ရက်နေ့မှရက်ချိန်းပြည့်မှာပါ ရက်ချိန်းပြည့်မှ exluton ဆက်သောက်မလို့ပါ အခုမသောက်လို့ ရပါသလားရှင့်
၃ လပြည့်ပြီး ပြောင်းလိုက ပြောင်းနိုင်။
Depo Provera သုံးလခံ ကိုယ်ဝန်တားထိုးဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2016/04/depo-provera.html
Exluton နို့တိုက်မိခင် ကိုယ်ဝန်တားဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/birth-control-minipill.html
အသက် အချက်အလက်တွေ မသိ
နဖူးမှာအဆီဖုတွေထွက်နေသူ အသက် အချက်အလက်တွေ မသိ။
၂။ ဆရာ ငါးကြီးဆီ Omega3နဲ့ zytrim နဲ့ တနေ့တည်းသောက်လို့ရပါသလားရှင့် အဓိက သမီးဝိတ်ကျချင်တာပါရှင်
ဝိတ်ကျချင်သူ အသက် အချက်အလက်တွေ မသိ။
ဆရာခငျဗြ...ကြှနျတျောတဈခုလောကျ.မတ်ေတာ ရပျခံပါရစေ...linkထဲက စာတှကေို Unicode နဲ့ တငျပေးစခေငျြပါတယျဆရာ...
ဆရာခင်ဗျ...ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်.မေတ္တာ ရပ်ခံပါရစေ...linkထဲက စာတွေကို Unicode နဲ့ တင်ပေးစေချင်ပါတယ်ဆရာ...
အခုမှ တရေးနိုးလာသလိုပဲ။ ဖေါင့်အကြောင်းတင်ပြထားတာတွေက များလှပြီ။ ဘယ်လို ဘာ့ကြောင့် ရေးထားပြီးသား။ ဘလော့ဂ်မှာ စာပုဒ်ရေ ၁၄၆၇၆ ရှိတယ်။
Corn ကျွန်မရဲ့အမေ၏ အသက် မသိ
မင်္ဂလာပါဆရာ ကျွန်မ ရဲ့အမေရဲ့ ခြေဖဝါးမှာ အသားမာလို အခဲလေးဖြစ်နေပါတယ်ဆရာ ဆရာဝန်ပြရင်လည်း ဆရာတွေ ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘဲပြောတယ်ဆရာ အရမ်းကိုက်ပါတယ်ဆရာ
ကျွန်မရဲ့အမေ၏ အသက် မသိ။ တည်နေရာ အရွယ်အစား မသိ။ ငါးမျက်စိခေါ်တာဟုတ် မဟုတ် မသိ။ ဆီးချိုရှိ မရှိ မသိ။
Corn ငါးမျက်စိ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/06/corn.html
ခါ ဂါ ငါ ဓါ ပါ ဝါ ခြောက်လုံး မောက်ချပါလို့ မှတ်သားမိပါတယ် ဆရာရှင့်
အဲလိုကွန်မင့်တွေ ခဏခဏလာတယ်။ ဖြေရတာလည်း အခါခါ။
မြန်မာစာမှာ ပုံသေနည်းတွေ ဖေါ်မြူလာတွေ ၁၀၀% အသုံးတည့်တာမဟုတ်ကြောင်း မကြာခဏ တင်ပြထားတယ်။
ဓါတုဗေဒသင်ရတော့ လက်ရေးလည်းမလှတော့ ဓာတုဗေဒလို့ရေးတဲ့သူတွေ အလှောင်ခံရတယ်။
မြန်မာစာသတ်ပုံမှာ တရားသေမှတ်ရတာမျိုးရှိသလို မူကွဲတွေ ဟိုအရင်ကတည်းက ရှိတယ်။ တမှန်သမျှ တစ်လုပ်ကြလို့ ပြောင်းခိုင်းတာက အမိန့်ပေးတာ။ ဝိဇ္ဇာပညာနဲ့ သိပ္ပံပညာ မတူတာတွေရှိတယ်။ မြန်မာစာကို ယူနီဖေါင်းဝတ်ပေးတာ ကြည့်လို့ မတင့်တယ်ပါ။
ပဲ နဲ့ ဘဲ ဖေါ်မြူလာလည်း အတူတူပဲ။ မူကွဲကို မသိစေအောင်လုပ်တာ အသိပညာကို မျက်စိတဖက်ပိတ်ခိုင်းထားသလို။
အရပ်ဆေးနည်း လမ်းဘေးဆေးနည်း တရုပ်ကုလားဆေးနည်း
ကွန်မင့်တခုရတယ်။ ကြက်သွန်နီအစေးဖြင့့့်
အရပ်ဆေးနည်း လမ်းဘေးဆေးနည်း တရုပ်ကုလားဆေးနည်းလာတင်တာတိုင်းကို ဖျက်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းနေရာမှာသာ ရေးပါရန်။
ဆရာအောင်သင်းထက် တော်သူတွေကတော့ (တစ်) သက်တာဆု ရကြတယ်။
မိန်းမတဦး နှင့် တောထွက်ရဟန်းကြီးတပါး
တ အသုံးတချို့ပါ ဆရာ
၂၀-၅-၁၉၆၃ နေ့ထုတ် ဗိုလ်တထောင်သတင်းစာ
Scorpion sting ကင်းသုံးကင်း တကင်းပြီးသလား
ဆရာရှင့် ကျွန်မသားလေး လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ရက်က ကင်းအဖြူအသေး လက်တဆစ်အရွယ် အကိုက်ခံရပါတယ် အသက်က ၅နစ်ခွဲပါ ကိုက်တဲ့နေရာက မနာတော့ပေမယ့် ကိုယ်က နဖူးနဲနဲပူ ကျောနဲနဲပူ ဖြစ်နေပါတယ် ဂျီလဲကျပါတယ် အစားလဲ ပုံမှန်စားပါတယ် ပုံမှန်အိပ်ပါတယ် ကိုက်တဲ့နေ့က ကိုကိခံရတဲ့နေရာကို ကြက်သွန်ဖြူနီထောင်းပြီး အုံပေးစည်းပေးပါတယ် သက်သာပြီထင်လို့ဆေးခန်းမသွားပြပါဘူးဆရာ အခုထိ ကိုယ်က နွေးနေလို့ ဖျားတာလဲမဟုတ်ဖြစ်နေပါတယ် ဆေးခန်းသွားပြဖို့လိုပါသလားရှင့် ဘာဆေးများတိုက်ရင်ရပါသလဲရှင့်
Scorpion sting ကင်းသုံးကင်း တကင်းပြီးသလား https://doctortintswe.blogspot.com/2019/08/scorpion-sting.html
Questions for Friday, so far:
I would like to hear about how the overall climate in Burma has changed over the course of his lifetime and what his outlook is for the future of the country.
I always enjoy hearing our colleagues speak about their fondest memories of being in Burma and would also love to hear about new, fond memories he has created since being here.
Burmese languages fascinate me. I want to know how they know who speaks what.
ခေါင်းစဉ်မှာ ဝေါဟာရနှစ်ခုတွဲထားတဲ့ စကားစု တခုတည်းသာဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာက ပညာရေး။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ ပညာရေး ဘာ့ကြောင့် ကျဆင်းနိမ့်ကျခဲ့ရသလဲ။ နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
လွတ်လပ်ရေးမရင်ကာလ စာသင်ကြားရေးကို ကျွန်ပညာရေးလို့ ခေါ်လိုက ခေါ်နိုင်ပေမဲ့ ပညာရေး ထိပ်တန်းကျခဲ့တယ်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီး စစ်အာဏာမသိမ်းခင်အထိလည်း အရှေ့တောင်အာရှကျွန်းစွယ်နိုင်ငံတွေထဲမှာ ထိပ်က။ အာဏာသိမ်းကတည်းက စကျတာ အခုထိ။ ထိုးကျတာ။ ဇောက်ထိုး။ မိုးမမျှော်နိုင်သေးပါ။
ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံမှာ နိမ့်နိမ့်လာတာ။ တိုင်းပြည်တခု ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းပြီဆိုရင် အုပ်စုံ။ စီးပွါးရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး အားလုံး။
ပညာရေးကျဆင်းတာထဲမှာလည်း ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံ။ အခြေခံက မြန်မာစာနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ။ အခုထိ ဇောက်ထိုး။ မိုးမမျှော်နိုင်သေးပါ။
နှစ်တွေကြာလာတော့ သင်ကြားပေးရသူတွေထဲမှာ ညံ့တဲ့ခေတ်စနစ်ကနေ မွေးထုတ်ထားသူတွေချည်းလိုလိုဖြစ်နေတယ်။ ကန်တော့။ ဆောရီး။
Signs Of Heart Disease နှလုံးရောဂါလို့ထင်စရာ ခြောက်ချက်
မင်္ဂလာပါ ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက် ၂၀ပါ ကျွန်မရဲ့နှလုံးက စူးကနဲအောင့်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေရတာပါ အသက်ပြင်းပြင်း ရှူရူင်ပိုအောင့်ပါတယ် ငြိမ်ငြိမ်လေးဘာမှမလုပ်ပဲနေရင်ခဏပဲ ပြီးတော့သက်သာသွားပါတယ် ကျွန်မ ၁၈နှစ်လောက်ကတည်းက အဲ့လိုမျိုးခံစားနေရတာပါ အဲ့တုန်းကဆို တလတခါလောက်ပဲ ဆိုတော့ အမှူမဲ့အမှတ်မဲ့ပါပဲ ခုနောက်ပိုင်းမှ ရက်စိပ်ပြီး အောင့်လာလို့ပါ ဘာဖြစ်တာလဲသိချင်ပါတယ် ဘယ်လိုကုသမှူမျိုးခံယူရမလဲရှင့်။
ရာသီ မသိ။ အိမ်ထောင်ရေး မသိ။ သွေးတိုး ခေါ် သွေးဖိအား မသိ။ နှလုံခုန်နှုန်း တမိနစ် ဘယ်လောက် မသိ။
နှလုံးရှိတဲ့နေရာ ရင်ပတ်မှာဖြစ်တာတခုတည်းကိုသာ မကြည့်ပါနဲ့။ ကိုယ်အလေးချိန်များသူတွေ၊ အသက် ၅ဝ ကျော်သူတွေ၊ ဆီးချိုရှိသူတွေ၊ သွေးတိုးနေသူတွေနဲ့ ကိုလက်စထောများနေသူတွေအတွက် အချက် (၆) ချက်ကို သတိပြုကြဘို့ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ နေ့စဉ်လုပ်နေကျ အလုပ်ကို အရင်မလိုမလုပ်နိုင်ဖြစ်လာခြင်း
မဖျားပဲနဲ့ ချွေးထွက်ပါသလား။ ချွေးကအေးစီးနေပါသလား။ ညမှာထွက်သလား။ ရာသီဥတု၊ အစားအသောက်နဲ့ ပြေးလွှားရလို့ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ချွေးထွက်ပါသလား။
ရင်ပတ်အလယ်နေရာနာပြီး ဘယ်ဖက်လက်မောင်းဆီအထိနာပါသလား။ တချို့မှာ ရင်ခေါင်း၊ လက်မောင်း၊ မေးရိုး၊ သွားနဲ့ နောက်ကျာပါနာတယ်။
၅။ မကြာခဏ အအေးမိနေသလား
အအေးမိ၊ တုပ်ကွေး၊ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးဖြစ်ပါသလား။ ဗိုင်းရပ်ပိုဝင်ခံရဖန်များနေသူမှာ နှလုံးက သွေးလှည့်တာ အားနည်းနေနိုင်တယ်။
ထုပ်စည်းထိုးရေးနေတာ မှားနေရင် ပြုပြင်ပေးပါ
အိမ်တွင်းမှုလုပ်၊ သိမ်းထုပ်သေချာ၊ မိစ္ဆာကြဉ်ရှောင်၊ လျော်အောင်ဖြန့်ချိ၊ ပျင်းရိမမူ၊ ဝတ်ငါးဆူ၊ အိမ်သူကျင့်အပ်စွာ။
တခါတုန်းက တိုင်းပြည်ကြီတခုက ဘုရင်ကြီးတပါးမှာ အင်မတန်ချောမောလှပတဲ့ တဆယ့်ခြောက်နှစ်အရွယ် သမီးတော်လေးတပါး ရှိသတဲ့ကွယ်။
ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီးရေးသားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသွားရခြင်း အကြောင်းရင်းနှင့် တရားခံများထဲက ကောက်နှုတ်တင်ပြပါရစေ။
(စ) သမိုင်းပါမောက္ခ ဒေါက်တာသန်းထွန်းက သမိုင်းဘာသာရပ်ဟာ နိုင်ငံတိုင်းအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ဘာသာရပ်ဖြစ်လို့ မအအောင်၊ မတုံးအောင် သမိုင်းသင်ရတယ်လို့ အဆိုအမိန့် ရှိခဲ့ဖူး ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ (ဗိုလ်နေဝင်းခန့်တဲ့) ဒေါက်တာညီညီရဲ့ စနစ်သစ် ပညာရေးအရ အမှတ်နည်းတဲ့ လူတွေကို သမိုင်းအဓိက သင်ရန်ပို့ လိုက်တော့ အလွန်ဝါသနာပါပြီး စားကြိုးစားသူ တယောက်တလေကလွဲလို့ သမိုင်းသုတေသီ လူချွန်လူကောင်းများ ထွက်လာရန် မလွယ်ပါ။ မြန်မာစာ အဓိကဘာသာရပ်မှာလည်း ထိုနည်း၎င်း ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။
မြန်မာစာအတွက် ပိုကံဆိုးတာကတော့ အာဏာရှင်ဗိုလ်နေ၀င်း မြန်မာစာကော်မရှင်မှာ နာယကတက်လုပ်ပြီး သတ်ပုံ၊ သဒ္ဒါတို့ကို သူ့စိတ်တိုင်းကျရေးဆွဲ ပြင်ဆင်ခိုင်းလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာကြီးဦးဝန်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုတောင် မကျက်တကျက်ဖုတ်ထားတဲ့ပေါင်မုန့်လို မနူးမနပ် မတတ်တတတ်လူလို့ ဗိုလ်နေ၀င်းက သရော်တော်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ အကျယ်ကိုဆရာကြီးကြေးမုံဦးသောင်း ရေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါ တယ်။ တလောကမိုးမခမှာပါသွားတဲ့ ဦးခင်မောင်စော (ဘာလင်) ရဲ့ မြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးတခုမှာလဲ အလားတူထောက်ပြထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသေးစိတ် ထပ်မရေးလိုတာ့ပါ။ မြန်မာပြည်ထဲက လူများမှာတော့ ဓားဂုတ်ပေါ်ဝဲပြီး သုံးခိုင်းနေလို့ မချစ်သော်လည်းအောင့်ကာ နမ်း ဆိုသလို ကြိတ်မှိတ်ပြီး ဒီသတ်ပုံကျမ်းသုံးနေရတာကို နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်ပရောက် စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်နေသူများထုတ်တဲ့ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ် စတာတွေကလဲ ဒီသတ်ပုံကျမ်းအတိုင်း လိုက်နာရေး နေကြတာကတော့ ၀မ်းနည်းစရာပါ။ အများညီ ဤကိုကျွဲဖတ်ကြဆိုသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ အများ မိုးခါးရေသောက်နေကြတော့လဲ ကျွန်တော် အပါအဝင်လူအများစုဟာ ရောယိမ်းလိုက်၊ ဘသားယိမ်းလိုက် လုပ်မိသွားကြပါတယ်။ ဆရာကြီးကြေးမုံ ဦးသောင်းကတော့ ကွယ်လွန်တဲ့အထိ စစ်အစိုးရရဲ့သတ်ပုံကျမ်းကို သပိတ်မှောက်ပြီး က၀ိလက္ခဏာသတ်ပုံ သတ်ညွှန်း အတိုင်းသာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ (ဆုံး)
ကဝိလက္ခဏာသတ်ပုံကျမ်းကို စိန္တကျော်သူ ဦးဩက သတိုးမင်းခေါင်ရဲ့ တိုက်တွန်းချက်အရ ရေးသားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မောင်သြဟာ ဘုတလင်၊ မောင်းထောင်ရွာမှာ ၁၀၉၈ ခုနှစ်မှာမွေးတယ်။ ဟံသာဝတီရောက်မင်းနဲ့ သတိုးမင်းခေါင်ထံမှာ ခစားရတယ်။ ၁၁၁၃ ခုနှစ် တော်သလင်းလဆန်း ၁၁ ရက်နေ့မှာ ကျမ်းပြီးစီးတော့ အသက် ၁၅ နှစ်သာရှိသေးတယ်။ ကဝိလက္ခဏာသတ်ပုံကျမ်းမှာ ဆန်း၊ အလင်္ကာ၊ သဒ္ဒါ၊ ဗျာကရုဏ်း၊ ရှေးထုံးပုံပြင်၊ ရာဇဝင်သမိုင်း၊ သံပိုင်းမော်ကွန်း စတဲ့ လောကီနှင့် လောကုတ္တရာကျမ်းတွေကလာတဲ့ ဗဟုသုတ အဆီအနှစ်တွေနဲ့ ပြည့်စုံတယ်လို့ ချီးမွမ်းခြင်းခံရတယ်။
အခုတော့ လောကီနဲ့ လောကုတ္တရာကျမ်းတွေကလာတဲ့ ဗဟုသုတအဆီအနှစ်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ သတ်ပုံကျမ်းတွေ တရားမဝင်ဖြစ်ကုန်ပြီ။
ကဝိလက္ခဏာသတ်ပုံ လေးစောင်တွဲ ပါဠိဆရာဦးဖြေ သုတ်သင်ပြင်ဆင်သည်
သက်ငယ်တပုံ ဝါးတရုံ ရိပ်မြုံသာချမ်းဧး
ရောင်ခြည်ခြောံသွယ်၊ ဘဝဂ်ကယ်၊ အံ့ဘွယ်ဆဲ့ရှစ်ဖြာ။
ပရိသတ်လယ်၊ ပျော်စံပယ်၊ ဘုန်းကြွယ်လူ့ထွတ်ချာ။
ရနံ့မပြယ်၊ ပန်းစပယ်၊ ခက်သွယ်နှာမောင်းဖြာ။
မုရင်းတံစယ်၊ ကောက်သန်လယ်၊ ကတွယ်မစိုက်ရာ။
ပျိုပျိုရွယ်ရွယ်၊ နောင့်ဆွေမယ်၊ ချစ်ဘွယများသည်သာ။
မင်းဆက်ငါးသွယ်၊ ရှင်ဘို့မယ်၊ နန်းလယ်တင်သဉ်သာ။
လဟာပြင်ကျယ်၊ မိုးမှာကြယ်၊ ပြိုင်ဆွယ်မနှုန်းရာ။
ပိန်းကောလှေငယ်၊ မြစ်ပင်လယ်၊ အလွယ်မကူးသာ။
အရိပ်နည်းငယ်၊ မကုံကယ်၊ ကုန်စယ်သွားလေပါ။
ဖေါင်းစိမ်းသက်ငယ်၊ ကိုင်းစက်စယ်၊ ပိတ်ကွယ်မိုးရှက်ကာ။
တုံ့ပယ်တုံ့ပယ်၊ ယက်ကန်းရှယ်၊ သွတ်လှယ်ပြန်လူးလာ။
သပ်သပ်ပါယ်ပါယ်၊ ပျိုနုနယ်၊ ထက်ဝယ်ဘွဲ့ခွေကာ။
မင်းပရိယာယ်၊ ငတင့်တယ်၊ နားဝယ်မလည်ရှာ။
ပြက်ပြက်ပြယ်ပြယ်၊ ငရဲးလွယ်၊ မျိုးနွယ်မြတ်ဆန်းသာ။
ရတုချဘွယ်၊ အသွယ်သွယ်၊ ခြောက်ဆယ်ကိရိယာ။
ဆန်းဆန်းကြယ်ကြယ်၊ ပညာကျယ်၊ တဆယ်ဥပစာ။
ကြေးနီတဆယ်၊ ငွေတဆယ်၊ သည်ဖွယ်သုံးဗိဿာ။
သစ်ကြားသစ်အယ်၊ စားချင်ဘွယ်၊ ဓါးဝယ်မြို့ကျေးမှာ။
ပဲးကူးမြို့ဝယ်၊ မွေသောက်သွယ်၊ သပ္ပါယ်ရှုစရာ။
လက်တော်ငင်ဆွဲး၊ တလံခွဲး၊ ပြောင်ပြဲးနဖူးဖျား။
တရုပ်ကျဆဲး၊ နန်းတော်လွှဲး၊ မင်းရဲးကျော်ခေါင်အား။
စပါးတခွဲး၊ ငွေတပဲး၊ ခြင်မြဲးဆယ်တင်းစား။
တလုံလဲးလဲး၊ လည်ချင်းနွှဲး၊ လက်ဝဲးမယ်မထား။
ချောင်းတဟဲ့ဟဲ့၊ ပျောင်းယဲ့ယဲ့၊ မဲ့၍ ငိုတတ်သည်။
ကျောက်နဂါးသွဲ့၊ စိမ်းလဲ့လဲ့၊ အိုဘဲ့မြတခြည်။
သလ္လာမြစ်ဆုံ၊ မြို့ဗဒုံ၊ မုံရွာနှင့်မဝေး။
သက်ငယ်တပုံ၊ ဝါးတရုံ၊ ရိပ်မြုံသာချမ်းဧး။
တိထီရက်ပုံ၊ လူ့သက်ကုံ၊ တပြုံဖြည်းဖြည်းသွေး။
ဆေးပြာမံအုံ၊ အနာမြုံ၊ တလုံလဲးလဲးပေး။
ရှစ်မည်ဂြိုဟ်ပုံ၊ နိယထုံ၊ တစုံတခုဘေး။
ဒီ (တစ်) ခါတော့
အဖြေဟာ (တစ်) ခုထဲ
(တစ်) ဝါးဝါး (တစ်) ဟားဟား
ပညာရှာခြင်း (တစ်) မျိုးပါပဲ
ခေတ်ပေါ်မြန်မာစာ တဝါးဝါးတဟားဟားရယ်စရာ ဖြစ်ရပါတော့သတည်း။
၁။ မင်္ဂလာပါ ဆရာ သမီးလေးက အခု ၄ ပါ မနေ့ ကတနေ့လုံး ဆီးမသွားဘူးရှင့် ည၈နာရီ တကြိမ်သွားပြီး အခုမနက်ထိ ဆီးထပ်မသွားလို့ ပါရှင် ဖြေပေးပါရှင့်
၄ ဆိုတာ ရက် လ နှစ် မသိ။ ရေသောက်နည်းသလား။
အဲလိုမေးတာတွေ မကြာမကြာလာတယ်။ ဂဏန်းနောက်မှာ တန်ဖိုး ခေါ် ယူနစ်ပါရင် ဘာမှနားမလည်စေနိုင်။
တနှစ် ၃ လသားကလေး၊ ကိုယ်အလေးချိန် ၂၀ ပေါင်၊ ဖျားနေတာ ၂ ရက်၊ အပူချိန် ၁၀၀ ဒီဂရီ အက်ဖ်၊ ပါရာစီတမော အရည် ၅ စီစီ၊ တနေ့ ၃ ကြိမ်တိုက်ပါ။
Lung Cancer (2) အဆုပ် ကင်ဆာ (၂)
ကျမအမျိုးသားပါ အသက် ၅၈နှစ် အဆုတ်ကင်ဆာအဆင့် ၃လို့ ပြောပါတယ် ဆေးသွင်း ဓါတ်ကင်သင့်ပါလား ဘယ်လိုနေထိုင်ကုသရပါမလဲ
ရောဂါအဆင့် လူနာကျန်းမာရေးအရ အထူးကုဆရာဝန်တွေညွှန်တာ လိုက်နာသင့်။
ယောက်ျားတွေရော မိန်းမတွေပါ ကင်ဆာကြောင့် သေဆုံးရတဲ့ အကြောင်းရင်းထဲမှာ အဆုပ်ကင်ဆာက ထိပ်မှာရှိတယ်။ ကနေ့ကာလမှာ အဆုပ်ကင်ဆာကြောင့် သေရသူ ၁ဝ ယောက်ထဲမှာ ဆေးလိပ်သောက်သူ ၉ ယောက်ရှိတယ်။ (ရင်ဒေါင်) ဓါတ်ငွေ့၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု နဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတွေက တခြား တရားခံတွေ ဖြစ်တယ်။ နောက်ပေါ် ဆေးဝါးသစ်တွေက အားတက်စရာ ရှိပါတယ်။
၁။ ဆေးလိပ် နဲ့ အဆုပ်ကင်ဆာ ဘယ်လိုဆက်စပ်သလဲ
စီးကရက်ထဲပါနေတာက ကင်ဆာကို ဖြစ်စေနိုင်တာသာ မကဘူး၊ အဆုပ်ရဲ့ သဘာဝခုခံမှုကိုပါ သက်ရောက်စေတာလဲ ပါတယ်။ အသက်ရှူလမ်း တလျှောက်မှာ Cilia ခေါ်တဲ့ အမွှေးသေးသေးလေးတွေ ရှိနေတယ်။ အဆိပ် အတောက်တွေ၊ ဗက်တီးရီးယားတွေ နဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ဝင်လာရင် တားဆီးပေးတယ်။ ဆေးလိပ်ငွေ့က ဒီအမွှေးလေးတွေကို လေဖြတ်သလိုဖြစ်စေတယ်။ အဲဒီအခါ Carcinogens ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တာတွေ အဆုပ်ထဲကို အတားအဆီးမရှိ ဝင်လာနိုင်ကြတယ်။
၂။ အဆုပ်ကင်ဆာ လက္ခဏာများ
ဖြစ်ခါစမှာ မသိသာဘူး။ ဘာမှမခံစားရသေးဘူး။ ဆက်ဖြစ်လာမှ ဒါတွေခံစားရမယ်။
- ချောင်းဆိုးတာ မပျောက်နိုင်ဘဲဖြစ်နေမယ်၊
- ရင်ပတ်နာမယ်၊ အသက်ပင့်ရှူရင် နာမယ်၊
- အသက်ရှူကြပ်မယ်၊ အသက်ရှူမဝဖြစ်မယ်၊
၃။ အဆုပ်ကင်ဆာ ဆန်ကာတင်စစ်ခြင်း
စောစောစီးစီး သိနိုင်လား။ Spiral CT scan ရိုက်စစ်ဆေးရင် တချို့လူတွေမှာ စောစောသိနိုင်တယ်။ စောတယ် ဆိုတာတောင် အသက်ကယ်နိုင်လောက်တဲ့အထိ စောသလား မပြောနိုင်ဘူး။ National Cancer Institute ကနေ ဒီနည်းရဲ့ အသုံးကျမှုကို လေ့လာနေတယ်။ ခက်တာတခုက ဒီ (စကင်) ရိုက်ရင် အဆုပ်ထဲက အန္တရာယ် ပြုနိုင်တာရော မပြုနိုင်တာရောတွေ့ မြင်ရတယ်။ သံသယကို ရှင်းအောင် ဆက်စစ်ရလို့ မလိုအပ်ဘဲ အသားစဖြစ်စစ်ရတာ၊ စိုးရိမ်စိတ်ဝင်ရတာ၊ ငွေကြေးကုန်ကျတာတွေ ဖြစ်စေတယ်။
၄။ ရောဂါဟုတ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသေချာစေမလဲ
များသောအားဖြင့် နာတာရှည်ချောင်းဆိုးတာ၊ အသက်ရှူကြပ်တာတွေ မဖြစ်သေးခင် သံသယမဝင်ကြဘူး။ Chest X-ray ရင်ပတ်ဓါတ်မှန် စတာတွေ ရိုက်မယ်။ Sputum test သလိပ်စစ်တာလုပ်မယ်။ သံယယကိုသေ့ခာအောင် Biopsy အသားစ ထုတ်စစ်တာ လုပ်မယ်။
၅။ အဆုပ်အသားစ ထုတ်ယူ စစ်ဆေးခြင်။
X-ray ဓါတ်မှန်မှာလဲ အကျိတ်တွေ့မယ်၊ Sputum test သလိပ်စစ်တာမှာလဲ Cancer cells ကင်ဆာဆဲလ် တွေ့မယ်ဆိုရင် Biopsy အသားစ ထုတ်စစ်တာလုပ်ပြီး သေချာစေမယ်။
၆။ အဆုပ်ကင်ဆာ အမျိုးအစားများ
အနုကြည့်မှန်ဘီလူး အောက်မှာ အဓိက ၂ မျိုးရှိတယ်။
- Small-cell lung cancer ဆိုတာက ပိုဆိုးတယ်။ ပြန့်ပွါးတာ မြန်တယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တာနဲ့ ဆက်စပ်တယ်။
- Non-small-cell lung cancer က ပြန့်တာ နှေးတယ်။ ၉ဝ% က ဒီအမျိုးအစား ဖြစ်တယ်။
၇။ အဆုပ်ကင်ဆာ အဆင့်များ
ကင်ဆာ ဘယ်အထိရောက်နေသလဲဆိုတာ အဆင့်ဖြစ်တယ်။ အဆင့်ခွဲစနစ်တွေ တမျိုးမကရှိတယ်။ Small-cell lung cancer အမျိုးအစားကို အဆုပ်တဖက်တည်းမှာသာနဲ့ တက်စေ့လောက်သာရောက်သေးတဲ့ Limited ကွက်ဖြစ်နေတာ နဲ့ အဆုပ် ၂ ဘက်လုံးနဲ့ တခြားအထိရောက်နေတဲ့ Extensive ကျယ်ပြန့်တာဆိုပြီး၊ ၂ ဆင့်ခွဲတယ်။ Non-small-cell lung cancer ကိုတော့ ၁ ကနေ ၄ အထိခွဲထားတယ်။
၈။ ဘယ်လောက်အထိ အသက်ရှင်နိုင်သလဲ
လေ့လာမှုအရ သိရတာ မရရာပါ။
American Cancer Society ရဲ့နောက်ဆုံး စာရင်းမှာ ၁၉၉၈ ကနေ ၂ဝဝဝ အတွင်း Non-small cell lung cancer ရောဂါနာမည် သေချာထားသူတွေမှာ ၅ နှစ်အသက်ရှည်သူ ၁% ကနေ ၄၉% ရှိတယ်။ ဒိနောက်ပိုင်း ဆေးတွေ၊ ကုသနည်းတွေ ပိုကောင်းလာနေပါတယ်။
Non-small-cell lung cancer တွေ့ရင် Surgery ခွဲစိတ်တာနဲ့ ကောင်းနိုင်တယ်။ အကျိတ်ဖြစ်ဖြစ် အဆုပ်တဖက်လုံးဖြစ်ဖြစ် ခွဲထုတ်မယ်။ Radiation therapy ဓါတ်ကင်တာ၊ Chemotherapy ဆေးပေးတာ ဆက်လုပ်နိုင်တယ်။ Small-cell lung cancer ဆိုရင် ခွဲဘို့နောက်ကျနေတာ များတယ်။
အသက်ပိုရှည်နိုင်သမျှရှည်အောင်၊ နေရတာလဲ သက်သာစေအောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ Radiation therapy ဓါတ်ကင်ပေးမယ်။ Chemotherapy ဆေးပေးမယ်။ Chemotherapy ဆေးပေးနည်း (ခီမို) ကို Small-cell lung cancer အမျိုးအစားမှာ ပိုသုံးလို့ သင့်တယ်။
၁၁။ ပြစ်မှတ်ထား ကုသပေးနည်း
ကုသနည်းသစ်ဖြစ်တယ်။ Chemotherapy ဆေးပေးနည်းနဲ့လဲ တွဲသုံးတာရှိတယ်။ တနည်းက ကင်ဆာ (ဆဲလ်) တွေ အသက်ရှင်ဘို့လိုတဲ့ သွေးကြောသစ်တွေ မဖြစ်စေအာင် လုပ်ပေးနည်းဖြစ်တယ်။ နောက်ပိုင်းအဆင့် လူနာတွေအတွက် Chemotherapy ဆေးပေးနည်းနဲ့တွဲရင် သင့်တယ်။
နောက်တနည်းက ကင်ဆာ (ဆဲလ်) တွေ ပွါးရာမှာလိုအပ်တဲ့ အချက်ပြမှုကို သက်ရောက်စေတယ်။
၁၂။ ရောဂါရှိတာ သိလာပြီးနောက် စိတ်ထိခိုက်မှာတော့ အမှန်ပါ။ ဆေးလိပ်သောက်တာနဲ့ ဆက်နေတယ်လို့ သိပြန်ရင် "နောင်တ" ဖြစ်နေတော့မယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်ဖို့ဘို့အချိန် မဟုတ်ပါ။ ရှေ့ကို အကောင်းဆုံး ဘယ်လို ဆက်မလဲကိုသာ အာရုံစိုက်ပါ။ လူနေမှုပုံစံပြောင်းဘို့ရာ အခုစလုပ်တာ အစောဆုံး ဖြစ်ပါမယ်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်တာနဲ့ မဖြတ်သူတွေထက် ပိုသက်သာတာ အမှန်ဘဲ။
၁၃။ ဆေးလိပ် မီးခိုးရှူရသူများ (တဆင့်ခံ ဆေးလိပ်သောက်သူများ)
ဇနီးဖြစ်ဖြစ် ခင်ပွန်းဖြစ်ဖြစ် ဆေးလိပ် သောက်သူဖြစ်ရင် သူများတွေထက် ၂ဝ-၃ဝ% ပိုဖြစ်လာနိုင်တယ်။
Uranium, (ယူရေနီယမ်)၊ Arsenic (အာဆင်းနစ်) စတာတွေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ နေ့တဓူဝ တွေ့နေရသူတွေမှာ အဆုပ်ကင်ဆာ ဖြစ်လာဘို့ အန္တရာယ်ရှိတယ်။ Asbestos မီးခံကျောက်လဲ အဲလိုဘဲ။
Radon ဆိုတာ ဓါတုဗေဒလို Rn နဲ့ရေးပြီး အနုမြူနံပါတ် ၈၆ ဖြစ်တယ်။ Radon gas (ရင်ဒေါင်) ဟာ သဘာဝဖြစ် ရေဒီယို ဓါတ်ကြွသတ္တိ ရှိတယ်။ ပုံပါကရိယာနဲ့ စစ်နိုင်တယ်။ အမေရိကားမှာတော့ ဆေးလိပ်ပြီးရင် အဆုပ်ကင်ဆာ ဖြစ်စေတဲ့ ဒုတိယ အကြောင်းခံ ဖြစ်တယ်။ ဒီရောဂါနဲ့ သေဆုံးရသူထဲက ၁၂% ဟာ ဒါနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်။
ဆေးလိပ်လောက် ဖြစ်စေနိုင်တာတော့ မဟုတ်ပါ။ ကား၊ စက်ရုံ စတာတွေကနေ ထွက်တဲ့ အငွေ့တွေကနေ ကင်ဆာဖြစ်ဘို့ အားပေးရာကျတယ်။
- မိသားစုထဲမှာ ဖြစ်ဘူးတာ၊
- သောက်ရေထဲမှာ (အာဆင်းနစ်) များနေတာ၊
- တခြားဘာအကြောင်းမှ ရှာမရသူတွေမှာလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ ဆေးလိပ် မသောက်သူတွေထဲမှာတော့ အမျိုးသမီး ဦးရေက ပိုများတယ်။ Adenocarcinoma အမျိုးအစားကလဲ ဆေးလိပ် မသောက်သူတွေမှာ အဖြစ်များတယ်။
- Diet and cancer ကင်ဆာ နဲ့ အစားအစာ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2012/01/diet-and-cancer.html
- Smoking and Cancer ဆေးလိပ်နဲ့ ကင်ဆာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/smoking-and-cancer.html
- Lung Cancer (1) အဆုပ် ကင်ဆာ (၁) http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/lung-cancer.html
- Lung Cancer (2) အဆုပ် ကင်ဆာ (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/lung-cancer-2.html
- Lung Cancer and Papaya အဆုပ်-ကင်ဆာ နဲ့ သင်္ဘောရွက် http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2012/01/lung-cancer.html
- Lung cancer therapy is milestone အဆုပ်ကင်ဆာကုသနည်းမှတ်တိုင် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/lung-cancer-therapy-is-milestone.html
က။ အနိစ္စ၌ နိစ္စဟု အမှတ်မှားခြင်းတပါး
ခ။ အသုဘ၌ သုဘဟု အမှတ်မှားခြင်းတပါး
ဂ။ ဒုက္ခ၌ သုခဟု အမှတ်မှားခြင်းတပါး
ဃ။ အနတ္တ၌ အတ္တဟု အမှတ်မှားခြင်းတပါး။
လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး ပြုစုတော်မူသော ဒီပနီပေါင်းချုပ် (မူရင်း ၁၉၈၉ ခုနှစ်ထုတ်)
အခုခေတ်မှာတော့ တရားကို အမှတ်မှား မမှား မသိပါ။ သတ်ပုံတွေ အမှတ်မှားခြင်း (တစ်) ပါးတွေ အလွန်များတယ်။
ရင်ထဲစွဲအောင် သုံးကြောင်းကဗျာတိုလေးတွေ ထားရစ်ခဲ့သူတွေက ဆရာတင်မိုးနဲ့ မောင်ယဉ်မွန်။
သူလည်း ကြွေကျ မြေခ ကဗျာ့ကြယ်တပွင့်။ ကြယ် (တစ်) ပွင့် မဟုတ်။
ပုံ Ko Nyo Aung
၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ ရခိုင်အမျိုးသမီးတဦးကပြောပြတယ်။ NLD အနိုင်ရရင် သူပုန်တွေဝင်လာမယ်လို့ ပြောနေကြတယ်ရှင့်။
ရခိုင်တွေက ဆပ်ပြာကို သဘုန်လို့ခေါ်ကြတယ်။ အိန္ဒိယမှာ အများဆုံးသုံးတဲ့ (ဆာဘုန်း) ဟင်ဒီစကား ဖြစ်ပါတယ်။ Soap = साबुन (Sabun) = ဆပ်ပြာ။
ဟုတ်နိုင်တယ်။ NLD အနိုင်ရရင် ဆပ်ပြာတွေအတော်လိုမယ်။ အညစ်အကြေး ဆေးကြောစရာတွေက များတာကိုး။
အရင်တခါတင်စဉ်က ကွန်မင့်တွေရေးကြတယ်။ ကျေးဇူး။
• ဆဘုန်၊ ဆာဘုန်း ဆိုတာကုလားတွေပဲခေါ်ကြတာပါဆရာ ရခိုင်တွေကတော့ သဘုန် လို့ပဲခေါ်ကြပါတယ်ဆရာ။
• မလေးလိုလည်း ဆာဘွန် ဘဲဆရာ ဗဟုသုတပေါ့
• မလေးလိုလည်း ဆာဘွန်း sabun ပဲဆရာ
• ဥရောပ နိုင်ငံများမှာလဲ ဆာဘွန်းလို့ ခေါ်ပါတယ် ဆော့ဘု လို့လဲခေါ်တာ တွေ့ဘူးပါတယ်
• ဘုတ်ပြင်း နယ်ဘက်ကရှမ်းတွေလဲ ဆာပူ လို့ခေါ်ပါတယ်
သူပုန်လို့အခေါ်ခံရသူတွေက လွတ်လပ်ရေးမရခင်ကတည်းက။ ဆပ်ပြာတွေ အများကြီးလိုတယ်။ အညစ်အကြေးတွေ၊ ဆေးကြောစရာတွေက အများကြီးကျန်သေးတယ်။
တွံတေးသိန်းတန်သီဆိုခဲ့တဲ့သီချင်းကို တင်ထားကြတာ သတ်ပုံမှန်နည်းနည်းနဲ့ (တစ်) နေဝင်သော်လို့ မှားရေးသူတွေက များတယ်။ စာသားတင်သူကလည်း တစ် ၁၉ လုံးနဲ့ရေးထားပြီး၊ ခုနစ်နဲ့ ခုနှစ်လည်း မှားနေတယ်။
တတောဝင်ထွက် တကုန်းတက်၍ တတောင်ကိုကျော် တပင်မှာနားသော် အားငယ်ဖြေမချိ တွေ့လိမ့်နိုးနိုး မျှော်ကိုးလို့နော် ဪ မကြင်နာ တမင်ခွာ စိမ်းသူရဲ့ မြင်လှဲ့စေချင်သော် တနေဝင်လျှိုး တမိုးပင်ချုပ်လေခဲ့ပြီနော်။
တနေထွက်၍ ဖြေရက်ကယ်မျော် ရေတွက်ကာ လက်မှာချိုး ဆယ်ပြန်ဆယ်ကာတိုးလို့ ရွယ်ကိုးသူပေါ်မလာသော် ဘယ်အငြိုးနဲ့များ ပစ်ခွာပြေးခဲ့ ချစ်ရှာသေးသူ ဘဝင်မှာ အဖြေမပေါ် မကြင်နာသူကြီးရေ ဘယ်သောအခါမှ ဆုံဆည်းရမယ်နော်။
ရေမြေ တော တောတောင်ကမ်းပါးယံ သီတာခုနစ်တန် ဆီးကာသော်တည့် မိုးအရှိ မြေအလုံး အဆုံးထိအောင် ဖွေရှာမယ်နော် သွေခွာ ပြေးသူကြီးရေ နီးအောင်ပင်လှမ်း လှမ်းလာခဲ့သော် လွတ်အောင်ပြေးပါလားကွယ် ဪ ဇွတ်ရှောင်ပြေးသူ တပါးရယ်နော်။
အသက်ခန္ဓာဆုံးစေတော့ ဖုန်းမေကြော့ကို မတွေ့တွေ့အောင် ဖွေရှာမယ်နော် မမေ့ မေ့အောင် ဖြေမဖျောက်နိုင်သူမို့ ရေမြေတသန့် ခြေဆန့်ကာရှာခဲ့ပြန်သော် တနေဝင်လျှိုး တမိုးပင်ချုပ်လေခဲပြီနော်။ ။
မြန်မာစာ တနေဝင်လျှိုး တမိုးပင်ချုပ်လေခဲ့ပြီနော်
ပေါ်ပလင် မိမ္မဝတ်လုံချည် တကိုက်လျှင် ၆ ကျပ်ထဲ
ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က အဝတ်စဆိုတာ မာလကျင်ကနေစတယ်။ သိပ်လည်းမဖြူ ကြမ်းတယ်။ နောက် ပိတ်စ ပေါ်လာတယ်။ ဖြူတယ်။ ချောတယ်။ နောက် ပေါ်ပလင်။ ပိုဖြူ ပိုချောလာတယ်။ တက်ထွန်ကတော့ မီးပူတိုက်စရာ မလို။ တိုက်ပုံနဲ့ ဘောင်းဘီရှည်ချုပ်ဝတ်လို့ ကောင်းတယ်။
ပေါ်ပလင်ကို ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြည်ကြည်ဌေးနဲ့ ကြော်ငြာတယ်။ ကြည်ကြည်ဌေးက ဗေဒါလမ်းသီချင်းကို စဆိုခဲ့သူ။
ဆရာရှင့် မြဉ္ဇူသကပန်းလား၊ မဉ္ဇူသကပန်းလား၊ ဘယ်ဟာအမှန်လဲသိချင်လို့ပါ။
မဉ္ဇူသကပန်းဆိုတာ နတ်ပန်းလို့စာဖွဲ့ကြတယ်။ သခွပ်ပန်းနဲ့ စာထဲမှာ အတူပါလေ့ရှိတယ်။ မဉ္ဇူပန်းလို့တော့ တကယ်ရှိတယ်။ နန်းသုံးတော်ဝင် စာဖွဲ့လေ့ရှိတဲ့ပန်းတော့ မဟုတ်။ တောပန်းလို့ပြောနိုင်တယ်။ တရပ်တမျိုး ခေါ်ကြသလား မပြောတတ်ပါ။ ဝင်းဦးဆိုတဲ့ သီချင်းတပုဒ်ထဲမှာ လှမဉ္ဇူလို့ဖွဲ့တာရှိတယ်။ မိန်ကလေးအလှဘွဲ့။
ဒီရက်မှာ ၁၉၆၅-၁၉၇၂ ဆေးကျောင်းသူငယ်ချင်းက နှစ်ယောက်၊ ၁၉၉၀ နိုင်ငံရေးလုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်က တယောက် မွေးနေ့တွေ။
ကြည်ကြည်ဋ္ဌေး ? ကြည်ကြည်ဌေး? တဲ့။
ကြည်ကြည်ဌေး နဲ့ ကြည်ကြည်ဋ္ဌေး ၂ မျိုးလုံးရေးနေကြတယ်။ အမည်မှန် မသိပါ။ ဆောရီး။
လူအမည်ကို ကြိုက်သလိုစာလုံးပေါင်းလေ့ရှိတယ်။ လေးနဲ့မြားလို့က သတ်ပုံအမှန်။ စာရေးဆရာကလောင်အမည်က ဒဂုံရွှေမျှား။ သူ့အမည်ကို ပြင်မရေးအပ်ပါ။
၁၉၉၀ အမတ် ၂ ဦးမှာ တယောက်က ဗိုလ် နောက်တယောက်က ဘို လို့ စာလုံးပေါင်းတယ်။ သူတို့အမည်တွေကို ပြင်မရေးအပ်။
၁။ ဆရာ ဒီကဗျာမှာရော စာအမှားတွေချည်းပဲ မြန်မာစာ ကြာလေ ယိုယွင်းလေပါ
သတ်ပုံအမှားတွေကို လိုက်ရှာနေစရာ မလိုပါ။ ခဏနေရင် ကွန်မင့်ကို ဖျက်ပါမယ်။ ဆောရီး။
ကျွန်တော့်နေရာမှာ သတ်ပုံမှာရေးလာရင် ပြင်ချင် ဖျက်ချင်တယ်။ ကိုယ့်စာ ကိုယ့်နေရာ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်တာရေးကြတာ သိပ်မပြောလိုပါ။ ခဏနေရင် ကွန်မင့်ကို ဖျက်ပါမယ်။ ဆောရီး။
စတစ်ကာတွေ၊ GIF တွေ၊ လူပုံတွေ၊ အကောင်ပုံတွေ၊ သတ်ပုံမမှန်တဲ့ ဆုတောင်းစာတွေ၊ တရားစာတွေကိုလည်း ဖျက်ပါတယ်။
ယူနစ်မပါမှာ မ ကျန်ခဲ့တာထောက်ပြလို့ ကျေးဇူး။ အဘအတွက်တော့ လင့်ပို့လိုက်မယ်။ ခဏနေ ကွန်မင့်ကို ဖျက်ပါမယ်။ ဆောရီး။
How to greet အဘခေတ် ကျဆုံးပါစေ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/04/how-to-greet.html
၁။ ဆရာ့ရဲ့ websiteက ဇျောဂြီဖွဈနတေယျ စံစနဈ Unicodeပွောငျးသုံးပေးပါလား ဖတျမရလို့ပါ
ဒါက မနေ့ကတယောက်။ လာဦးမယ်။
၂။ ဆရာခငျဗြ...ကြှနျတျောတဈခုလောကျ.မတ်ေတာ ရပျခံပါရစေ...linkထဲက စာတှကေို Unicode နဲ့ တငျပေးစခေငျြပါတယျဆရာ...
ကျွန်တော်က အပျော်သုံးသူတွေလို စဉ်းစားရတာမဟုတ်ပါ။ ဆောရီး။
ဆရာရှင့်၊ ဘုရားရှင် သီတင်းသုံးခဲ့တဲ့ ကပိလဝတ်၊ မိဂဒါဝုန် စတဲ့ နေရာဒေသများဟာ အခုဘယ်နေရာတွေပါလဲ၊ India ဘက်မှာလား Nepal ဘက်မှာလား၊ ဗဟုသုတမျှဝေပေးပါရှင့်၊ ကျေးဇူးပါဆရာ။
အခုချိန်ဟာ ဘုရားဖူးရာသီဖြစ်ပါတယ်။ မဇ္ဈိမဒေသမှာရှိတဲ့ သံဝေဇနိယ လေးဌာနကိုသွားကြပါတယ်။ သံဝေဇနိယ လေးဌာနဆိုတာ -
၁။ ဘုရားလောင်းမွေးဖွါးတဲ့နေရာ လုမ္ဗိနီ။ အဲဒီနေရာတခုသာ ကနေ့နီပေါနိုင်ငံထဲမှာတည်ရှိတယ်။ ကျန်နေရာတွေက ကနေ့အိန္ဒိယပြည်ထဲမှာရှိကြတယ်။
၂။ ဘုရားအဖြစ်ရောက်တော်မူရာ မဟာဗောဓိညောင်ပင်နဲ့ စေတီတော်တည်ရှိရာ ဗုဒ္ဓဂယာ၊ အိန္ဒိယ။
၃။ ပဉ္စဝဂ္ဂီငါးဦးကို တရားဦးဟောကြာရာ မိဂဒါဝုန်၊ အိန္ဒိယ။
၄။ ဘုရားမြတ်စွာ ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံရာ ကုသိနာရုံ၊ အိန္ဒိယ။ Kushinagar, Kusinagar or Kusinara (ကူစီနဂါး) လို့ အသံထွက်မှ ဒေသခံတွေကသိပါတယ်။
· ဗုဒ္ဓဂယာ အခါခါရောက်၊ ခေါက်ရေ မမှတ်မိ။ တခေါက်မှာ တမဂ်ရလို့ကတော့ ဒီစာရေးဘို့မရှိ။
· ဒုက္ကရစရိယာကျင့်ရာ နာရဉ္ဇရာမြစ်ကို အခါခါဖြတ်သန်း၊ သုဇာတာ နို့ဆွမ်းကို တမ်းမိ။ လွမ်း၏။
· ဣသိပတန မိဂဒါဝုန်မှာ သမင် ရှာကြည့်၊ ပဉ္စဝဂ္ဂီ မှန်းကြည့်၊ ဓမ္မစကြာ ရွတ်ကြည့်ချင်ပေသိ အလွတ်မရရှိ။
· ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ရာကြီးရှိရာ သာဝတ္ထိ၊ ရောက်သည့်အကြိမ်ရေ ရေမထားမိ၊ မပဋာကိုသာ လိုက်ရှာမိ။ သံဝေဂ ရရှိ။
· တောင်ငါးလုံးကာခို ရာဇဂြိုဟ်က ဗိမ္ဗိသာရအကျဉ်းထောင်မှာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ရှာခဲ့မိ။
· နာလန္ဒာတက္ကသိုလ်မှာ ဖရက်ရှာလုပ်ခဲ့တာ အခါခါ၊ တခေါက်မှာ တဘာသာသင်ယူခဲ့ရင်ဖြင့် အဋ္ဌာရသပညာအစုံရရှိ။
· ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူရာ ကုသိနာရုံမှာ ဝမ်းကိုက်ရောဂါသင်ခန်းစာ ပြန်ကာမှတ်မိ။
· ဗာရာဏသီ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ရောက်သည်မသိ။ ဆွန်ဘဏ္ဍာတိုက်က တခေါက်မှာ ရွှေဒင်္ဂါးတပြား နှိုက်ခဲ့ရရင်ဖြင့် ဒီနေရာ ရောက်ဘို့မရှိ။
· အင်ကြင်းပင်ရှားသွားတဲ့ လုမ္ပီနီဥယျာဉ်အသွားမှာ သင်ယူထားတဲ့ သာဖွါးနဲ့မီးယပ်ပညာ သေးသိမ်သွားတော့၏။
· ရာဇဂြိုဟ်က သာမညဖလသုတ်ဟောတော်မူရာ ဇီဝကဥယျာဉ်မှာ သမားတော်ဆုတောင်းခဲ့ပါ၏။
တင်ထား ရှယ်ထားကြတာတခု တွေ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘုရားဖြင့်စဉ် ပထမ အပိုင်း ၁ မှ ၃၀ထိ အေးဆေးနားတဲ့ချိန် ကြည့်ဖို့ shareယူထားနော်တဲ့။
ထိုင်းနဲ့ မြန်မာစာတမ်းထိုး အိန္ဒိယဇာတ်ကား။ နည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်တယ်။ သတ်ပုံတွေ သွက်သွက်ခါအောင် မှားနေတယ်။ ကွန်မင့်တခုက ယသော်ဓရာ နဲ့ မယ်တော်မာယာ နာမည်လွဲလို့ရေးထားတယ်။ မြတ်စွာဘုရာ၏ခမည်းတော် သုတ်ဓေါဒနမင်းတဲ့။ မြတ်စွာဘုရား၏ ခမည်းတော် သုဒ္ဓေါဒနလို့ ရေးရတယ်။ ပလင်တဲ့။ ပလ္လင်လို့ ရေးရတယ်။ နေနတ်သားကို မောတ္တာပို့တဲ့။ မေတ္တာပို့လို့ ရေးရတယ်။
ဗုဒ္ဓဝင်ဖျက်တယ်။ မြန်မာစာပျက်တယ်။ ကုသိုလ်ဖြစ်ပါ့မလား။
မင်္ဂလာပါ ဆရာ ကျမက အသက်၃၀၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးပါရှင့် ကိုယ်ဝန်က ၁၅ပတ်ထဲမှာပါ ချက်နားတဝိုက်အောင့်နေလို့ပါ
Pregnancy Pains ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဝေဒနာ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pregnancy-pains.html
တခိုင်နှစ်ခိုင် နှင်းပန်းခိုင် ခင်ဆွေးဦးရေးတဲ့စာအုပ်ပုံ ပို့ပေးတာရတယ်။ ကျေးဇူး။
နောက်ထုတ်တွေနဲ့ အွန်လိုင်းတင်တာတွေက ခင်ဆွေဦးရဲ့ ပညာပိုင်းဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့်ကို ချိုးဖေါက်ပြီး သတ်ပုံပြင်ထားကြတယ်။ မလုပ်ကောင်းပါ။
နုနုရည် အင်းဝစာအုပ် ထပ်ပို့တယ်။
ဟုတ်။ အဲဒီစာအုပ်ကို တင်ထားသူတယောက်ကတော့ တစ်ချို့ တဲ့။ နုနုရည် အင်းဝ ကို သတ်ပုံပြင်ပေးထားတယ်။
ခင်ဆွေးဦးနဲ့ နုနုရည် အင်းဝ တို့ထက် မြန်မာစာတော်သူတွေက ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ အများကြီး။ စာအုပ်ထပ်ထုတ်တဲ့ စာအုပ်တိုက်တွေကလည်း အရင်စာရေးဆရာတွေ ကဗျာဆရာတွေသာမက ဆရာတော်ကြီးတွေထက် မြန်မာစာ တော်ကြတယ်။ အွန်လိုင်းဒေါင်လုဒ် ကွန်ပြူတာစာရိုက်သူတွေကလည်း အရင်စာရေးဆရာတွေ ကဗျာဆရာတွေ၊ ဆရာတော်ကြီးတွေထက် မြန်မာစာတော်ကြတယ်။ ပြင်ချင်သလို ပြင်နိုင်စွမ်းရှိကြတယ်။
ကျွန်တော် အိန္ဒိယမှာ ၂၄ နှစ်နေခဲ့ရတယ်။ ၁၉၉၀ အကုန်ကနေ ၂၀၁၄ စက်တင်္ဘာလအထိ။ မွေးတာက ချင်းတွင်းမြစ်အနောက်ဘက်က ပုလဲ၊ ကြီးတာက မုံရွာ၊ ဆေးပညာသင်တာက မန္တလေး။ အခုနေရတာက ယူအက်စ်အေ။
တစ်တစ်ခွခွ အသံထွက်ဖတ်ရ ပြောရတယ်
တချို့ သောသူတွေက ဘဝပေးအခြေနေကြောင့် စာပေကောင်းကောင်းမတတ်မြောက်တဲ့သူတွေလည်းရှိကြမှာပါ ဘဝပေးအခြေနေကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးလို့ ဆရာ့ကို ကိုယ်တတ်သမျှစာလုံးလေးတွေနဲ့ အားကိုးတကြီး မေးမြန်းတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပါ သာ၍သာ၍ လူအများရဲ့အသက်ကို ဆရာကယ်တင်နိုင်ပါစေ
စာသင်ခဲ့တာနည်းလို့၊ တိုင်းရင်းသားဖြစ်လို့၊ ဆင်းရဲလို့ဆိုတဲ အထင်တွေ အတော်များများ မှားတယ်။ ဘွဲ့ရပြီးသူတွေ၊ ရာထူးကြီးသူတွေလည်း မှားတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေ၊ ကပြားတွေထဲက မှန်သူတွေလည်း တွေ့တယ်။ နမူနာတွေ တင်ပြထားတယ်။
သိရဲ့သားနဲ့ တမင်ထွင်ရေးတာလည်းရှိတယ်။ တကယ်ကို သတ်ပုံမှန်မသိသူတွေက အလွန့်အလွန် များတယ်။ မြန်မာစာဂုဏ်ထူးရသူဆီကလည်း မှားရေးတာ လာတယ်။
အခုရေးတာက မေးခွန်းပေါင်း သောင်းဂဏန်းကို အကြမ်းလေ့လာမှုလုပ်ထားပြီးမှ ရေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်မင့်ထဲက (တစ်) ချို့ကိုတော့ ပြင်ပါတယ်။ ဆောရီး။ တချို့လို့ သင်ခဲ့ရ ဖတ်ခဲ့ရတယ်။ အဲလို စသတ်ပါတာကို တစ်တစ်ခွခွ အသံထွက်ဖတ်ရ ပြောရတယ်။
မေးခွန်းမှာ သတ်ပုံမမှန်လို့ မဖြေခဲ့တာ တခုမှ မရှိပါ။ နားလည်ရင် ဖြေပါတယ်။
ဌ နှင့် ဋ္ဌ
၁။ ဋ္ဌေး ဋနှင့်ဌ ပေါင်းခြင်း ဌေး ပါတ်ဆင့်မပါ မူရင်းအဖြစ်မှတ်သားဖူးပါတယ်ဆရာ
၂။ တကယ်တော့ ဋ္ဌ က အသတ်သဘောမို့ပြဋ္ဌာန်းလို့သာ သိခဲ့တာပါ။ အတော်ခေါင်းစားစရာပါ။
၃။ ရှေ့မှာ စာလုံးပါနေရင် ဋ္ဌ ဖြစ်တယ်။ ဥပမာ ပြဋ္ဌာန်း။ ပြဋ္ဌာန်းမှာ ပျတ်လို့အသံထွက်ရတယ်။ အစဆုံးရေးရင် ဌ ဖြစ်တယ်။ ဥပမာ ဌာန။
၄။ ဆရာ ပြဌာန်းလား၊ ပြဋ္ဌာန်းပါလားဆရာ။
၅။ ဆရာရှင့် ဌ နှင့် ဋ္ဌ အက္ခရာကို မည်သည့်အကြောင်းရာများတွင် ခွဲခြား ရေးသားကြပါသလဲ။
၆။ ပထမလို့ဘဲသိခဲ့တာ ပဋ္ဌမဆိုတာ ပဋ္ဌမံဆရာသိန်း။ အာ့လိုနာမည်မျိုးဘဲသိခဲ့ရတာ။
၇။ ကမ္မဠာန်းတောရကျောင်းကထိန်လို့ရေးထားတဲ့ ပို့စ်တခုတွေ့ပါတယ်။ မှားနေတယ်။ ကမ္မဌာန်းလို့ရေးရတယ်။
ဋ္ဌ နဲ့ ဌ အသုံးနေရာ မတူပါ။ မြန်မာစာ ဗျည်းအက္ခရာ (၃၃) လုံးထဲမှာ ဌ သာပါတယ်။ ဋ္ဌ မပါ။
၁၃၁၆ (၁၉၅၄) ခုနှစ်ထုတ် ဦးစံချစ်ရေးသားတဲ့ ကဝိဓဇသတ်ပုံကျမ်းမှာတော့ ဌာန်း = ကမ္မဌာန်း၊ ပဌာန်းပါဠိ၊ ပြဌာန်းသည် လို့ပါတယ်။ ဌာန် = ဌာန်ကရိုဏ်း၊ ပြဌာန်း၊ အဓိဌာန်၊ သန္နိဌာန် လို့ပါတယ်။
၁၉၆၂ ခုနှစ်ထုတ် ဦးသာမြတ်ရေးသားတဲ့ မြန်မာစာရေးထုံးကျမ်းထဲမှာတော့ ဌာန်း = ကမ္မဌာန်း၊ ပြဌာန်းသည်၊ ပြဌာန်းချက်စာအုပ် လို့ပါတယ်။
စစ်အစိုးရခေတ်မှာထုတ်ထားတဲ့ မြန်မာအဘိဓာန်စာအုပ်ထဲမှာ ပြဌာန်းရော ပြဋ္ဌာန်းပါ မတွေ့ပါ။ ဌာန၊ ဌာနချုပ်၊ ဌာနေ၊ ဌာနန္တရ၊ ဌာပနာ လို့သာပါတယ်။
ခရီးဆောင်မြန်မာအဘိဓာန်မှာတော့ ပြဋ္ဌာန်း = ပျတ်ထန်၊ ပျာ့ထန် အသံထွက်ကြောင်းပါတယ်။ (ကြိ) ဥပဒေစသည်တို့ကို သတ်မှတ်ပေးသည်။
ကျွန်တော့်အမြင် ပဋ္ဌမံဆရာသိန်းက နာမည်အရသူသဘောကျတာကို စာလုံးပေါင်းထားတယ်။ တခြားလူတွေလည်း ကိုယ့်နာမည်ကို ကြိုက်သလိုပေါင်းကြတယ်။ ဥပမာ အူးမျင့်သိဏ်း။ သူတို့အကြိုက်ကို ပြောရန်မရှိပါ။
ပဌမ နဲ့ ပထမ ကိုသီးသန့်ရေးထားတယ်။
ဌာပနာ (ပါဠိ = ဌပန = ထားခြင်း)
ဌီ (ဥပါဒ်၊ ဌီ၊ ဘင်)
ပဌမ (ပါဠိ) = တခုမြောက်
ပထမ = (သကတ္တ ခေါ် သင်္သသကြိုက် ခေါ် ဆန်းစ်ခရင် ခေါ် သင်္သကရိုက်) = တခုမြောက်
တချို့က ငှက်ကိုရေးတာ ဌက်လို့ရိုက်တယ်။ မှားတယ်။ တချောင်းငင်၊ ဟထိုးကို အက္ခရာရဲ့ အလယ်ကနေသာဆွဲရတယ်။
ပဌမ ပဋ္ဌမ ပထမ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/04/blog-post_950.html
ပဌမ နှင့် ပထမ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/03/blog-post_94.html
မိတ်ဆွေတယောက် လေကောင်းလေသန့်ရှူနေပါသတဲ့။ နေပြည်တော်ရောက်နေသတဲ့။ ရယ်စရာ ရေးလိုက်တယ်။ နှာခေါင်းကို ဖွင့်၊ နားကို ပိတ်လို့။
ကျွန်တော်လည်း မနှစ်ကနွေမှာ အလည်ပြန်တော့ စာအုပ်ဆိုင်တွေကို သွားချင်ပေမယ့် မသွားခဲ့ပါ။ မျက်စိမှိတ်ထားစရာ စာအုပ်တွေကို မြင်မိမှာစိုးလို့။ မလုံ့တလုံပုံနဲ့ စာအုပ်အဖုံးတွေကြောင့် မဟုတ်ပါ။ ပေါ်လစီအရ ပလီထားတဲ့ သတ်ပုံတွေကို မမြင်ချင်လို့။
မမြင်ချင်ဆုံးစာအုပ်တွေကတော့ ရွှေဥဒေါင်းနဲ့ တသက်တာမှတ်တမ်းနှင့် အတွေးအခေါ်များ၊ သခင်ဘသောင်း ဘာသာပြန်တဲ့ တထောင့်တည၊ တောင်မြို့ဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့ တဘဝ သာသနာစာအုပ်တွေ။ အဲတာတွေကို စသတ်ထားကြတယ်။
သတ်ပုံ နှင့် စပယ်လင်
အင်္ဂလိပ်လိုရေး မေးတာကို အင်္ဂလိပ်လိုရေး ဖြေလိုက်တယ်။
ဖြေပြီး စပယ်လင် ပြင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ် ခေါ် အိုင် ကို အမြဲ အိုင်အကြီးခေါ် ကယ်ပီတယ်လက်တားနဲ့သာ ရေးရတယ်။ သင် ခေါ် ယူ ကို ဝိုင်အိုယူ နဲ့သာ ရေးသင့်ကြောင်း။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ရင်းနှီးတဲ့သူငယ်ချင်းဆီ စာရေးတာမဟုတ်။ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို ဆရာဝန်ဆီ စာရေးတာဖြစ်လို့။
အင်္ဂလိပ်လိုရေးတာကိုလည်း အားပေးတယ်။ မှန်စေချင်တယ်။
သူ့ဖုန်းမှာ မြန်မာစာဖေါင့်မရှိလို့ပါ။ နောင်စာရေးရင်သတိထားပါမယ်တဲ့။ အင်္ဂလိပ်လိုရေးတော့ ဖေါင့်မပြောင်းရလို့ အချိန်ကုန်သက်သာတယ်။ ကျေးဇူး။ စပယ်လင်တော့ သတ်ပုံပြင်သလိုသာ ပြင်နေရတယ်။
ပုံတင်ထားတာ တွေ့တယ်။ ကျေးဇူး။ ဖတ်တော့ နားမလည်။ ဆောရီး။
၁၉၆၂နှစ် ဇူလိုင်လမှာ ကျောင်းသားဆန္ဒပြပွဲကို ရက်ရက်စက်စက်ဖြိုခွင်းပြီး ကျောင်းတွေပိတ်တယ်။ နှစ်လလောက်အကြာ ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တော့ ကျောင်းသားတိုင်း ပုဆိုးနဲ့တိုက်ပုံအင်္ကျီ ဝတ်ရမယ်။ ဘောင်းဘီဝတ်ရင် နက်တိုင်တပ်ရမယ်။ ကျောင်းသူတွေလဲ အင်္ကျီလက်ရှည်ထူထူဝတ်ရမယ်။ အင်္ကျီပါးပါးနဲ့ အင်္ကျီလက်ပြတ် မဝတ်ရ။ ဆရာတွေ၊ ဆရာမတွေက ကြည့်ထိန်းရမယ်။ စည်းကမ်းအတိုင်း ဝတ်မလာသူတွေကို စာသင်ခန်းထဲ ဝင်ခွင့်မပြုရ အမိန့်တွေထုတ်ပါတယ်။
မတတ်နိုင်တဲ့ ကျောင်းသားတွေမှာ တိုက်ပုံအင်္ကျီက ထည်လဲ မရှိကြ။ တိုက်ပုံဝတ်မထားရင် စာသင်ခန်းထဲ ဝင်ခွင့်မပြုနဲ့ ဒုက္ခရောက်ကြရရှာတယ်။ ကိုမင်းနောင်ဆိုခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတဦးဆိုတဲ့သီချင်းက အဲဒီနောက်ခံမှာ ပေါ်လာတာ။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတဦး လှပုံထူးသမျှ တွေ့ရဖူးသည်မှာ။ ကြည်စွာဘဝင်နှလုံး ရွှင်ပြုံးမြေ့ကာ ယနေ့သာတိုင် သြော် မေ့ပါနိုင်အမြဲ၊ တသက်သက်စိတ်ထဲမှာ မျှော်ကာတွေး ငေးမိအခါခါ။
အင်းယားကန်အပါး လျှောက်ကာသွား အနားယူသောတနေ့မှာ၊ ယဉ်စွာယဉ်စွာ ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့ပြုံးလဲ့လဲ့ချစ်စရာ၊ ပွင့်သစ်လာသည့်ပန်း လန်းတဲ့ပုံပမာ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတဦး ချစ်ကြည်နူးစရာ လှပကြော့ယဉ်စွာ။
တပတ်လျှိုဆံထုံးကြော့မှာ တပွင့်ပန်းပန်လာ၊ ရှုကာငေး နုဝါအသွေး လက်ရှည်ထူထူလေးဝတ်ကာ၊ ကြက်သွေးနီနီ ထဘီပန်းခက် ယဉ်သထက်ယဉ်စွာ၊ နက်မှောက်ကတ္တီပါ လှပယဉ်ကျေး ပုံတော်လေးနဲ့ပါ။
မြန်မာဆန်ဆန် အနောက်ဟန်မနှော မဖောက်ပြန်သော သဘောထား ဝတ်စားတန်ဆာ၊ ရှုတိုင်းယဉ် အဆင်ပြေကာ အချိုးကျကျ လှပလို့ချစ်စရာ၊ တွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတဦးပါ။
အခုခေတ်မှာက တမျိုး။ တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေက မြန်မာစာသတ်ပုံနဲ့ အရေးအသား မသိကြတော့။ တွေ့ပုံထူးတဲ့ တစ်ကသိုလ်တွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ။
The Old Man and the Sea ဇရာ
ကွန်မင့်တခုရတယ်။ အဆိုတော် ကိုမင်းနောင် အရင်လလောက်ကမှဆုံးသွားပြီတဲ့ဆရာ အသံတကယ်ကောင်းပြီး သူ့သီချင်းတွေနားထောင်ကောင်းတယ် ဇရာ တို့ဂျင်မလေးဂျမ်းတို့ တဲ့။
ဇရာသီချင်းကို ဘိုကလေးတင့်အောင်ရေးသားပြီး ကိုမင်းနောင်ကဆိုပါတယ်။
အဏ္ဏဝါ ကမ်းခြေအနီးမှာ၊ ဇရာပို တံငါအိုကြီး ဘဝခရီးကိုတွေး တွေး ရင်လေးမိတာ၊ ငိုက်ဆွေးသလိုနွမ်း ပိုက်အဆွေးကို ထမ်းကာ၊ တလှမ်းခြင်းလှမ်းရင်း၊ ဝမ်းတွင်းမချိသမျှ အတိအကျပေါ်လာ။ အော် မြစ်ပြင်ရယ်ကျယ်ပါဘိလေး၊ ငါးတွေ သည်မြစ်ကြောမှာ ပေါပါဘိလေး။ သို့သော် သည်ပိုက်အဆွေးနဲ့ လိုက်ရေးမလွယ်ပါ။
နုပျိုသစ်လွင် ငယ်စဉ်ကိုမှန်း။ လွမ်း မျက်ရည်ဖြာ။ အင်အားသန်မာ လူလုံးကျစ်လစ်။ ပိုက်သစ်ကိုဆွဲကာ၊ လာလာလေ ရွှေငါးကြင်းတို့။ အိမ်အပြန်ငါးတန်ထမ်းလို့၊ မှန်းကာကြည့် လွမ်းပါဘိလေး။
ဇရာဖိစီး ခရီးမတွင်သောဘဝမှာ၊ ကျန်သေးသမျှ အားဆောင်ကြည့်ရှာ၊ ကံပေးမှ ငါးတကောင်မိမှာ။ အလို ကြည့်စမ်းပ စားစရာ ငါးသတ္တဝါ၊ ဟင် ပိုက်မှာတွယ်ငြိ မိတန်ကောင်းရဲ့တခါ၊ အသာအယာချော့ကာဆွဲ၊ အသက်ပင်မရှူရဲ လက်ထဲ လက်ထဲ လက်ထဲရောက်လု ခုအချိန်မှာ့့
လွတ်လေပြီ့့ ရွှေရည်ဝင်းသည့်ငါး ငါးသတ္တဝါ၊ ခုန်လွှားပြန်ဆင်း မြစ်တွင်းအဏ္ဏဝါ။ တငါအို့့ ဗျာပိုလှိုက်လှဲ မျက်ရည်ဝဲ။ အားခဲလို့မဖြေသာ၊ လူကဇရာ ပိုက်မှာဆွေး၊ ငိုကြွေးမည်တမ်း မြစ်ကမ်းဗွေအဏ္ဏဝါ။ ။
The Old Man and the Sea က အမေရိကန်စာရေးဆရာ အားနက်စ်ဟယ်မင်ဝေးရေးတဲ့ ဝတ္တု။ ၁၉၅၄ မှာ ထုတ်ဝေတယ်။ ကျူးဘားမှာ ရေးတာလို့ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကသာ အဲလိုအသံထွက်တာ အမှန်က ကူဗား တဲ့။
ပုံ The Old Fisherman by Alexander Ignatius Roche
ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက် ၃၀ ကလေးအသက် ၃လပါရှင့် ကျွန်မ သွားကိုက်၍ alaxan သောက်တာ ကလေးကို ထိခိုက်နိုင်သလား သိချင်ပါတယ်ရှင့်
Paracetamol (ပါရာစီတမော) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/paracetamol.html
Ibuprofen အိုင်ဘူပရိုဖင် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/ibuprofen.html
ဒီဆေး ၂ မျိုး ရောထားတဲ့ဆေးဖြစ်တယ်။ မမြင်ရ မစမ်းရသူတိုင်းကို အဝေးကနေ ဆေးကုသလို မလုပ်ပါ။ ရောဂါအကြောင်း ဆေးအကြောင်းသာ ရေးတယ်။
လေလည်းတိုက်တယ်။ အေးတယ်။ မအေးခဲ့တာ ကြာတော့ ပိုအေးသလိုထင်ရတယ်။ သစ်ပင်တွေ အရောင်ပြောင်းစပြုပြီ။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရာသီဥတု ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း မဖြစ်မနေ သွားလာ လုပ်ကိုင်ကြရတာတွေကိုတော့ မလုပ် မဖြစ်ကြပါ။ ဦးစားပေးရ ရွေးချယ်ရတာတွေ လူတိုင်းမှာ ရှိကြတယ်။
အေးချိန်မှာ ကွေးနေ တွေးနေသူတွေက လုပ်ရမှာတွေကို လုပ်ခဲ့ကြလို့။ မနားရသူတွေကလည်း နားချိန်မှာ နားကြရမယ်။
သစ်ရွက်စိမ်းတွေလည်း ဝါနီညိုရွှေရောင် ပြောင်းကြလိမ့်မယ်။ လူနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တို့ဟာ ဘာဝတရားနောက် လိုက်ကြရတယ်။
၁၀-၉-၂၀၁၂ နေ့မှာ အိန္ဒိယကာတွန်းဆရာတယောက် အဂတိလိုက်စားမှုကို ပြောင်လှောင်ရေးဆွဲလို့ အဖမ်းခံရတယ်။
၃၀-၇-၂၀၁၉ နေ့မှာ တရုပ်ကာတွန်းဆရာတယောက် တရုပ်ဆန့်ကျင်ရေးကာတွန်းဆွဲလို့ အဖမ်းခံရတယ်။
မြန်မာပြည်သား ကာတွန်းဆရာတွေကို မီမမီမသိပါ။ (ဦး) ဘဂျမ်း၊ (ဦး) သန်းကြွယ်နဲ့ မောင်စိန်တို့ဟာ အလွန်တော်တဲ့ ကာတွန်းဆရာတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ တော်တဲ့ တခြားကာတွန်းဆရာတွေလည်း အများကြီး။ အရင်ကကာတွန်းတွေမှာ သတ်ပုံလည်း မှန်တယ်။ အခုတော့ သတ်ပုံမှန်သူ နည်းနည်းသာ ရှိတယ်။
Baby Health Links ကလေးကျန်းမာရေးစာ ၂၀
မင်္ဂလာပါဆရာ ကလေးကအသက် ၃လပါ ချောင်းဆိုးတာ ၅ ရက်လောက်ရှိပါပြီ ရင်မကြပ်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့ ၃ရက်က ရန်ကုန်ကနေနယ်ပြန်ပြီးနောက်မှာ ပိုဆိုးလာပါတယ်ဆရာ ဆေးဆိုင်မှာမေးဝယ်တော့ Baby Cough Syrup ဆိုတဲ့ဆေး ပေးလိုက်ပါတယ်ဆရာ အခုကလေးက ချောင်းဆိုးတာစိပ်လာပါတယ် သလိပ်တွေအန်လိုက်မှသက်သာပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးပြောပြပါဦးဆရာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1. Baby Care ကလေးဗိုက်နာရင် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/baby-care.html
2. Baby health ကလေးကျန်းမာရေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/baby-health.html
3. Baby Questions ကလေးအတွက် မေးခွန်းများ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/baby-questions.html
4. Baby's Cough ကလေးငယ်တွေချောင်းဆိုးရင် http://doctortintswe.blogspot.com/2016/04/babys-cough.html
5. Baby's Cough ကလေးငယ်တွေချောင်းဆိုးရင် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/04/babys-cough.html
6. Child Health Care ကလေးတွေ နေမကောင်းရင် https://doctortintswe.blogspot.com/2017/12/child-health-care.html
7. Common Cold in children ကလေးတွေ အအေးမိရင် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/common-cold-in-children.html
8. Common Oral Mucosal Lesions ခံတွင်း-ပါးစပ်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2012/06/common-oral-mucosal-lesions.html
9. Coughing and Children ကလေးတွေချောင်းဆိုးရင် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/coughing-and-children.html
10. Cypon syrup (ဆိုက်ပွန်) ဆေးရည် http://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/cypon-syrup.html
11. Diarrhea in Children ကလေးဝမ်းသွားရင် https://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/diarrhea-in-children.html
12. Fever and Baby ကလေးနှင့် အဖျား https://doctortintswe.blogspot.com/2019/07/fever-and-baby.html
13. Fever First Aid အဖျားရှိသူ ရှေးဦးသူနာပြုနည်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/07/fever-first-aid.html
14. Gripe Water ကလေး လေဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/gripe-water.html
15. Medicines for babies ကလေးနဲ့ ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2016/08/medicines-for-babies.html
16. Myth About Babies ကလေးငယ်အတွက် မေးခွန်းများ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/11/myth-about-babies.html
17. Paracetamol and Azithromycin ကလေးဆေးများ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/paracetamol-and-azithromycin.html
18. Paracetamol Suppositories ပါရာစီတမောထည့်ဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2019/06/paracetamol.html
19. Paracetamol Syrup (ပါရာစီတမော) အရည် https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/paracetamol-syrup.html
20. Supplementary foods ကလေးအတွက် ဖြည့်စွက်စာ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/supplementary-foods_18.html
21. Tonics for Children ကလေးအားဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2017/06/tonics-for-children.html
22. Vomiting in babies ကလေးတွေအန်ရင် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/vomiting-in-babies.html
Red Received Round Rubber Seal Stamp လက်ခံရရှိပါသည်
၁။ How wikipedia is smart in our language
All operating systems on phones and computers have already had Unicode.
People are just only installing Zawgyi.
၂။ hello , sIR
we are manufcturer from China
mini humidifier will like ?
ကြော်ငြားများ လက်ခံရရှိပါသည်။ ကျေးဇူး။
Hepatitis B vaccine ဘီပိုးကာကွယ်ဆေး
ဆရာရှင့် ကျမက့့ မြို့နယ့့် တိုက်နယ်ဆေးရုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ Trained nurse ပါ ဒီနေ့OT ဝင်ရင်း round needle စူးမိလို့ပါရှင့် လူနာက HBs Ag positive ပါရှင့် ကျမက၂၀၁၀ သင်တန်းသူတုန်းက ဘီကာကွယ်ဆေးတော့ ထိုးထားပါတယ်ရှင့် Antibody အောင် မအောင်တော့ မစစ်ထားပါဘူး အဲတာ ဘီကာကွယ်ဆေး ထပ်မံထိုးဖို့ လိုအပ်လား သိချင်လို့ပါရှင့် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်
ဆောရီး။ ဘီကာကွယ်ဆေးထိုးထားရင် စိုးရိမ်စရာ မရှိလောက်။ အများအာဖြင့် ထပ်စစ်စရာမလိုပါ။ ဘီပိုးသံယရှိသူ နောက် ၄ ပတ်မှာ စစ်နိုင်။ ၁ ပတ်ကနေ ၉ ပတ်အထိစောင့်ရတတ်။ ၄ ပတ်က ပျမ်းမျှဖြစ်တယ်။
Hepatitis B vaccine အသည်းရောင် ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးအကြောင်း‬ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/07/hepatitis-b-vaccine.html
အသက် ၂၃။ မ။ အရေပြားရောဂါ အသက် ၅နှစ်မှစ၍ဖြစ်သည်။ယခင်ကထက် ယခု ပိုစိုးလာသည်။ ဘယ်လို ဆေးဝါးမျိုး သုံးရမည်နည်း။ ဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမည်နည်း။ ဘယ်လိုအရေပြားရောဂါဖြစ်သနည်း။ ဘယ်လိုကုသရမည်နည်း။
ဆောရီး။ နာတာရှည်အရေပြားမှာဖြစ်တာ အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ပြသင့်။ လင့်တခု ပို့မယ်။
Dermatitis ပျောက်နိုင်ခဲတဲ့ အရေပြားအနာ hhttps://doctortintswe.blogspot.com/2016/11/blog-post_27.html
စိုး နဲ့ ဆိုး ttps://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/eczema.html
White Elephant ဆင်ဖြူတော်
ကာတွန်းဆရာ (ဦး) သန်းကြွယ်က ဆင်ဖြူတော်ကို နိုင်ငံရေးမှာသုံးကြောင်းရေးဆွဲထားတယ်။ ဖဆပလ ခေတ်မှာ။
ထိုင်းနဲ့ မြန်မာအပြင် သီရိလင်္ကာ၊ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ နီပေါရာဇဝင်တွေမှာ ဆင်ဖြူတော်ကို တန်ဘိုးထားကြတယ်။ အမြတ်တနိုး မင်္ဂလာယူကြတယ်။ မြန်မာ့ကုန်းဘောင်ရာဇဝင်မှာမြေဒူးမင်းနဲ့ ဘုရင့်နောင်တို့က ဆင်ဖြူ့ရှင်ဘွဲ့ခံကြတယ်။ တော်ဝင်လက်ဆောင်အဖြစ်လည်း ပေးခဲ့ကြတယ်။ ၁၆ ရာစုထဲမှာ ထိုင်းနဲ့ ဗမာနိုင်ငံကြား ဆင်ဖြူတော် ၄ ကောင် ပိုင်လိုမှုကြောင့် စစ်ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။
ဟင်ဒူဒဏ္ဍာရီမှာလည်း ဝေဒစကြဝဠာဗေဒမှာ ဝေဒနတ်ဘုရားတွေဘုရင် Airavata ဟာ ဆင်ဖြူတော်ဖြစ်တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာစာပေမှာလည်း အများကြီးပါတယ်။ စကြာမင်းမှာ ဦးခေါင်းသုံးလုံးပါဆင်ဖြူတော်ရှိသတဲ့။ နာမည်ကလည်း Airavata ဖြစ်တယ်။
စစ်အစိုးရခေတ်ကခေါ်ကြတဲ့ ဆင်ဖြူတော်ဟာ Albino elephants ဖြစ်တယ်။ ခရုသင်းအပါအဝင် ဖြူတာမှန်သမျှကို ခေါ်တယ်။ တကယ့်အရောင်က ပန်းရောင်၊ နီညိုနုရောင်သာဖြစ်တယ်။ အမှန်က ဆင်ရော တခြားအကောင်တွေ၊ ငှက်တွေမှာပါ ရှားပါးလို့ တန်ဘိုးထားတဲ့သဘောပါပဲ။ တချို့ကြတော့ ကျိန်စာသဘောယူဆတာလည်းရှိတယ်။
အဖြူရောင်မုသားဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားစုရဲ့အဓိပ္ပါယ်က အသေးအဖွဲလိမ်ပြောတာတဲ့။ တဖက်သားခံစားချက်ကို မထိခိုက်အောင် ပြောတာမျိုးတဲ့။
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ တမျိုးယူဆကြတယ်။ မျှော်လင့်မထားတာတွေကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမားတာကို White elephant အသုံးကိုသုံးကြတယ်။ (ပီတီ ဘာနွမ်) ဆိုသူ အမေရိကန်စီးပွါးရေးသမားဟာ Toung Taloung ခေါ်တဲ့ ဗမာ့ အဘိုးတန်ရတနာဆင်ဖြူတော်ကိုရယူဘို့ အပြင်းအထံကြိုးစားခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ထိုင်းဘုရင့်ဆီက တကောင် ဝယ်လို့ ရသွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆင်ဖြူဟာ ညစ်ပေတဲ့မီးခိုးရောင်ထဲမှာ ပန်းရောင် အစက်အပြောက်လေးတွေနဲ့ဆင်သာ ဖြစ်နေတာ တွေ့ရတော့တယ်။
အဲတာကြောင့် ခုခေတ်မှာ အပေါ်ယံတန်းဆာဆင်ထားတဲ့ လက်ဆောင်နဲ့ ရောင်းကုန်ကိုသာ ဆင်ဖြူတော် အသုံးနဲ့ သုံးလာကြတယ်။ ဥပမာ စပိန်မှာ ဆောက်လုပ်တဲ့ လေယာဉ်ကွင်း အတော်များများဟာ ဆင်ဖြူတော်စာရင်းဝင်ကြတယ်။ မဒရစ်တောင်ဖက်က Ciudad Real Airport လေဆိပ်။ မြောက်အမေရိကမှာ အကြီးဆုံး Montréal-Mirabel International Airport လေဆိပ်။ Lambert-St. Louis International Airport runway လေဆိပ်ပြေးလမ်း။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုံးက ဂျပန် Yamato စစ်သင်္ဘော။ အဲလို ခေတ်သစ် ဆင်ဖြူတော်စာရင်းက အရှည်ကြီးရှိပါတယ်။
၂ဝ၁၂ ခုနှစ်က စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ပွဲတွေလမ်းတွေနဲ့ ရွှေတွေငွေတွေ၊ ရတနာတွေစီခြယ်ပြီး၊ တခန်းတနား လုပ်ခဲ့တယ်။ ၂၈-၁၁-၂ဝ၁၁ နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာမှာ ဧရာဝတီတံတားဖွင့်ပွဲ တက်ရောက်တဲ့ သမတ ဦးသိန်းစိန်ကနေ ဆင်ဖြူတော်ဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ရတနာတပါးဆိုပြီး မိန့်ခွန်းထဲမှာ ထည့်ပြောသွားခဲ့တယ်။
ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်မှာ ထိုင်းကနေ စစ်ပွဲမှာ ရဲရဲတောက်တိုက်နိုင်တဲ့ ကိုယ်ခန္ဒာကြီးကြီး ဆင်မည်းတကောင်ကို ဆင်ဖြူတော်ဆိုပြီး မင်းနေပြည်တော်ကို ပို့လိုက်ပါတယ်။ ဆင်ဝန်တွေက ဆင်ဖြူတော်အင်္ဂါ ပါမပါ စစ်ဆေးပေမဲ့ တခုမှ မတွေ့လို့ အခက်တွေ့နေကြတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ဦးပေါ်ဦးကို အကူအညီတောင်းကြရတယ်။ နောက်နေ့ မနက်ခင်းမှာ ဘုရင်က သူ့ဘုန်းတန်ခိုးအရပေါ်တဲ့ ဆင်ဖြူတော်ကို လာပြီးရူစားတော့တယ်။ ဆင်ဝန်ကို ဆင်ဖြူတော်အင်္ဂါပါလား မေးပါတယ်။ ဆင်ဝန်ကလည်း တိတ်နေတော့ ဘုရင်က ပေါ်ဦး လျှောက်တင်စမ်းဆိုတော့၊ ပေါ်ဦးက ဆင်မည်းကို သေချာလှည့်ပတ်ကြည့်ဟန်ပြုပြီး မှန်လှပါ ဆင်အမျိုးမှာ ကာဠဝကဆင်၊ ဂင်္ဂေယျဆင်၊ ပဏ္ဍရဆင်၊ ဥပေါသထဆင်၊ ဟေမဆင်၊ ဆန္ဒန်ဆင်ဆိုပြီး အမျိုးအမျိုးရှိရာ ယခု လက်ရှိ ဆင်ကြီးမှာ ဘုန်းတော်ကြောင့် ဟေမဆင်မျိုး ဖြစ်ကြောင်းပါ။ ဟေမဆင်မျိုးမှာ နောက် နှစ်ပေါင်း ၆ဝ ကျော်လျှင် ဖွေးဖွေးဖြူလာကြောင်းပါလို့ လျှောက်တင်လိုက်ပါသတဲ့။
ကျွန်တော်ကတော့ Chikungunya ချီကန်ဂွန်ညာကို ဆင်ဖြူတော်တုပ်ကွေးလို့ အမည်ပေးထားတယ်။ ၅ဝဝဝ တန်ကို စက္ကူဆင်ဖြူတော်လို့ ခေါ်တယ်။
မင်္ဂလာပါ ဆရာရှင့် သားလေးက စအိုဝနားလေးမှာ ပြည်တည်နာ ပောက်လို့ ခွဲရပါတယ်ဆရာ p.o Cefixime 15mg BD-5Ds 5Ds တနေ့ ၂ကြိမ်လား တနေ့ ၁ကြိမ် တိုက်ရမှာလား ဖြေကြားပေးပာဆရာ
OD = တနေ့ ၁ ကြိမ်၊
BD = bid = တနေ့ ၂ ကြိမ်၊
TDS = q8h = တနေ့ ၃ ကြိမ်၊
QID = q6h = တနေ့ ၄ ကြိမ်၊
HS (hora somni) = ညအိပ်ရာဝင်၊
PC (postcibal) = အစာနဲ့သောက်ပါ၊
CM (coming morning) = မနက်အိပ်ရာထ၊
Stat = ချက်ချင်းသောက်-ထိုး-သုံးပါ၊
PRN = SOS = လိုအပ်တဲ့အချိန်၊
IM = ကြွက်သားထဲထိုးဆေး၊
IV = သွေးပြန်ကြောထဲထိုးဆေး၊
SC = အရေပြားအောက်ထိုးဆေး၊
Medicines ဆေးသောက်နည်း https://doctortintswe.blogspot.com/2019/07/medicines.html
OnceaDay Meds တနေ့တကြိမ်ဆေးများ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/12/once-day-meds.html
The Third Eye တတိယမျက်လုံး
တင်ထားတာတွေ့တယ်။ သူတို့ညီအကိုတွေ ငယ်စဉ်ကဖတ်ခဲ့တဲ့ တတိယမျက်လုံးစာအုပ်တဲ့။ နှစ်ယောက်လုံးက သူငယ်ချင်းတွေ။
မူရင်း - The Third Eye by T. Lobsang Rampa (published in November 1956)
ဘာသာပြန်သူ - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
(မျှဝေသူ ခရက်ဒစ် - burmeseclassic.com)
burmeseclassic link: http://www.mmbookdownload.com/ebook-the-third-eye.html
ဘာသာပြန်သူကလည်း ဒေါက်တာသန်းထွန်း။ ကောင်းမဲ့စာအုပ်။ ကျွန်တော်က စာအုပ်အဖုံးအရင် မူရင်းစာရေးသူ အမည်ကို ဖတ်တာနဲ့ တိဘက်လို့သိတယ်။ သူတို့မှာ လော့ဘ်ဆန် အမည်တွေများတယ်။ အိန္ဒိယမှာ ၂၄ နှစ်ကြာ နေခဲ့စဉ်က တိဘက်တွေနဲ့ အလွန်ခင်မင်ရင်းနှီးတယ်။ ဒလိုင်းလားမား၊ တိဘက်ဝန်ကြီးချုပ်၊ တိဘက်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ တိဘက်လူငယ်၊ တိဘက်အမျိုးသမီးတွေ။ သူတို့ကြိုပမ်းမှု ကျွန်တော်တို့ထက် ခက်တယ်။
ကျွန်တော်တို့မှာ တတိယအင်အားစုဆိုပြီး မကြာခဏပေါ်တယ်။ တတိယမျက်လုံး မရှိ။ ရှိတဲ့နှစ်လုံးတောင်မှ တဖတ်ပိတ်ကြည့်သူတွေရှိတယ်။
ဟား ဟား သွား တချောင်း မှ မရှိဘူး
မောင်စိန် ရေးဆွဲတဲ့ကာတွန်း။ ကြာပါပြီ။
ခုခေတ်မှာတော့ (တစ်) ချောင်းသမား များတယ်။
သွား တချောင်းတည်းသာ ကျန်တဲ့အထိ သတ်ပုံမှားရေးကြလိမ့်မယ်။
တူမတယောက်က သူ့အဖိုးအဖွားတွေခြံထွက် သနပ်ခါးတုံးတွေပုံ တင်ထားတယ်။
သနပ်ခါးကို ရုက္ခဗေဒမှာ Limonia acidissima လို့သာတွေ့တယ်။ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်မှလည်း အဲလိုပဲ ရေးထားတယ်။ အမှန်က သီးပင်ကိုသာ အဲလိုခေါ်ပါတယ်။ မျိုးစိတ်ဖြစ်မယ်။
စောစောက တယောက်က ယူနီကုဒ်ကြောင့် စမတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ ဝိကီပီးဒီယားမှာရှာတော့ ပိုဆိုးတယ်။
အင်္ဂလိပ်အမည် = Chinese Box Tree တဲ့။ တရုပ်နဲ့တော့ မဆိုင်ဘူးထင်တယ်။ အဲတာက ပန်းပင်။ Wood Apple တဲ့။ အဲတာလည်း မဟုတ်ပါ။
မျိုးရင်း = Rutaceac
မျိုးစု = Limonia
မျိုးစိတ် = L.acidissima
သိပ္ပံအမည် = Naringi crenulata (Roxb)
Hespercthusa crenulata (Roxb) Rocam
သနပ်ခါး သူများနိုင်ငံတွေမှာ မရှိ။ ပါးကွက်သား၊ သူများနိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိ၊
အမတ်လောင်းတွေကို ကြိုဆို၊ နောင်မှာ အမတ်လောင်းဖြစ်မယ့် အပျိုမ ပါး သနပ်ခါး။
အမတ်ဟောင်းရဲ့ ဆုတောင်းစကား၊ မြန်မာတပြည်လုံး သနပ်ခါးလို မွှေးစေသား၊ အာဏာရှင်ပါးကွက်သားဘေးက ဝေးစေသား။
Grade 12 ဆယ့်နှစ်တန်း
ဆရာကိုပဲ အကူအညီတောင်းလိုပါတယ် မြန်မာပြည်ပညာရေးစနစ်သစ်ရဲ့ Grade-12 ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင်ရိုးမှာ ဘယ်လိုဘာသာရပ်တွေ ပါဝင်မယ်ဆိုတာ သိထားရင် ဗဟုသုတဖြစ်ဘွယ် မျှဝေပေးစေလိုပါတယ်ဆရာ
ယူအက်စ်အေ USA 12th Grade Curriculum
Algebra2or Precalculus or Statistics
Science Physics or Science Elective
Social Studies Economics
General Elective Fine Arts/Music Technology/Computer Science/Physical Education
Foreign Language Spanish or French
From the age of 11-14, students will studyabroad range of subjects such as Music, Math, Science, English, etc. When reaching 14, students usually enter into their first year ofa2-year process known as your GCSE (or SCE for those who are in Scotland). GCSEs areaset of exams that test your knowledge. Most schools follow the same method when it comes to GCSEs and you will take the following core subjects:
Sciences (either combined or separate Biology, Chemistry and Physics)
Students typically then select an additional4or5subjects to take in the GCSEs, and they can be subjects like French, German, Business Studies, Design and Technology, Music, and many more.
အိန္ဒိယ India CBSE Science Class 12 - Subjects, Syllabus
III to V: Three Electives out of the following,
မြန်မာပြည်မှာလည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်နေတယ်လို့ ကြားရတယ်။ နည်းနည်းသာ သိသေးတယ်။ မနေ့က ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီးရေးတာ ဖတ်ရတယ်။ အကုန် အမှန်တွေ။
ကျွန်တော် ပညာရေးကျဆင်းခဲ့ခြင်းစာ ရေးနေတာ မတင်သေးပါ။ အချုပ်ပြောရရင် အုပ်စုံ။ အကုန်ကျဆင်းတာထဲမှာ ပညာရေးပါတယ်။ အကြောင်းခံနဲ့ ရလဒ်မှာ နိုင်ငံရေးက ထိပ်က။ နိုင်ငံရေးမကောင်းတာ ကြာလာတော့ လူတွေပါ ညံ့ကုန်တယ်။ တိုင်းပြည်ပါ ညံ့ရော။ ဆောရီး။ ကန်တော့။ ကျွန်တော်တို့လည်း ဘယ်လွတ်မလဲ။
Trouble ဒုက္ခ ဒုက္ခ ဒုက္ခ
TUE 7:54 PM
၄ ခုဖျက်လိုက်ရတယ်။ နောင်တသက်လုံး မပို့ပါရန်။
ဗျာ ဆရာ မှားနေပြီထင်ပါတယ် ဆရာ 😞 Gif ကွန့်မန့်ပေးနည်းတွေ ကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ပါဖူး ဆရာ တခါမှလည်း ကွန့်မန့်မပေးဖူးဘူး ။ မန့်တဲ့သူ သေချာ ကြည့်ပေးပါအုန်း ဆရာ ။ လေးစားလျှက်ပါ ။ ဆရာကျေးဇူးပြု၍ မန့်တဲ့သူကို ကြည့်ပေးပါဆရာ ။ ကျွန်တော့် gif ကွန့်မန့်တွေ မသုံးပါဖူး ။
အဲလိုတွေ ပြန်လာလို့ ဓါတ်ပုံရိုက်တယ် တခါခါ Snapping tool နဲ့ ပုံလုပ်ထားတယ်။ အခုပုံတွေကို ပြန်ရှာနေတာ မတွေ့သေးပါ။
အဲလို မကြာခဏကြုံရတယ်။ တချို့က တောင်းပန်တယ်။ တချို့က ကလေးဆော့တာလို့ပြောတယ်။ တချို့က ဘာမှ မပြော။ တချို့က ထပ်ပို့တယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ဒုက္ခတမျိုး။
စောစောက အာထွာဆောင်း အဖြေစာတခု မေးခွန်းနဲ့အတူ လာတယ်။ ပုံက တစောင်း။ အဲတာမျိုးကို ဆေ့ဖ် လုပ်၊ ဖွင့်၊ တည့်၊ ချဲ့၊ ဖတ်၊ ဖြေ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ဒုက္ခတမျိုး။
ဖေါင့်မတူတာတွေလာရင် ကော်ပီလုပ်၊ ဖေါင့်ကွန်ဗာတာဖွင့်၊ ပေ့စ်လုပ်၊ ပြောင်း၊ နုတ်ပဒ်မှာတင်၊ ကူးယူ၊ ဝဒ်မှာ ပေ့စ်လုပ်၊ ဖတ်၊ ဖြေ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ဒုက္ခတမျိုး။
ဒီတခါက အမေပါဆရာ အသက်က ၆၅ပါဆရာ။ ညာလက်က ၂ရက်ဆက်တိုက် ကိုက်ခဲနေလို့ ထွနးရွှေဝါ vortex အခြား လိမ်းဆေးတွေ လိမ်းပါတယ်။ နောက်နေ့မှာ ရေယုံတွေ ပေါက်လာပါတယ်ဆရာ။ လက်တခုလုံး ပေါက်တာပါဆရာ။ အရေပြားဆရာဝန်နဲ့ပြပါတယ်။ အနာပျောက်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ လက်မောင်းမှာ အကျိတ်တွေကျန်ပြီး ကိုက်နေတယ်ဆရာ။ အကျိတ်က အဆီကျိတ်ပုံဆံပါ။ အလုံးပုံစံမဟုတ်ဘဲ အပြားအကျိတ်ပါဆရာ။ တနေ့က ကဒက်ရွက်ကို အနာပေါ် အုံလိုက်တာ ရေယုံတွေ ထပ်ပေါက်လာလို့ဆရာ ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲဆရာ။ အရေပြားဆရာကတော့ ရေယုံသာကုနိုင်တာ အကျိတ်ကတော့ သူမနိုင်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်ဆရာ။ အကြံပေးပါအုန်း ဆရာ။
အရပ်ဆေးနည်းတွေကြောင့် ဖြစ်ပါမယ်။ ဆောရီး။ မတည့်တာ မသင့်တာကနေဖြစ်မယ်ထင်ရတယ်။ ဆရာဝန်ပြထားပြီး ထူးဖြည့်ရန်မရှိပါ။
အဲလိုတော့ ဖြေလိုက်တယ်။ ထပ်ဖြည့်ပါမယ်။ ရေယုံလို့ သိပ်မထင်။ ဓါတ်မတည့်တာကြောင့် အရေပြားမှာဖြစ်တာလို့ ထင်တယ်။ ကော်တီဇုန်းလမ်းဆေး လိုတော့မယ်။ ပိုဆိုးသူတွေကို ကော်တီဇုန်း စားဆေးပါပေးရတယ်။ သိပ်ဆိုရင် ထိုးဆေး။ မတည့်ကို တသက်လုံးရှောင်ရမယ်။
အကျိတ်ဆိုတာ အဲတာကနေဆက်ဖြစ်တဲ့ တက်စေ့ ခေါ် လင့်ဖ်နုတ်လေးတွေနဲ့ တခြား တစ်ရှူး ခေါ် ဆဲလ်တွေ ရောင်တာ ဖြစ်နိုင်။ ကြာရင် သက်သာသွားမယ်။ ပါရာစီတမောက ရောင်တာနဲ့ နာတာကို သက်သာစေတယ်။ အနာရင်းသလို ဖြစ်ရင်တော့ ပိုးသေဆေးပါလိုမယ်။
တင့်တယ်လှသော အင်ကြင်းပင်ကြီး တပင်အောက်သို့ ဝင်ရောက် နားလေ၏
တူမတယောက်နဲ့အဖွဲ့ ဘုရားဖူးသွားနေကြတာ ကနေ့ သံဝဇေနိယလေးဌာနထဲက ဘုရားလောင်းမွေးဖွါးတဲ့နေရာ လုမ္ဗိနီကို ရောက်ကြသတဲ့။
ဦးမြင့်ဆွေ မဟာဝိဇ္ဇာ (လန်ဒန်) ရေးသားတဲ့ မဟာဗုဒ္ဓဝင်သစ်စာအုပ် အနားမှာရှိတယ်။ အလောင်းတော် ဖွားမြင်ခြင်း အခန်းမှာ -
ယင်းသို့သွား၍ နှစ်ပြည်ထောင်အကြား၌ နှစ်ပြည်ထောင်သားတို့ ဆွတ်ခူးသုံးဆောင်ရာ သာယာလှသော လုမ္ဗိနီ အင်ကြင်းတောသို့ ရောက်၍ ပင်လုံးကျွတ်ပွင့်လျက် တင့်တယ်လှသော အင်ကြင်းပင်ကြီး တပင်အောက်သို့ ဝင်ရောက် နားလေ၏။ ထိုအခါ အင်ကြင်းပင်၏ အခက်သည် ကိုင်းညွှတ်ပေးလေ၏။ မိဖုရားကြီးသည်ထိုသစ်ခက်ကို လှမ်းကိုင် လိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ကမ္မဇလေလှုပ်လေ၏။ မောင်းမကိုယ်လုပ်တို့သည် ချက်ခြင်းပင် တင်းတိမ် ကာရံ ပေးကြလေ၏။
သတ်ပုံကိုပါ မှတ်သားကြစေလိုပါတယ်။ တ စာလုံးတွေကို မလိုအပ်ပဲ စ မသတ်ပါ။
စာအုပ်ဟောင်းက ကျွန်တော့်စာအုပ်။ လက်ထဲပြန်ရောက်လာတာ တံဆိပ်တုံးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အဲလို သတ်ပုံတွေနဲ့သာ သင်ခဲ့ရ ဖတ်ခဲ့ရလို့ ပလီပြီးပြင်ထားတဲ့ သတ်ပုံသစ်တွေကို ပြောပြောနေရတာ။
ဤသို့ အလောင်းတော်သည် တပါးတည်း ဆိတ်ငြိမ်စွာ တရားအားထုတ်သဖြင့်
ဦးမြင့်ဆွေ မဟာဝိဇ္ဇာ (လန်ဒန်) ရေးသားတဲ့ မဟာဗုဒ္ဓဝင်သစ်စာအုပ်ပါ သတ်ပုံတွေကို တင်ပြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အဲလို သတ်ပုံတွေနဲ့သာ သင်ခဲ့ရ ဖတ်ခဲ့ရလို့ ပလီပြီးပြင်ထားတဲ့ သတ်ပုံသစ်တွေကို ပြောပြောနေရတာ။
ပြည်ပြေးတယောက် ဟိုရောက် သည်ရောက်ဆိုပြီး ပြည်ပနိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့ရစဉ်က အမှတ်တရပုံလေးတွေ တင်ပါတယ်။ ကွန်မင့်တခုရတယ်။ Minmin Htun Tun အတ္တမပါတဲ့ ...
Tuberculosis vaccine တီဘီ ခေါ် ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ဆေး...
Questions on 18-10-2019
Questions on 19-10-2019
Women Height အရပ်ရှည်ချင်လို့ပါ
Fever and Baby ကလေးနှင့် အဖျား
Citrus Fruits ကမ္ဗလာသီး နှင့် လိမ္မော်သီး
Yeast Infection မွေးလမ်းမှိုပိုး
ဟုတ်ကဲ့ရှင်း မကြိုက်ပါဘူးစင့် ဟုကဲ့ဆင့်
တရာတန် တကျပ်တန် တပဲတန်
October Liver Cancer Awareness Month အောက်တိုဘာ အသ...
Ethiopia and Myanmar အီသီယိုးပီးယားနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ
Zantac ဆေး ပြန်သိမ်း
Coffee Shop Talks ကော်ဖီဆိုင်
Quotes on Honesty ရိုးသားမှု အဆိုအမိန့်များ
Top 10 Deadliest Diseases ထိပ်တန်းရောဂါ ၁၀ ခု
A Midsummer Nights’ Dream နွေလယ်အိပ်မက် ပြဇာတ်
Coughing into the elbow ချောင်းဆိုးခဲ့ပါသည်
Dussehra အဆိုးကို အကောင်းကနိုင်တဲ့ပွဲ
Myths မဟုတ်သော မမှန်သော မှားသော လွဲသော
ပဘာဝတီ နှင့် ပပငယ်လေ
Columbus Day ကိုလမ်ဘတ်စ်နေ့
Scrubs ဆေးရုံသုံး ဝတ်စုံ
ယောက်ျားလေး အမျိုးသား မိန်းကလေး အမျိုးသမီး
တော်ပါပြီဆက်မလှမ်းချင်ဘု နှင့် မိုက်မလင်းနိုင်ဘု
Gangster Land ဂိုဏ်းကြီး ၃ ဂိုဏ်းရှိတယ်
Myths မဟုတ်တာတွေ ပြောကြရအောင် အဆက်
My Dream Essay ညကအိပ်မက် စာစီစာကုံး
Book Face ဘွတ်ဖေ့စ်
ပညာ ရွှေတုံး ရှာမဆုံး
Red Meat အသားစား သုတေသန
နိုင်ငံရေး ဆေးပညာ သုတစာ
Back Dimples ခါးချိုင့်ခွက်
Deep Well ပညာတွင်း နက်ခြင်း
နုန့်နှေး နဲ့ နှောင့်နှေး
Life Span သက်တမ်း
ဖိုး နှင့် ဘိုး
Walking Backward နောက်ပြန်သွားခြင်း
Blocked List တံမြက်စည်း
Official Mistake တရားဝင်အမှား
Education အမှတ် ထပ်လျော့လိုက်တယ်
World Teachers' Day ဆရာများနေ့
Cancer death ကင်ဆာနဲ့သေဆုံးရခြင်း
Unicode အပြေးအလွှား ဒရောသောပါး ခုန်ကျော်၍ ကောက်ချက်...
Comment ကွန်မင့်ဟူသည် နံရံမှာစာရေးခြင်းမဟုတ်
The Art of Right Choice ဘာဝယ်ဝယ် ရွေးတတ်ရတယ်
The Kings ဘုရင်များ